လူကြီးသမီး – Grab Love Story
ချိန်က ၁၉၈၆ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ..။
နေရာက မြန်မာပြည်အရှေ့မြောက်ပိုင်း တနေရာ …။
မကြာခင် မှောင်တော့မည် ။
မြူတွေဆိုင်းနေတဲ့ တောင်ကြောကြီး တလျှောက် မှန်ပြောင်းနဲ့ ကြည့်နေတုံး ဆရာကြီးမောင်လုံး သူ့ဘေးကို ရောက်လာသည် ။ ဆရာကြီးမောင်လုံးရဲ့ လက်ထဲမှာ အငွေ့တထောင်းထောင်းထနေတဲ့ မတ်ခွက်တခွက် ပါလာသည် ။ “ ဗိုလ်ကြီး ..ရေနွေး”
လို့ ပြောရင်း သူ့ကို မတ်ခွက် ကမ်းပေးသည် ။
ကတုတ်ကျင်းတွေ ထဲမှာ ရဲဘော်လေးတွေ ငြိမ်နေသည် ။သူတို့လည်း သူ့လိုဘဲ စခန်းကုန်း အောက်က တောတန်းတွေကို
စူးစိုက်ကြည့်နေကြသည် ။ နေဝင်ပြီး အမှောင်ထု လွှမ်းလာတာနဲ့ သူတို့နဲ့ အင်အားချင်း အဆမတန်ကွာတဲ့ ရန်သူတွေ သူ
တို့ကို အလုံးအရင်းနဲ့ လာတိုက်ခိုက်ကြတော့မှာကို သိနေလို့။ စွန့်စွန့်စားစား တိုက်ပွဲဝင်ကြရတော့မည် မဟုတ်လား ။
“ ဆရာမောင်လုံး…ဒီညတော့ ဒီကောင်တွေ ကျနော်တို့ကို အသေအလဲ ဆော်လိမ့်မယ်ဗျ..ရထားတဲ့ သတင်းအရ သူတို့ကို
အနောက်ဖက်က စစ်ကူပို့လိုက်တာတွေ ရောက်လာပြီ ဆိုတော့ အင်အားကောင်းကောင်း နဲ့ ကျနော်တို့ စခန်းကုန်းကို တက်သိမ်းမှာ သေချာတယ် …ကောင်လေးတွေ စိတ်ဓါတ် အခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ….”
“ ဟိုဖက်တောင်ကုန်းက ဗိုလ်ကြီးသက်ထွန်းတို့ တပ်စုတစုလုံး ကျသွားတာ သူတို့သိတော့ မလွယ်မှန်းတော့ သိတာပေါ့
“ စစ်ကူတော့ တောင်းထားတာဘဲ …ဆရာမောင်လုံး …သူတို့ အချိန်မှီ ရောက်မလာရင်တော့ ကျနော်တို့ စခန်းလဲ ကြံ့ကြံ့ခံထားဖို့ မလွယ်ဘူး…”
နေ့လည်တုံးက သူနဲ့ သူ့လူတွေ ခံစစ်အတွက် အကြီးအကျယ် အလုပ်များခဲ့ကြသည် ။ သူတို့ စခန်းပေါ်ကို ရန်သူတွေ
လွယ်လင့်တကူ တက်မလာနိုင်အောင် ၀ါးချွန်တွေ စိုက်မြှု့ပ်..စည်းရိုးတွေ အထပ်ထပ်ကာ..မိုင်းတွေ မြှုပ်…ရန်သူဝင်လာနိုင်မယ့်
လမ်းကြောင်းတွေကို လေ့လာပြီး ကတုတ်ကျင်းတွေ ဆက်သွယ်ရေး တူးမြောင်းတွေ တူး..မကြာခင် ကြုံလာမယ့် ညတိုက်ပွဲ
အတွက် ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည် ။
ပစ်လို့ မနိုင်အောင် လူအင်အား များပြားလှတဲ့ ရန်သူသည် ဖုတ်ဝင်တဲ့ ဖုတ်ကောင်တွေလို ဒလစပ် ပစ်ခတ်နေတဲ့ကြားက
တက်မြဲတက်ပြီး “ လူရေလှိုင်းကြီး ”တွေနဲ့ သူတို့ကို ၀ါးမြို ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့လို့ သူတို့ရဲ့ ရဲဘော်ရဲဖက်တွေ အများကြီး ကျဆုံး
ခဲ့ရပြီ ။ အမှောင်ထုကို အကာအကွယ်ယူပြီး ဒီည ရန်သူတပ်တွေ လာတိုက်ကြမှာ အသေအချာဘဲ ။ ရန်သူ လာမယ်မှန်း သိ
ပေမယ့် သူတို့ကတော့ နောက်ဆုတ်ပေးလိမ့်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒီလိုသာ နောက်ဆုတ်ပေးရရင် ဒီကောင်တွေ တနိုင်ငံလုံးကို
၀ါးမြိုသွားတော့မှာပေါ့ ။ ငါတို့မြေကို တလက်မမှ အထိမခံဘူး..အပြုတ်နှံပစ်ကြရမယ် လို့ ရဲဘော်တွေကို သူ ပြောသည် ။
ရဲဘော်တွေကလဲ သူနဲ့ ထပ်တူဘဲ အသက်ပေးပြီး တိုက်မည် လို့ ကြွေးကြော်ကြသည် ။ ကျူးကျော်စစ်ကို တားဆီးတဲ့ ခံစစ်သည် တရားသော စစ်ပွဲဖြစ်လို့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကိုယ် ကာကွယ်ရင်း သေရတာ မြတ်သည် လို့ သူတို့ စိတ်မှာ ခံယူထား
စခန်းပေါ်ကို တက်လာမယ့်ရန်သူကို တက်မလာနိုင်အောင် အတားအဆီးတွေ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ရုံမကဘူး ။ ကျည်ကပ်
တွေ အားလုံး ကျည်ဖြည့်သွင်း..သေနတ်လက်နက်တွေကို တိုက်ချွတ်အသင့်ပြင်ရသည် ။
ဒီစခန်းကို သူတို့ လာတိုက်တာ လေးကြိမ်ရှိပြီ ။ တခါတခါ လာတိုက်တိုင်း သူ့ရဲဘော်တွေ ကျခဲ့တာ အခုဆိုရင် သူတို့စခန်း
မှာ လူတော်တော် နည်းနေပြီ ။ လူအင်အားသုံးပြီး သူတို့ကို အပြုတ်ဆော်နေတဲ့ ရန်သူတွေသည် ပစ်ခတ်လို့ မနိုင်အောင်ကို
များလှသည် ။ အခုလဲ သူတို့စခန်းကုန်းကို အဖက်ဖက်ကနေ ၀ိုင်းထားသည် ။ ရဲဘော်တွေ စိတ်ဓါတ်မကျအောင် စစ်ကူလာ
တော့မယ့်အကြောင်း..တောင့်ခံပြီး တိုက်ဖို့ သူပြောထားသည် ။ ရန်သူတွေသည် အသံချဲ့စက်နဲ့ သူတို့ကို လက်နက်ချဖို့
ပြောနေသည် ။ ၀ါဒဖြန့်စကားလုံးများသည် နားကြားပြင်းကပ်စရာကောင်းလှသည် ။ ကျည်ဆံကို ချွေတာနေရတာကြောင့် အ
သာ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ငြိမ်နေရသည် ။ ဖြစ်နိုင်ရင် အသံတိတ်သွားအောင် လောင်ခြာနဲ့ လှမ်း ထုပစ်ချင်သည် ။ သူတို့ တကယ်တက်လာမှ အနီးကပ် ထိထိရောက်ရောက် ပစ်ကြရမည် ။
မှောင်တာနဲ့ တက်လာကြမယ့် ရန်သူတွေကို ခံတိုက်ဖို့ တနေကုန် ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည် ။ ရန်သူ လာမယ့်လမ်းကြောင်းတွေကို
ကြိုတင် စဉ်းစားပြီး စက်လတ်နှစ်လက်ကို ဘန်ကာတွေထဲမှာ ဆင်ထားခိုင်းသည် ။
တိုက်ပွဲတော်တော်များများ ကြုံ ပြီးခဲ့တာမို့ ရန်သူရဲ့ တိုက်ကွက်တွေကို သူတို့ သိထားပြီ ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်က ရန်သူသည် အလုံးအရင်းနဲ့ လူအင်အား သုံးပြီး သူတို့ စခန်း၃ခု ကို ဝင်တိုက်သည် ။ တဖက်ကတောင်ကုန်းတွေက စခန်းနှစ်ခု ကျသွားသည် ။ သူတို့ စခန်းကိုလဲ လက်နက်ကြီးတွေ ဖိပစ်ပြီး တက်သိမ်းဖို့ ကြိုးစားသည် ။
ခုထိတော့ ကြံ့ကြံ့ခံနေတုံးဘဲ ။ အကျအဆုံးများခဲ့သည် ။ ဒီညကော ဘယ်လိုလဲ ..။ စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေ အချိန်မှီ မရောက်
လာခဲ့ရင် သူတို့ကော တင်းခံထားနိုင်ပါ့မလား …။
လွယ်လုံကျန်ဖက်ဆီက အမြောက်သံတွေ သဲ့သဲ့ ကြားနေကြရသည် ။
ရန်သူတွေသည် အဲဒီဖက်တွေမှာလည်း ထိုးစစ်တွေ ဆင်နေပြီ ဆိုတာ သိနိုင်သည် ။ မိမိတို့ လေကြောင်းက ရန်သူတပ်တွေ
ကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ကြသလို ရန်သူတွေကလည်း လေယာဉ်ပစ်လက်နက်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ကြကြောင်း လည်း သတင်းကြားရသည် ။
ခြေသံ တရှပ်ရှပ်ကြောင့် သူ နိုးသည် ။
ဆေးသောက်ဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ ထင်တာဘဲ ။ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ အပြုံးလေးနဲ့ “ ဗိုလ်ကြီး…နိုးပြီလား …” လို့ မေးလိုက်တဲ့ သူနာပြုမလေးကို တွေ့ရသည် ။ သူ ဒီ ဆေးရုံကြီးကို ရောက်နေတာ ဆယ်ရက်တိတိ ရှိပြီ ။ ပြင်းထန်လှတဲ့တိုက်ပွဲသည် သူတို့ ထင်ထားသလိုဘဲ ဖြစ်ခဲ့သည် ။ ရှိသမျှအင်အားနဲ့ စွမ်းစွမ်းတမံ ခုခံ ခှုကြသည် ။ သူ့လူတွေ အကုန်နီးပါး ကျဆုံးကုန်ကြရသလို သူ့ကိုယ်မှာလည်း ရန်သူ့ ကျည်ဆံတွေ ထိမှန်သည် ။ ရန်သူရဲ့ လက်ပစ်ဗုံးတွေကြောင့် သူရှိနေတဲ့
ဘန်ကာပြိုကျပျက်စီးပြီး သူ့အပေါ်ကို ပိသည် ။ သို့ပေမယ့် စစ်ကူတပ်တွေ ရောက်လာလို့ သူ့ကို အချိန်မှီ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့
ဒီဆေးရုံကြီးကို ပို့ပေးနိုင်ခဲ့ကြသည် ။ သူနဲ့အတူ သူ့ရဲဘော်နှစ်ယောက်လဲ ပါသည် ။ ရဲဘော်တွေရဲ့ခြေထောက်တွေ ဖြတ်တောက်လိုက်ရကြောင်း သူသတိရလာချိန် သိခဲ့ရသည် ။ အံကိုကြိတ် ..လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ရင်း သူ့မျက်လုံးတွေက မျက်ရည်တွေ စီးကျလာသည် ။
တိုက်ရည်ခိုက်ရည် ကောင်းပြီး အားကိုးရတဲ့ ဆရာကြီးမောင်လုံး ကျဆုံးသွားရတာကို နှမြောလို့ မဆုံးဘူး ။ ဆရာကြီးမောင်လုံး
ကို မျက်စိထဲမှာ ပြန်လည် မြင်ယောင်မိနေသည် ။
ရန်သူကို သူ နေပြန်ကောင်းတာနဲ့ ပြန်လည်ရင်ဆိုင်မည် လို့ ကြုံးဝါးခဲ့မိသည် ။ ကံအားလျော်စွာ သူသည် ဆေးရုံကို အချိန်မှီရောက်ခဲ့ရတာ
ကြောင့် အသက်မဆုံးရှုံးရပေမယ့် တော်တော်လေး ကြာအောင် ကုသအနားယူရမည် လို့ ဒီဆေးရုံကြီးက ဆရာဝန်တွေက
ကိုယ့်ဖက်က စစ်သည်တွေ အများကြီး အသက်စတေးနေရတဲ့ သည် စစ်မြေပြင်ကို အမြန်ဆုံး ပြန်သွားပြီး တိုက်ပွဲဝင်ချင်တဲ့
စိတ်တွေကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ သူနာပြုတွေ စကားကို တသွေမတိမ်း နားထောင်ပြီး အမြန်သက်သာပျောက်ကင်းဖို့ သူကြိုး
သူ ဒါဏ်ရာရပြီး ဆေးရုံ မှာ ရောက်နေတဲ့အကြောင်း ရွှေရေး သိသွားပြီး သူ့ဆီကို လိုက်လာသည် ။
ရွှေရေးသည် သူ့ကို စစ်တပ်ထဲဝင်တာကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ခဲ့သူမို့ အခုလို ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရလာတဲ့အခါ ရွှေရေး
အတွက် သူ့ကို အပြစ်တင်ဖို့ အချက်တချက် တိုးလာသည် ။
“ ငါမပြောဘူးလား…ထင်အောင်ကျော်ရယ် …နင့်ကို ငါ အတန်တန်တားခဲ့သားဘဲ..နင် အေးအေးဆေးဆေးဘဲ ငါနဲ့ အတူတူ
ငါတို့မိဘလက်ငုတ်လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ပါလို့…ကဲ..မသေကောင်း မပျောက်ကောင်း ဟာ…နင် ဆေးရုံက ဆင်းရင် စစ်တပ်က
ထွက်လိုက်..ငါနဲ့ဘဲ အလုပ်လာလုပ်….” လို့ တွေ့တွေ့ချင်း ပြောတော့တာဘဲ ။
ရွှေရေး တင်မကဘူး ။ ရွှေရေးရဲ့ မိဘတွေကပါ သူ့ကို စစ်တပ်က ထွက်လိုက်ဖို့ ပြောကြသည် ။ ရွှေရေးနဲ့ သူ့ကို သူ့ဖက်ကရော ရွှေရေးဖက်ကပါ လက်ထပ်စေချင်ကြပြီ လို့ ရွှေရေးက သူ့ကို ပြောသည် ။ သူရှေ့တန်းမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်တိုက် တိုက်နေရတာကြောင့် ရွှေရေးနဲ့ လက်မထပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး ။ သူ ရွှေရေးကို လက်ထပ်ချင်ပေမယ့် သူ့ရဲဘော်ရဲဖက်တွေနဲ့အတူ ကျူး
ကျော်ဝင်ရောက်နေတဲ့ ရန်သူတွေကို တားဆီးတွန်းလှန်ချင်နေတဲ့ စိတ်တွေကြောင့် ရွှေရေးကို အရင်မလိုဖို့ ပြောမိသည် ။
ရွှေရေးက သူ့ကို “ နင် ငါ့ကို တကယ် မချစ်ပါဘူး..ထင်အောင်ကျော်ရယ် ..နင်ချစ်တာ နင့်အလုပ်..နင့်ရဲဘော်တွေ ဆိုတာ
ကို ငါ သဘောပေါက်ပြီ …နင်နဲ့ ငါနဲ့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး …” လို့ ပြောပြီး ရန်ကုန်ကို ပြန်သွားသည် ။
ဆေးရုံပေါ်မှာ ပက်လက်လှဲနေရတဲ့အချိန် ရွှေရေး စိတ်ကောက်သွားတာကို သူ လိုက်မချော့နိုင်ဘူး ။
ရွှေရေးက ပြန်သွားခါနီး “ နင် ငါ့ကို ရိုးသွားလို့ ငါ့ကို လက်ထပ်ဖို့ အချိန်ဆွဲခဲ့တာလား ထင်အောင်ကျော်…” လို့ မေးသည် ။
“ ဟာ…ရွှေရေးရယ် ..ဘယ်လို ပြောလိုက်တာလဲ ..နင့်ကို ဘာလို့ ငါက ရိုးရမှာလဲ..နင့်ကို ငါ မကြာခင် လက်ထပ်မှာ…” လို့ သူ ပြန်ပြောသည် ။
“ တော်ပါဟာ…နင် ငါ့ကို တကယ် မချစ်ပါဘူး …”
ရွှေရေး သူ့ကို ထားခဲ့ပြီး ထွက်သွားလိုက်သည် ။
စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် ထားရသည် ။ မထားလို့လည်း မရဘူး ။ ကိုယ်က ဒါဏ်ရာတွေနဲ့ ဆေးရုံတက်နေရတာ ..။
နောက်မှဘဲ ရွှေရေးကို သွားချော့တော့မည် ။
ဆေးရုံက ဆင်းပြီး သူ ပြန်နေကောင်းလာတဲ့အချိန် သူပြန်သွားချင်တဲ့ ရှေ့တန်း စစ်စခန်းတွေ ဆီကို သူ ပြန်မရောက်တော့ ။
သူ့ကို ရန်ကုန်စစ်ရုံးချုပ်မှာဘဲ ထား ထားသည် ။ တိုက်ပွဲကြီးတွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ နယ်ခြားစစ်စခန်းတွေ ဆီကို သူပြန်သွားချင်
နေသည် ။ အထက်လူကြီးတွေက ခွင့်မပြုဘူး ။
အထက်အမိန့်ကို နာခံနေကျ စစ်သည်တယောက်မို့ ထားရာနေ စေရာသွား..တာဝန်ပေးတာကို လုပ်ရတော့မည် ။
စနေနေ့ နေ့လည် …။
ဈေးအနောက်ဖက်တန်း တနေရာ ..။
၀ါယာလက်စက် ပါတဲ့ တိုင်ထောင်ထားတဲ့ မိုးပြာရောင် မာဇဒါ၁၃၀၀ စတေရှင်ဝက်ဂွန်ကားလေး ထဲကနေ သူ ထွက်လိုက်သည် ။ ကားထဲမှာ အရပ်ဝတ်နဲ့ ယာဉ်မောင်း တပ်ကြပ်ဖိုးထူး
သူ့ကားအရှေ့မှာ ရပ်လိုက်တဲ့ ကားအမဲရောင်ကြီးထဲက ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် ဆင်းလာသည် ။ သူ့ဖက်ကို တချက် လှမ်းကြည့်လိုက်တာ သူတွေ့သည် ။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် သူ့ကို ပြုံးပြလိုက်သလားတော့ သူ သေသေချာချာ မတွေ့လိုက်ဘူး ။ ဘေး ပတ်ဝန်းကျင်ကို မျက်စိလျင်လျင်နဲ့ ကြည့်နေရလို့ ..။
ဈေးရုံကြီးထဲကို အိနြေ္ဒ ရရ လှမ်းလျောက်သွားတဲ့ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ရဲ့ အနောက်က သူလိုက်သွားသည် ။
တမင်တကာ ကြည့်တာ မဟုတ်ပေမယ့် ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ရဲ့ ခါးအောက်က အလှအပတွေရဲ့ တုန်ခါလှုပ်
တာကို သူတွေ့လိုက်ရလို့ မျက်လုံးလွှဲလိုက်ရသည် ။
တင်ပါးဝိုင်းဝိုင်းကားကားတွေမှာ ပင်တီအရာလေး ကိုပါ သူတွေ့မြင်လိုက်ရသည် ။
အလုပ် လုပ်စရာရှိရင် ပီပီပြင်ပြင်လုပ်တတ်လုပ်လေ့ရှိတဲ့ သူ့ပင်ကိုယ်ဗီဇ အတိုင်း အလုပ်ချိန်မှာ ဘာကိုမှ မစဉ်းစားတတ်ဘဲ
အလုပ်ကိုဘဲ အာရုံစူးစိုက်ထားသည် ။ သို့ပေမယ့် မတော်တဆ ကြည့်မိလိုက်တာတွေတော့ ရှိတတ်တာပေါ့ ။
ဟင်း…လှလိုက်တဲ့ တင်ပါးကြီးတွေ …။
ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ရဲ့ လုံခြုံရေးကို သူ တာဝန်ယူထားရသည် ။
ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်သည် အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ ဇနီး ဖြစ်သည် ။ သူမရဲ့ အနီးကပ် လုံခြုံရေး တာဝန်ခံ အရာရှိ ဖြစ်လာတဲ့ သူသည် ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် သွားလေရာကို အနောက်က
တကောက်ကောက် လိုက်ပြီး စောင့်ရှောက်ရသည် ။ ဒါ သူ့အလုပ် ..။
သူ အနီးကပ် စောင့်ရှောက်ရတဲ့သူက ဖြူဖွေးလှပတဲ့ မိန်းမချောတယောက် မို့ ဒီအလှအပတွေကို မမြင်ချင်လဲ မြင်နေရ မတွေ့ချင်လဲ တွေ့နေရသည် ။
အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွဘဲ..တဲ့။ ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာ ရန်သူနဲ့ အသေအကြေတိုက်ခိုက်ရမှ အလုပ်လုပ်တာ
မဟုတ်ဘူး..ကျရာတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ကြရမည် လို့ အထက်လူကြီးက သူ့ကို မိန့်ချွေခဲ့သည် ။ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရ
ရင် သူ ဒီတာဝန်ကို စိတ်ထဲမှာ မကြိုက်ဘူး ။ မြို့ပေါ်မှာ နေရပြီး ရှေ့တန်းမှာလို အနေအစားမဆင်းရဲ အသက်အန္တရာယ် မရှိ
ဘဲ သန့်သန့်လေး နေရပေမယ့် သူ မကြိုက်ဘူး ။ သို့ပေမယ့် အလုပ်ဟာ အလုပ်မို့ သူ မငြင်းသာဘူး ။
သူသည် ပထမ စစချင်းမှာ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ရဲ့ လုံခြုံရေး တာဝန်ခံ ဆိုပြီး အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ နေအိမ်ကို ရောက်လာရတာ
မဟုတ်ဘူး ။ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီး အတွက် လိုအပ်တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ဖို့ ရုံးအဖွဲ့အနေနဲ့ တာဝန်ပေးအပ်တာကို ခံရတာ ။
သူရောက်ပြီး မကြာခင်မှာဘဲ မြေအောက် အကြမ်းဖက် ရန်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှု သတင်းဆိုးတွေကြောင့် လိုအပ်လာလို့ အရေး
ကြီး ဗီအိုင်ပီတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေကို အနီးကပ် လုံခြုံရေး ပေးဖို့ လိုအပ်လာလို့ …။
ရန်ကုန်မြို့ထဲ နဲ့ အနီးတဝိုက်ကို ဗီအိုင်ပီ ကတော် နဲ့ သားသမီးတွေ ထွက်ကြသွားကြရင် သူနဲ့ သူ့အဖွဲ့က အနောက်က
လိုက်ကြရသည် ။ မလိုအပ်ဘူး ထင်တဲ့နေရာတွေ ဆိုရင် သူတယောက်ထဲ လိုက်သည် ။ ညရေးညတာ နဲ့ မြို့ပြင် နဲ့ နယ်
တွေကို သွားရင်တော့ အဖွဲ့နဲ့ လိုက်သည် ။
မနေ့က ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က သူ့ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်း ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ အိမ်ကို သွားလည်တော့ သူ
လဲ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်နဲ့ လိုက်ရသည် ။ ဒေါ်အေမီသွင်သည် ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်လို ရာထူးကြီးမြင့်တဲ့
ဗီအိုင်ပီလိုလူကြီးတယောက်နဲ့ အကြောင်းမပါဘဲ စီးပွားရေးသမားကြီးတယောက်နဲ့ ရခဲ့ပြီး လင်ဖြစ်သူနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ
လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာက ပွပေါက်တိုးပြီး ကျိကျိတက် ချမ်းသာခဲ့တဲ့ မိန်းမတယောက်လဲဖြစ်သည် ။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ရဲ့ ယောက်ျား ရဲ့
စောင်မမှုတွေကြောင့်အခုလို အရမ်းကြီးပွားတိုးတက်သွားတာလို့ အပြင်လောကမှာ ပြောဆိုနေကြတာတွေကို ကြားနေသည် ။
ဒေါ်အေမီသွင်သည် အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် နုပျိုနေတဲ့ တရုပ်ကပြားမ ဖြစ်သည် ။ အိမ်မှာ ရေကူးကန်ရှိပြီး နေ့တိုင်းလို ရေ
ကူး..တင်းနစ်ရိုက်တာကြောင့် ဒီလို တောင့်တင်း အချိုးကျနေသလားမသိဘူး ။
သူ့ကို စစချင်း ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ရဲ့ လုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူဖို့ တာဝန်ပေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဒေါ်အေမီသွင်က သူ့ကို ခြေဆုံး
ခေါင်းဆုံး ကြည့်ပြီး…“ ရွှေဖြူ ..ယူ့ ဘော်ဒီဂတ်က တကယ်မိုက်တယ် …သူ့ကို ဘယ်သူရွေးလိုက်တာလဲ.. ယူ့ယောက်ျား
လား..ယူလား …” လို့ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ကို မေးလိုက်တာ သူ ကြားခဲ့ရသည် ။
ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က အသံထွက်အောင် ရယ်မောလိုက်ပြီး…“ မဟုတ်ရပါဘူး..အေမီရယ် …ကိုယ် သိတောင် မသိပါဘူး ..အိမ်မှာ
အစစ လုပ်ကိုင်ပေးနေတဲ့ ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင် ကဘဲ စီစဉ်တာပါ …” လို့ ပြန်ဖြေခဲ့သည် ။
မနေ့က ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်သည် ဒေါ်အေမီသွင်တို့ အိမ်မှာ ရေကူးသည် ။
ဒေါ်အေမီသွင်နဲ့ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်တို့ ရေကူးဝတ်စုံတွေနဲ့ ရေကူးနေတဲ့အချိန် မလှမ်းကမ်းမှာ သူရှိနေရလို့ သူတို့ရဲ့ ရှိုက်ကြီး
ဖိုငယ်အသွယ်သွယ်ကို နီးနီးကပ်ကပ် တွေ့မြင်ခဲ့ရသည် ။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ရော ဒေါ်အေမီသွင်ရော ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်တွေက
ယောက်ျားတွေ သွားရေယိုစရာ အချိုးကျတောင့်တင်းလွန်းကြတာကြောင့် သူသည် မကြည့်မိအောင် မျက်လုံးလွှဲဖယ်ထားနေ
ရသည် ။ ဒေါ်အေမီသွင်နဲ့ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်တို့က ရေကူးကန်နဘေးမှာ ထိုင်ကာ အဖျော်ယမကာ သောက်သုံးရင်း သူ့ကို
လှမ်းခေါ်ပြီး စကားပြောတတ်သလို ခိုင်းလဲ ခိုင်းတတ်သည် ။
ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်နဲ့ ဒေါ်အေမီသွင်တို့ရဲ့ ပေါင်တန်ဖြူ ဖြူ တွေကို မြင်ရတဲ့အခါ သူ့စိတ်တွေ လှုပ်ရှားမိရတာ အရမ်းဘဲ ။ ရေကူးဝတ်စုံထဲက လျံထွက်
နေတဲ့ ရင်သားထွားထွားတွေက တင်းမာနေကြဆဲ ဆိုတာကိုလည်း တွေ့နေရသည် ။
ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ လက်နှိုက်ခါ ရပ်နေရင်း ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်နဲ့ ဒေါ်အေမီသွင်တို့ကို မကြည့်မိအောင် မျက်နှာကို တဖက်ကို
လွှဲထားတဲ့အချိန် “ ကိုထင်အောင်ကျော် …” လို့ ခေါ်လိုက်တဲ့ ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရသည် ။
“ မမကို လိုးရှင်း လိမ်းပေးပါလားကွယ် …. ”
အင်း..ခက်တော့နေပြီ ။ နဘေးမှာ ဒရင်းဘက်နဲ့ ထိုင်နေတဲ့ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ကလည်း သူ့ကို ပြုံးပြီး ကြည့်နေသည် ။
သူမ သူငယ်ချင်းကို လုပ်ပေးလိုက်ပါ လို့ ပါးစပ်က မပြောပေမယ့် လုပ်ပေးစေချင်တဲ့ သဘော ရှိနေသည် ။ ဒေါ်အေမီသွင်
ရဲ့ ကျောပြင်နဲ့ ပေါင်တန်တွေကို လိုးရှင်း လိမ်းပေးနေရင်း ချောမွှတ်ပြီး အိစက်နေတဲ့ ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ ကိုယ်လုံး အထိအတွေ့
တွေကြောင့် သူ့စိတ်တွေ နိုးကြွလာရသည် ။
ဟူး …. ။
ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် ဈေးဝယ်တာကို ခပ်လှမ်းလှမ်းက စောင့်ကြည့်နေရင်း မနေ့က ရေကူးကန်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာတွေကို
ပြန်လည် စဉ်းစားနေမိသည် ။ ဒေါ်အေမီသွင်သည် ခေတ်မှီရဲတင်းပြီး နိုင်ငံခြားဆန်ဆန် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နေတတ်သူဖြစ်ပြီး
လင်ဖြစ်သူ စီးပွားရေးသမားကြီးကလည်း ဘန်ကောက်မြို့မှာ အနေများပြီး တောင့်တင်းဆူဖြိုးတဲ့ ဇနီးသည်ချောချော ကို ပစ်
ပယ်ထားသလိုကြီးမို့ ဒေါ်အေမီသွင်သည် ဆာလောင်ငတ်မွတ်နေသလား မသိဘူး ။
“ ထင်အောင်ကျော် …”
သူ့အတွေးတွေကို ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် အသံက ဖြတ်တောက် ပစ်လိုက်သည် ။
“ ဟုတ်…မမ …”
“ မမတို့ တခုခု စားရအောင်ကွယ် ..”
“ ဟုတ်မမ…ဘာစားချင်လဲဟင် …. ”
“ ဦးကြွိ..ဆီချက် …”
“ ထင်အောင်ကျော်လဲ စား…”
“ အာ..မဟုတ်တာဘဲ..လာ..မမနဲ့ အတူတူ ထိုင်စား…”
ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ မှာပြီး ထိုင်နေတုံး…“ ထင်အောင်ကျော် …ဆရာမင်းထွေး ..ခွင့်သွားမယ် ကြားတယ် ..သူမရှိတဲ့အချိန် ရွှေနန်းကို ထင်အောင်ကျော် ဘဲ တာဝန်ယူစေချင်တယ် …”
လို့ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က ပြောလိုက်သည် ။
“ ဟုတ် ..မမ…စိတ်ချပါ…”
ရွှေနန်းဘုံ ဆိုတာက ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်တို့ရဲ့ တဦးတည်းသော သမီးချောကလေး ..ပါ ..။
ရွှေနန်းဘုံ ကို အနီးကပ် လိုက်လံစောင့်ရှောက်ဖို့ လုံခြုံရေး တာဝန်ခံ တပ်ကြပ်ကြီးမင်းထွေး ခွင့်ယူနေတဲ့အချိန် သူ့ကို ရွှေနန်း
ဘုံရဲ့ လုံခြုံရေး အရာရှိအဖြစ် လုပ်ဖို့ ပြောနေခြင်း ..။
“ ရွှေနန်းဘုံ ” နဲ့ သူ ဆုံဘူးပါသည် ။
သူတို့အိမ်မှာ အမြဲလို ရှိနေရတာကြောင့် ရွှေနန်းဘုံနဲ့ ဆုံရ တိုးရသည် ။ မာနတခွဲသားနဲ့ လူကြီးသမီး သည် သူမအမေ လိုဘဲ
ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က အရမ်းလှသည် ။ တောင့်သည် ။ သေသေချာချာတော့ မကြည့်ရဲဘူး ။ တော်ကြာ သူ့အဖေနဲ့ တိုင်
လို့ အလုပ်ပြုတ် အချုပ်ခံနေရမည် ။
“ ရွှေနန်းဘုံ” သည် မိဘဂုဏ်ရှိန်ကြောင့် စိတ်တွေ ဘုံဖျားရောက်နေသူ မာနခဲကလေး ဖြစ်သည် ။ အဖေအမေ ရဲ့
လက်အောက်မှာ အလုပ်လုပ်နေကြသူ ဝန်ထမ်းတွေကို မတူမတန်ဘူးလို့ သဘောထား ဆက်ဆံနေသူလေး ပါ ။ ဆရာမင်းထွေးက စကားကြုံရင်း ရွှေနန်းဘုံ ဘယ်လို ဆိုးတယ်
ကဲတယ်ဆိုတာတွေ ပြောပြဘူးသည် ။
လေသံအေးအေးပျော့ပျော့နဲ့စကားပြောတဲ့ ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင် က ရွှေနန်းဘုံ နဲ့ သူ့ကို မိတ်ဆက်ပေးသည် ။
“ ရွှေနန်း..ဒါက ဗိုလ်ကြီးထင်အောင်ကျော်…ဆရာမင်းထွေး ရွာပြန်နေတဲ့အချိန် ရွှေနန်းကို စီကရူရတီ ဒီတေးလ် လုပ်ပေးမှာ…”
ရွှေနန်းဘုံသည် သူ့ကို တချက် စူးစိုက်ကြည့်ပြီး ထမင်းချက် ဆရာသောင်းတို့လင်မယား ပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့ မနက်စာ ကို
အင်း..နံမည်ကိုက ရွှေနန်းဘုံဘဲလေ ..။ လတ်တလော ရောက်ရှိနေတဲ့ အခြေအနေအရ သူကလေးသည် ဘယ်သူ့ကိုမှ လူ
မထင်တာလဲ မဆန်းလှဘူး ။
ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင်က သူ့ကို မီးဖိုခန်းထဲကနေ အိမ် အနောက်ဖက်ကို ခေါ်ထုတ်လာပြီး ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေ ပြောပြသည် ။
အဓိကကတော့ ရွှေနန်းဘုံကို အလိုလိုက်ဖို့ ..။ ရွှေနန်းဘုံကို သတိထား ဆက်ဆံဖို့ ။ သူဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းကြီးလဲ မလုပ်
ဖို့ ။ ရွှေနန်းဘုံသည် ရည်းစား ထည်လဲတွဲတဲ့ ကောင်မလေးမို့ တခါတခါ ဆရာမင်းထွေးကို..“ ကျမနဲ့ မလိုက်နဲ့..နေခဲ့..” လို့
လေသံမာမာ အသံပြတ်ပြတ်နဲ့ ပြောဆိုလို့ ဆရာမင်းထွေးမခြာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ ခေါင်းကုတ်ခါ ကျန်ခဲ့ရကြောင်း သူ့ကို
“ သူ့စကား နားထောင်ပြီး သူနဲ့ ထပ်ချပ် မလိုက်ပြန်ရင်လဲ တခုခု မလိုလားအပ်တာ ဖြစ်ခဲ့ရင် ကွဲမှာ…ဒီတော့ မြွေမသေ တုတ်
မကျိုးပေါ့..အဲ..ရှဉ့်လဲလျှောက်သာ ပျားလဲစွဲသာ…ပြောမလား…အခြေအနေ အရပေါ့…မီးစင်သာ ကြည့်ကပေတော့ ဗိုလ်ကြီး”
ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင်သည် ရွှေနန်းဘုံတို့ အိမ်မှာ လိုအပ်တာကို အကုန်အစုံ လုပ်ကိုင်စီမံနေတဲ့လူမို့ သူတို့အထာကို ကောင်း
ကောင်း သိနားလည်နေသည် ။
ရွှေနန်းဘုံ ဘရိတ်ဖတ်စ် စားပြီးသွားပြီ ။
နှုတ်ခမ်းထူပြဲပြဲလေးမှာ ပေနေတဲ့ ဆီတွေကို လက်သုတ်ပုဝါနဲ့ သုတ်ပြီး ထိုင်ရာက ထသည် ။
ထမင်းစား စားပွဲကြီးပေါ်က စလင်းဘက် ကို ကောက်ကိုင်သည် ။
“ ဒေါ်သန်း …. ”
“ ရှန်…ရွှေနန်းလေး …”
ဆရာမောင်သောင်းရဲ့ မိန်းမ ဒေါ်သန်း အပြေးကလေး ရောက်လာသည် ။
“ အပြင်သွားအုံးမယ် …ဟို ဗိုလ်ကြီးအသစ်ကို ပြောလိုက်..“ ဘွန်ဂို ” နဲ့ မလိုက်နဲ့…ရွှေနန်းနဲ့ သူတယောက်ထဲဘဲ လိုက်ခဲ့ဖို့”
“ ဟုတ်ကဲ့..ရွှေနန်း …”
ဘွန်ဂို ဆိုတာက လုံခြုံရေး လိုက်သူတွေရဲ့ အပြာရောင် မာဇဒါ စတေရှင်ဝက်ဂွန်း ကား ကို ခေါ်တာ …။
ရွှေနန်းဘုံသည် သူမကို မိဘတွေက ဝယ်ပေးထားတဲ့ တိုယိုတာ ကလိုလာကား အဖြူလေးဆီကို လျှောက်သွားသည် ။
သူ ရွှေနန်းဘုံ အနောက်က ခပ်မြန်မြန် လိုက်သွားရသည် ။
ဒေါ်သန်း လာပြောလို့ ဘွန်ဂိုနဲ့ လိုက်ဖို့ ပြင်နေတဲ့ သူ ကျန်တဲ့ သူ့အဖွဲ့ဝင်တွေကို “ အုပ်စုလိုက် မလိုက်နဲ့တဲ့..စက်ဖွင့်
ထား..လိုရင် ခေါ်လိုက်မယ် …” လို့ ပြောရင်း အိမ်ဘေးကနေ ရွှေနန်းဘုံကားလေးဆီကို သူအမြန်သွားလိုက်ရတာ ..။
သူ ကားပေါ်ထိုင်..တံခါးပိတ်လိုက်တာနဲ့ ရွှေနန်းဘုံက ကားကို မောင်းထွက်သည် ။
ခြံဝမှာ ဂျီသရီးသေနတ်ကို ဘယ်မြှင့်အနေအထားနဲ့ လွယ်ကိုင်ထားရင်း ကင်းတာဝန်ကျနေတဲ့ ရဲဘော်မောင်ဝိုင်း ရှိနေသည် ။
ရဲဘော်မောင်ဝိုင်းက ခြံတံခါးကို ဖွင့်ပေးသည် ။
ခြံဝင်းထဲက တရှိန်ထိုး မောင်းထွက်လိုက်တဲ့ ရွှေဘုံနန်းသည် ခြံဝင်းအပြင်က လမ်းမက ကားတစီးနဲ့ တိုက်မိခမန်း ဖြစ်သွား
မျက်နှာတင်းလှတဲ့ မိန်းမချောလေးသည် လုံးဝ ဂရုမစိုက်ဘူး ..။ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ မောင်းနေသည် ။
ရွှေနန်းဘုံ က သူ့ကို မကြည့်ဘဲ…“ သူငယ်ချင်းနဲ့ ဈေးဝယ်ထွက်မလို့….” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။
အိုး … ။
ရွှေနန်းဘုံ မောင်းတာ အရှိန်များလွန်းလို့ မီးပွိုင့်မှာ မီးနီတဲ့အချိန် ရပ်လို့ မရဘူး..။ မီးနီ ဖြတ်မိသွားသည် ။
မီးပွိုင့်တဖက်က အဖြူရောင်ဝတ် ရဲတယောက်က ကားလမ်းမပေါ်ထွက်ပြီး တားသည် ။ ရွှေနန်းဘုံ မရပ်ချင်ရပ်ချင်နဲ့ ရပ်လိုက်
“ လာရှုပ်နေပြီ…သူ ပြောလိုက်အုံး..”
ရွှေနန်းဘုံက မျက်နှာလေးမဲ့ပြီး ပြောသည် ။
ယာဉ်ထိန်းရဲတွေက အစိုးရ ဗီအိုင်ပီတွေ စီးတဲ့ ကားအမဲကြီးတွေ ကို ဖြစ်ဖြစ် အိမ်ကားအဖြစ် သုံးနေတဲ့ မာဇဒါ ၁၃၀၀ စီဒင်တွေ..မာဇဒါ ၃၂၃ကားတွေ ဆိုရင်တော့ မတားရဲကြ ..။
အခု ရွှေနန်းဘုံ မောင်းလာတာက သူမကိုယ်ပိုင် ကိုရိုလာကားလေးမို့ လူကြီးသမီးမှန်း မသိလို့ တားလိုက်တာပါ …။
သူ ယာဉ်ထိန်းရဲသားကို သူဘယ်သူဆိုတာနဲ့ ရွှေနန်းဘုံက ဘယ်သူ့သမီးဆိုတာ ပြောပြလိုက်သည် ။
ပြာပြာသလဲ သူတို့ကို သွားခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ ရဲသားလေးကို သူလက်ပြနုတ်ဆက်လိုက်သည် ။
ရွှေဘုံနန်းသည် ရွှေတောင်ကြားလမ်းထဲက အိမ်တအိမ်ကို သွားသည် ။
ရွှေဘုံနန်းရဲ့ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်း ဒေလီယာဝင်းထွန်း ရဲ့ အိမ်ဖြစ်သည် ။
ဒေလီယာဝင်းထွန်း က တိုက်အပေါက်ဝ က ထွက်စောင့်နေသည် ။
ဒေလီယာဝင်းထွန်းရှေ့ကို ရွှေနန်းဘုံရဲ့ ကားလေး ထိုးရပ်လိုက်သောအခါ ဒေလီယာဝင်းထွန်း က “ ဟေး ..ရွှေနန်း…..” လို့
လက်နှစ်ဖက်ကို မြှောက်ပြီး ကားဆီကို ပြေးလာသည် ။ ရွှေနန်းဘုံက ကားပေါ်က ဆင်းသည် ။ ဒေလီယာဝင်းထွန်းကို ပြေးဖက်
လိုက်သည် ။ “ ဒေလီယာ….ယူ ဒီတခါ ယူကေသွားတာ ကြာလိုက်တာ…ဒို့ ယူ့ကို တအားလွမ်းနေတယ် …” လို့ ပြောလိုက်
တဲ့ ရွှေနန်းဘုံကို ဒေလီယာဝင်းထွန်းက သူမ အင်္ဂလန်က ဝယ်လာတဲ့ လက်ဆောင်တွေ ပေးသည် ။
ဒီအချိန်မှာ တိုက်ထဲက ဒေလီယာဝင်းထွန်းရဲ့ အဖေနဲ့ အမေ ထွက်လာသည် ။ ရွှေနန်းဘုံကို “ သမီးလေးက ချောလိုက်တာ..
အိမ်ထဲဝင်ပါအုံး..ဘာစားမလဲ …. ဘာသောက်မလဲ…” နဲ့ ပြာပြာသလဲ မေးကြသည် ။
“ မဝင်တော့ဘူး အန်ကယ်နဲ့ အန်တီ…ရွှေနန်းတို့ ရှော့ပင်သွားကြမလို့…” လို့ ရွှေနန်းဘုံက ပြောလိုက်သည် ။
ဒေလီယာဝင်းထွန်းရဲ့ မိဘတွေက ရွှေနန်းဘုံကို အသားကုန် ဖါးနေကြတာကို တွေ့နေရသည် ။
ရွှေရေး စိတ်မပျော်ဘူး ။
အလုပ်တွေသာ လုပ်နေရတယ်…စိတ်က မပျော်ဘူး ။
ထင်အောင်ကျော့်အကြောင်းကိုဘဲ သွားသွား စဉ်းစားနေမိသည် ။
ထင်အောင်ကျော် တိုက်ပွဲမှာ ဒါဏ်ရာရလို့ နယ်စပ်က ဆေးရုံတခုမှာ ရောက်နေတယ် လို့ သတင်းရရချင်း ရွှေရေး အရမ်း
အလုပ်တွေကို အန်တီထား နဲ့ လွှဲခဲ့ပြီး ရွှေရေး သူရှိတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် အစွန်အဖျားက ဆေးရုံကို အမြန်လိုက်သွားမိသည် ။
ထင်အောင်ကျော်နဲ့ ရွှေရေးလွင်လွင် က ငယ်ငယ်ကလေးထဲက ကစားဖေါ်..ကျောင်းသွားဖေါ် သူငယ်ချင်းတွေ ပါ ။
ထင်အောင်ကျော့်မိဘတွေနဲ့ ရွှေရေးရဲ့ မိဘတွေက အိမ်ချင်းကပ်ရက် ဖြစ်သလို အရမ်းကို ခင်မင်ချစ်ကြတဲ့ လူတွေ ..။
ထင်အောင်ကျော်နဲ့ ရွှေရေးက ကစားဖက်..ကျောင်းသွားဖေါ်တွေမို့ တယောက်အကြောင်းကို တယောက်က အကုန်အစုံ သိ
ကြတဲ့ လူတွေ ..။ ထင်အောင်ကျော်နဲ့ ရွှေရေးက အရမ်းကို ပူးပူးကပ်ကပ် နေခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ပေမယ့် အပျိုဖေါ်
လူပျိုဖေါ် ဝင်လာတဲ့အချိန်ကို ရောက်လာတော့ ထင်အောင်ကျော်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေက ထင်အောင်ကျော်ကို ရွှေရေး
အရမ်းလှလာတဲ့အကြောင်း..ကိုယ်လုံးက တကယ့် အပျိုမတယောက်လို ပြောင်းသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြသည် ။ ဒီတော့
ထင်အောင်ကျော်လဲ ရွှေရေးကို သတိထားကြည့်မိသည် ။ သူငယ်ချင်းတွေ ပြောကြသလိုဘဲ ရွှေရေးသည် တကယ့်ကို
တသွေးတမွေး စိုပြေတောင့်တင်းလာတာ သူတွေ့ရသည် ။
ရွှေရေးသည် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားပါလား ..။
ရွှေရေး ရင်သားတွေ တအားထွားကြီးလာသလို ခါးသိမ်သိမ်လေးနဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကလည်း စွင့်ကားထွက်လာသည် ။
ထင်အောင်ကျော်ကို သူငယ်ချင်း ဖြစ်တဲ့ ဘိုဘိုမင်းက “ မင်း ရွှေရေးကို ကြိုက်လား….ကျောင်းက ကောင်တွေက ရွှေရေးကို
အရမ်းကြိုက်နေကြတာကွ..သူများ လက်ထဲ ပါသွားအုံးမယ် …မင်းကြိုက်ရင် ရွှေရေးကို ဖွင့်ပြောပါလား….”လို့ တိုက်တွန်းလေ
ထင်အောင်ကျော်က “ ငါ ရွှေရေးကို ကြိုက်လို့မရဘူးကွ..ငါ့ညီမ တယောက်လိုဘဲ သဘောထားလို့ရတယ် ….” လို့ ခပ်အေးအေး ပြန်ပြောခဲ့သည် ။ ဘိုဘိုမင်း က “ ဒါဆို ငါ ရွှေရေးလွင်
လွင်ကို ကြိုက်လို့ ရမလား..ထင်အောင်ကျော်..” လို့ စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ နောက်ပြောင်လိုက်သောအခါ ထင်အောင်ကျော်သည် ဘိုဘိုမင်းကို ဆွဲထိုးတော့မတတ် ဒေါသထွက် စိတ်ဆိုးသွားခဲ့သည် ။
ဘိုဘိုမင်းလဲ “ ငါနောက်တာပါကွာ..မင်းရဲ့ စိတ်ကို စမ်းသပ်ချင်လို့ပါ…” လို့ ပြန်ပြောပြီး တောင်းပန်လေသည် ။
ထင်အောင်ကျော်သည် တကယ်တမ်း ရွှေရေးလွင်လွင်ကို သူများ ကြိုက်သွား ရသွားမှာကိုတော့ အရမ်းစိတ်တွေ ပူလာမိခဲ့သည် ။
ရွှေရေးလွင်လွင် လဲ အပျိုဖြစ်လာပြီးနောက် ထင်အောင်ကျော်နဲ့ အရင်လောက် နီးနီးကပ်ကပ် မနေဖြစ်တော့ဘူး ။ သူနဲ့ တွေ့ရရင် ရင်ခုံသလိုလိုကြီး ။ သူက ရွှေရေးရင်ဘတ်ကိုလဲ တအား
ကြည့်တာဘဲ …။ ထင်အောင်ကျော်ရဲ့ မရိုးသားတော့တဲ့ အကြည့်တွေကြောင့် ရွှေရေးလွင်လွင်လည်း မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘဲ အမြဲ တတွဲတွဲ လုပ်လာပြီး ထင်အောင်ကျော် နဲ့
ခပ်တန်းတန်း ဖြစ်လာသည် ။
သို့ပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်သည် သူတို့မိဘတွေရဲ့ မြန်မာပြည်အနှံ့ အတူတူ ဘုရားဖူးထွက်တဲ့ ခရီးစဉ်ကြောင့် ပြန်ပြီး နီးစပ်သွားကြသည် ။ မန္တလေး…ပုဂံညောင်ဦး..ပုပ္ပါး ..စစ်ကိုင်း
ဘုရားဖူး ခရီးစဉ်မှာ ငယ်ငယ်ကလိုဘဲ တတွဲတွဲ ပြန်ဖြစ်လာကြသည် ။ မိဘလူကြီးတွေ အလစ်မှာ ထင်အောင်ကျော်က ရွှေရေး ကို တအားဖက် တအားနမ်း ပစ်ခဲ့သည် ။ ရွှေရေးကို ချစ်တယ်
လို့လဲ ပြောသည် ။ ငါ့ကို ပြန်ချစ်ပါဟာ..လို့လဲ ပြောသည် ။ ရွှေရေးလဲ သူ့ကို သံယောဇဉ်တွယ်ခဲ့ပြီး သူကလွဲပြီး တခြားယောက်ျားလေးတွေကို ကြိုက်လို့မရဘူး ဆိုတော့ သူ့ကို ချစ်တယ်
လို့ အဖြေပေးခဲ့မိသည် ။
ဒါတွေကို ပြန်စဉ်းစားရင်း ရွှေရေး သူ့ကို စိတ်ဆိုးမိသည် ။
ဟွန်း ….ထင်အောင်ကျော် ကို မုန်းတီးနေမိသည် ။
ရွှေရေး နဲ့ သူ ရည်းစား ဖြစ်ကြတော့ အိမ်ခြင်းကလည်း ကပ်ရက်မို့ တယောက်နဲ့တယောက် တွေ့ဖြစ်ကြသည် ။ လူကြီးတွေ အပြင်သွားနေကြတဲ့အချိန် သူနဲ့ ရွှေရေး တွေ့ဖြစ်ကြသည် ။
သူက ရွှေရေးကို တွေ့ရင် တအား ဖက်ဖက် နမ်းတတ်သည် ။ နောက်ပြီး ရွှေရေးရဲ့ တအားထွားရဲ့ ရင်သားစိုင်တွေကို သူကိုင်သည် ။ ဆုပ်နယ်ပွတ်သပ်သည် ။
ရွှေရေးလဲ သူ့ကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ရွှေရေးရဲ့ ရင်သားတွေကို သူ့ကို ကိုင်ခွင့်ပေးမိသည် ။
သူ အရမ်းကဲ အရမ်းဆိုးသည် ။ ရွှေရေး ရင်သားတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ နဲ့ ငုံခဲပြီး စို့သည် ။
အို..ငါ ဘာတွေ ပြန်တွေးနေမိပါလိမ့် ….။
ပွဲရုံကို သွားဖို့ အရေးကြီးနေခဲ့ပေမယ့် ထင်အောင်ကျော့်အကြောင်း ပြန်စဉ်းစားနေမိတာနဲ့ ရေချိုးဖို့ကို မချိုးဖြစ်သေး ..။
ရွှေရေးလွင်လွင် ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်လိုက်ပြီး ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်အစားတွေ အားလုံးကို ချွတ်ချပစ်လိုက်ပါသည် ။
အစည်းအတား အထိန်းအကွပ် မရှိတော့တဲ့ ရင်သားကြီးတွေက တုန်တုန် တုန်တုန် နဲ့ ..။
မှန်ကာထားတဲ့ ရေချိုးတဲ့ နေရာလေးထဲ ဝင်လိုက်ပြီး ရှားဝါးရေပန်းကို ဖွင့်လိုက်သည် ။ တခါတခါ ဒီရင်သားစိုင်ထွားထွားတွေကြောင့် စိတ်ပျက်မိသည် ။ ငယ်ငယ်ထဲက ကျောင်းမှာ ယောက်ျားလေးတွေက ( ရင်လေးတယ်..ခင်လေးရယ် …) လို့ မကြားတကြား စောင်းပြီး စကြတယ် ။ ချိုချိုအောင် …လို့လဲ ခေါ်ကြသည် ။ ဟွန်း….ထင်အောင်ကျော် စို့လွန်းလား မသိဘူး …။
နို့သီးခေါင်း နီညိုညိုလေးတွေက စူထွက်နေကြသည် ။ ဟင်း …နားလည်မှု မရှိတဲ့ ထင်အောင်ကျော့်ကို မုန်းတီးနေမိသည် ။
သူဆွထားပြီး ပစ်ထားရက်တယ်..ကောင်စုတ်…။ ရေချိုးရင်း တကိုယ်လုံး အနှံ့ ဆပ်ပြာရည်နဲ့ ပွတ်တိုက်ရင်း စစ်သွားတိုက်ပြီး လပေါင်းများစွာ ချန်ထားခဲ့တဲ့ ထင်အောင်ကျော်ကို စိတ်တွေ ဆိုးနေမိသည် ။ ပေါင်ကြားက ပတ်ကြားအက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ ပွတ်သပ်သန့်စင်တော့ စိတ်တွေ ထလာသည် ။ မရတာ ကြာနေတဲ့ ကာမ ဆက်ဆံမှုကို တောင့်တမိလာသည် ။ ပွတ်နေတဲ့ လက်ချောင်းတွေက အဲဒီနေရာကနေ မခွာချင်တော့ ။ မခွာနိုင်တော့ဘူး..။ ဖိဖိပြီး ပွတ်နေမိရသည် ။
ဟွန်း ..စိတ်နာတယ် ..။
လိုချင်တဲ့အချိန် သူက အနားမှာ မရှိဘူး ..။ ညိုညို တုတ်တုတ် သူ့အချောင်းကြီးကို ဖျတ်ကနဲ မြင်ယောင်မိ သတိရမိပြန်သည် ။
သူ့လောက် တဏှာကြီးတာလည်း သူဘဲ..။ ရှေ့တန်းမှာ ဘယ်လိုများ ဖြေရှင်းနေလဲ မသိဘူး ..။ ကွင်းဘဲ လှိမ့်တိုက်နေမှာ သေချာပါတယ် ….။
ထင်အောင်ကျော် လုပ်တာတွေကို ပြန်သတိရပြီး မျက်စိပိတ်ထားရင်း ဖိဖိ ပွတ်နေမိသည် ။ တင်းမာပြီး ထောင်ထနေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကလည်း သူတို့ကို ချေပေး ပွတ်ပေးစေချင်နေကြ
ပြီ ။ လက်တဖက်နဲ့ အဖုတ်ကို ကလိ..ကျန်တဲ့လက်တဖက်နဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ဖွဖွလေး ပွတ်လိုက် လက်ညှိုးနဲ့ လက်မ သုံးပြီး ချေပေးလိုက် လုပ်မိရပြီ ။ နှုတ်ခမ်းသား ထူထူတွေ
က ရွစိထ ယားနေသည် ။ အဖုတ်အတွင်းကလည်း လှိုက်လှိုက်ပြီး ယားလွန်းသည် ။
ပွတ်သည်။ ဖိပွတ်သည် ။ တအားတအား..ပွတ်သည် ။
“ အင်..အင်…အင်..ဟင့်ဟင့်ဟင့် …အား….အား…ဟင်း….ဟင်း….အ…..အ…..အ….အ….အ….အ…အ…..အိုး…အိုး….ဟင်း . . .”
အစိကို တအားပွတ်ချေရင်း ဝက်သားပေါက်လေးတကောင် အော်ညည်းသလို တအီအီ ညည်းအော်ရင်း ကာမပန်းတိုင်ကို တက်လှမ်းသွားရသည် ။
“ ဟင်း ………”
ပွဲရုံကို သွားမလို့ လုပ်နေချိန် မြို့ထဲက ဆိုင်က သူလာမှ ဖြစ်မည် ဆိုလို့ မြို့ထဲကို အရင်ပြေးရသည် ။
မိဘလက်ငုတ် ဆိုင်တွေ ပွဲရုံတွေကို ဦးစီး လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ ရွှေရေးလွင်လွင်သည် ထင်အောင်ကျော်ကို အားကိုးလို့ မရလို့ သူ့ကို စိတ်ဆိုးနေတာပါ ..။ သူသာ ရွှေရေးကို လက်ထပ်ပြီး
ရွှေရေးနဲ့ အတူတူ အလုပ်လာလုပ်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ …။
အခုတော့ တယောက်ထဲ ခြာခြာလည်နေသည် ။ ဖေဖေနဲ့ မေမေတို့က နိုင်ငံခြားမှာ ပျော်နေသည် ။
ဆိုင်ကနေ ကမ်းနားလမ်းအတိုင်း ပွဲရုံရှိတဲ့ ကြည့်မြင်တိုင်ဖက်ကို ခပ်သွက်သွက် မောင်းနေတဲ့အချိန် လမ်းရဲ့ ညာဖက်က ရွှေဘဲ စားသောက်ဆိုင်ရှေ့မှာ ထင်အောင်ကျော်ကို မြင်လိုက်ရလို့
ရွှေရေး ကားဘရိတ်ပေါ်ကို ခြေထောက် အလိုလို ရောက်ရှိသွားသည် ။
ထင်အောင်ကျော် ရန်ကုန် ပြန်ရောက်နေပါလား ..။ ဒါတောင် ရွှေရေးဆီလည်း ပေါ်မလာဘူး…။ ဖုန်းလေးတောင် မဆက်ဘူး …။
အိုး …သူတယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူး ..။ မိန်းကလေး တယောက်နဲ့ ..။ ဖင်ကြီးကြီးနဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ ရယ်မောပြောဆိုနေရင်း ရွှေဘဲဆိုင်ထဲ ဝင်သွားနေသည် ။
တောက်…ထင်အောင်ကျော် …ငါ့ကို သစ္စာဖေါက်ပြီ ….။
ရွှေရေး မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် ကား ဆက်မမောင်းနိုင်တော့ ..။
လမ်းဘေးကို ထိုးရပ်လိုက်ရသည် ။
မျက်ရည်ပေါက်တွေ ထိန်းလို့မရဘဲ ကျဆင်းလာသည် ။
သူ..သူ..လုပ်ရက်တယ် …တခြားကောင်မ နဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကို လာစားနေတယ် …။ ရန်ကုန်ရောက်နေတာလဲ မသိရဘူး ။
ငါထင်သားဘဲ…သူ..သူ….ငါ့ကို ရိုးသွားလို့ တခြားတယောက် ကို ထပ်ကြံနေတာဘဲ ဖြစ်မယ် …အင်းပေါ့လေ …ငါကလဲ ငါ ..သူ့ကို ယုံစားမိလို့ တကိုယ်လုံး သူ့စိတ်ကြိုက် ပုံအပ်မိ
တာကိုး..အင်း..ယောက်ျားတွေများ..ငါးစိမ်းမြင်လို့ ငါးကင်ပစ် …တရွာတကျီဆောက်တဲ့ဟာတွေ..ဟွန်း….။
တအား ငိုနေမိရသည် ။
“ အမ..အမ…..ဘာဖြစ်လဲဟင်..ကျနော် ဘာကူညီလို့ ရမလဲ….”
အဖြူ ရောင်ဝတ် ယာဉ်ထိန်းရဲတယောက် လာမေးနေတာ …။
“ ရှင် ကူညီနိုင်မယ် မထင်ဘူး ….”
“ ဗျာ ….”
“ ဟုတ်တယ်….ကျမ အရမ်း စိတ်ထိခိုက် ကြေကွဲနေတယ် …”
ရွှေနန်းဘုံ အပြင်ထွက်မယ့် အချိန် နဲနဲ စောနေသေးလို့ အိမ်ဖေါ်မလေး လာပေးတဲ့ ကော်ဖီကို သောက်ရင်း သတင်းစာ ဖတ်နေတဲ့အချိန် ရဲဘော်တယောက် ရောက်လာသည် ။
“ ဗိုလ်ကြီး …မရွှေနန်းဘုံက ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ် …”
ရွှေနန်းဘုံသည် ထမင်းစားခန်းကြီး ထဲမှာ တယောက်ထဲ ဘရိတ်ဖတ်စ် စားနေသည် ။
သူ့ကို မြင်တော့ တချက်မော့ကြည့်ပြီး…“ ကော်ဖီသောက်မလား …” လို့ မေးသည် ။ “ သောက်ပြီးပြီ ..ရွှေနန်းဘုံ…ဘာလုပ်ပေးရမလဲ …ခေါ်တယ်ဆိုလို့….” လို့ မေးလိုက်တော့
“ ဒီနေ့ ရွှေနန်း..သူငယ်ချင်းတယောက် နဲ့ ထမင်းစားဖို့ ချိန်းထားတယ် …ကိုဟိုဒင်း…အဲ..ကိုထင်အာင်ကျော် ….နောက်ကားတစီးနဲ့ မလိုက်ဘဲ ရွှေနန်းကားနဲ့ဘဲ လိုက်ပါလား …”
“ အိုကေ …ရွှေနန်း …”
ရွှေနန်းဘုံ သွားတဲ့နေရာက ကမ္ဘာအေးလမ်းမကြီး နဲ့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ထောင့်က ဖူဆန်း တရုပ်ဘုံကျောင်း စားသောက်ဆိုင်…။
“ ရွှေနန်း သူငယ်ချင်းနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး လွတ်လွတ်လပ်လပ် စားချင်တယ် …ကိုထင်အောင်ကျော် တနေရာရာမှာ တထုထုမှာစားနေလိုက်နော် …”
ရွှေနန်းဘုံက ကြိုစောင့်နေတဲ့ လူငယ်တယောက်ကို လက်လှမ်းပြရင်း ပြောလိုက်သည် ။ “ အိုကေ ” လို့ဘဲ ပြောရတာပေါ့ ..။
ရွှေနန်းဘုံကို လှမ်း မြင်သာတဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းက စားပွဲတလုံးမှာ ထိုင်လိုက်သည် ။
စားပွဲထိုးလေး ရောက်လာသည် ။
“ ဘာစားမလဲ ဆရာ….”
“ မစားသေးဘူးကွာ..နောက်မှ..မှာမယ် …အကြမ်းတအိုးသာ ချ …”
ရွှေနန်းဘုံနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ လူငယ်လေးကတော့ တယောက်လက်ကို တယောက် ဆုပ်ကိုင်ကာ ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီး စကားတွေ တတွတ်တွတ် ပြောနေသည် ။
သူတို့ကို အသေအချာကြီး ကြည့်နေရင်လည်း ရွှေနန်းဘုံက ကြိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ မသိမသာ တချက်တချက် ကြည့်ရင်း ဖတ်လက်စ သတင်းစာကို ဆက်ဖတ်နေသည် ။
“ ထင်အောင်ကျော် …..”
အနောက်က ခေါ်သံကြောင့် လှည့်ကြည့်လိုက်သည် ။
ဟင် ….ငယ်ငယ်တုံးက အတန်းဖေါ် မီမီလှိုင် နဲ့ ရွှေရေးလွင်လွင် …။
မီမီလှိုင်ရော ရွှေရေး ကော မျက်နှာတွေက မကျေနပ် ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ ပုံတွေနဲ့မို့..“ မီမီလှိုင်..ဘာဖြစ်လာလဲ…” လို့ သူမေးလိုက်သည် ။
ရွှေရေးကတော့ မျက်နှာနီမြန်းနေပြီး သူ့ကို အရမ်း မုန်းတီးနေတဲ့ ပုံစံနဲ့….။
“ နင် ဘာတွေ လုပ်နေလဲ နင် အသိဆုံးနေမှာပေါ့ ထင်အောင်ကျော် ….”
“ ငါက ဘာလုပ်နေလို့လဲ….”
“ နင် ရွှေရေးကို ဘာကြောင့် မဆက်သွယ်တာလဲ..နင် ရှေ့တန်းက ပြန်ရောက်နေတာ ကြာပြီ မဟုတ်လား ….”
မီမီလှိုင်က ရန်စွယ်ငေါငေါနဲ့ ရန်ထောင်နေသည် ။
ရွှေရေးကတော့ နှုတ်ခမ်းစူပြီး သူ့ကို ကျောခိုင်းထားသည် ။
“ အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်ကြပါအုံး..ဘာစားမလဲ…ငါမှာလိုက်မယ် …”
“ မစားချင်ပါဘူး..ထင်အောင်ကျော်..နင်…ရွှေရေးကို သစ္စာဖေါက်တဲ့ကိစ္စ..ငါတို့ သူငယ်ချင်းအားလုံးက မကျေနပ်ကြဘူး….စန်းစန်းတင့်တို့ မူယာတို့ကလည်း နင့်ကို ရှာပြီး ၀ိုင်းဆဲ
ကြမလို့ လုပ်နေတာ…ဘာဖြစ်တာလဲဟာ..ရွှေရေးက နင့်ကို ဒီလောက် ချစ်တာ..နင်က ဘာလို့ ရွှေရေးကို ချန်ခဲ့ချင်တာလဲ….”
“ ဟာ..ငါ ဘာလုပ်လို့လဲ..ငါ့ကို ဆေးရုံမှာ ရွှေရေး လာတွေ့တုံးက ရွှေရေးက စိတ်ဆိုးသွားလို့ ငါ လဲ ချော့ဖို့ဟာ အရှိန်ယူနေဆဲဟ..ငါ့အလုပ်တွေကလဲ များနေတာ….ငါ သစ္စာမဖေါက်
ရွှေရေးက ကျောခိုင်းနေရာက လှည့်လာပြီး…“ ဘာသစ္စာမဖေါက်တာလဲ..ငါ့မျက်စိနဲ့ တပ်အပ် မြင်တာ…ကောင်စုတ်…မညာနဲ့..” လို့ အသံတုန်တုန် နဲ့ ပြောလိုက်သည် ။
“ ဘာမြင်တာလဲ ရွှေရေးရယ်….နင် ဘာတွေ ပြောနေတာလဲ…”
“ ဟွန်း….ပြောင်လိမ်ချင်နေတယ် ….နင် စော်တယောက် နဲ့ ရွှေဘဲထဲ ဝင်သွားတာ ငါ မြင်လိုက်တယ်…”
“ အော်..ဟာ…အဲဒါ ငါ အလုပ်လုပ်နေတာ…အင်း..နင် အထင်လွဲနေပြီ…ရွှေရေး….”
သူ ချက်ချင်း မှတ်မိလိုက်သည် ။
ရွှေနန်းဘုံ ဘဲကင်စားချင်တယ် ဆိုလို့ သူ ကမ်းနားလမ်းပေါ်က ရွှေဘဲ စားသောက်ဆိုင်ကို လိုက်ပို့တုံးက တွေ့လိုက်တာ ဖြစ်မည် ..။
“ အမလေး..ထင်အောင်ကျော်ရယ်…မိန်းကလေးတယောက်နဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကို စုံတွဲခုတ် သွားတာ အလုပ်လုပ်တာလား…ဘာအလုပ်လဲ…နင်က စစ်ဗိုလ်တယောက်ပါ..နင့်အလုပ်
က ရှေ့တန်းမှာ စစ်သွားတိုက်ရတာ ဟဲ့…ရွှေဘဲမှာ ဘာအလုပ်များ ရှိလို့လဲ ….”
မီမီလှိုင်က ဝင်စွာနေတာ …။
“ နင်တို့ဟာက မရှိတာထက် မသိတာခက်…ဆိုတဲ့ စကားလိုဘဲ…မသိရင်လဲ မေးကြ..အရမ်းလျောက် ပြောဆိုမနေကြနဲ့…ငါရှင်းပြမယ် …..အဲဒါ ငါ အလုပ်လုပ်နေတာ..ငါ့ကို ဆေးရုံက
ဆင်းပြီး ရှေ့တန်းကို ပြန်မလွှတ်တော့ဘဲ လူကြီးအိမ် လုံခြုံရေး တာဝန် ပေးထားလို့…“
“ ဘာ..လူကြီးအိမ်..ဟုတ်လား ….”
“ ဟုတ်တယ်..အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ် အိမ်မှာ ငါ့ကို တွဲထားတယ် ….ဗီအိုင်ပီ လုံခြုံရေးပေါ့ဟာ…နင်တွေ့လိုက်တာက ဗီအိုင်ပီရဲ့ သမီး…..သူ့ကို ငါ သွားလေရာ
“ တကယ် ဟုတ်လို့လား ….”
“ ဟုတ်မှ သိပ်ဟုတ်..အခုလဲ ငါ တာဝန်နဲ့ဘဲ..ဟောဟိုမှာ ကြည့်လိုက်..ဘဲနဲ့ ထိုင်စကားပြောနေတာ အဲဒီ ဗီအိုင်ပီ ရဲ့ သမီးဘဲ….”
မီမီလှိုင်ကော ရွှေရေးလွင်လွင်ကော သူ မေးငေါ့ပြရာကို ကြည့်လိုက်ကြသည် ။
မီမီလှိုင်က “ ရွှေရေး..နင် ထင်အောင်ကျော် နဲ့ တွေ့လိုက်တယ် ဆိုတာ အဲဒီစော်လား…”
“ အင်း..ဟုတ်တယ် ….”
ရွှေရေးက ဖြေသည် ။
ရွှေရေး နဲ့ မီမီလှိုင်တို့ ကောင်လေးနဲ့ ခေါင်းချင်းဆိုင် တခစ်ခစ်နဲ့ စကားပြောရင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို မေ့လျော့နေတဲ့ ရွှေနန်းဘုံကို သေသေချာချာ အကဲခတ် ကြည့်ကြသည် ။
“ နင်က အမြဲ တကောက်ကောက် လိုက်နေရတာလား …”
“ အင်း..အမှန်က နောက်ကားတစီးနဲ့ အဖွဲ့နဲ့ လိုက်ရတာဟ…သူက ဘဲနဲ့ တွေ့မှာကြောင့် ငါ တယောက်ထဲ လိုက်ဖို့ ပြောလို့….”
မီမီလှိုင်က “ ကဲ ဒါဖြင့် နင် ရန်ကုန် ရောက်နေတာ ရွှေရေးကို ဘာလို့ မဆက်သွယ်လဲ..” လို့ မေးပြန်သည် ။
“ ငါလဲ လူကြီးအိမ်မှာ လုပ်နေရလို့ မအားလို့ပါဟာ…နင်တို့ ငါ့ကို အထင်လွဲကြတာပါ..ငါ သစ္စာ မဖေါက်ပါဘူး…ရွှေရေးကိုလည်း ပြန်ချော့မလို့ပါ….ရွှေရေး..ငါ့ကို
ရွှေရေးရဲ့ လက်ကလေးကို လှမ်းကိုင်ဖို့ လုပ်ပေမယ့် ရွှေရေးက လက်ကို ရုတ်လိုက်သည် ။
သူ့ကို ရွှေရေးက နှုတ်ခမ်းစူ မျက်စောင်း ထိုးနေဆဲဘဲ ..။
မီမီလှိုင်က “ ကဲ..ဒါဆိုရင် ငါတို့ သူငယ်ချင်းအုပ်စုတွေ စုပြီး စားပွဲ ကျင်းပကြမယ်..နင် လာခဲ့….ငါ နင့်ကို ဖုန်းဆက်လိုက်မယ် ..” လို့ ပြောသည် ။
“ ကောင်းပြီ မီလှိုင်..ငါ လာခဲ့မယ်…ရွှေရေး..စိတ်ပြေပါတော့ဟာ….”
ရွှေရေးက မျက်နှာကို တဖက်ကို လှည့်ထားပြီး ပြောလိုက်ပေမယ့် စောစောကလောက် မပြင်းထန်တော့တာမို့ သူ နဲနဲတော့ စိတ်ကောက်ပြေပြီ လို့ ယူဆမိသည် ။
မီမီလှိုင်က “ ကဲ နင့် ဘော်ဒီဂတ် အလုပ် နင် ဆက်လုပ်လိုက်အုံး..ငါတို့ သွားတော့မယ်….” လို့ နုတ်ဆက်သည် ။
သူတို့နှစ်ယောက် ဆိုင်ထဲက ထွက်သွားပြီးတာနဲ့ ရွှေနန်းဘုံတို့ ထိုင်နေတဲ့ ဖက်ကို သူ လှမ်းကြည့်လိုက်သည် ။
“ ဟာ..ရွှေနန်းဘုံ..စားပွဲမှာ မရှိတော့ဘူး ……”
သူ ရွှေရေးနဲ့ မီမီလှိုင်တို့နဲ့ စကားပြောနေတဲ့အချိန် ရွှေနန်းဘုံ လစ်သွားပြီ ….။
သူ တော်တော်လေး စိတ်ပူ အလုပ်များပြီ ။
ရွှေနန်းဘုံ ဘဲနဲ့ ဒိုးသွားပြီ …။
ဒါကြောင့် ရွှေနန်းဘုံကို အရင်က စီကရူရတီ ဒီတေးလ် လိုက်ကြရသူတွေက “ မလွယ်ဘူး ..” လို့ ညည်းကြတာကိုး ။
ရွှေနန်းဘုံ နဲ့ တွေ့လိုက်ရတဲ့ ကောင်လေး က အင်းလျားမြိုင် မှာ နေတဲ့ “ ထက်အာကာမြင့် ” ဆိုတာ သိရသည် ။ ထက်အာကာမြင့် သည် နိုင်ငံခြားသင်္ဘောသား ဆိုတာနဲ့ သူ့အဖေ
က ရွှေနန်းဘုံရဲ့ အဖေလောက် မမြင့်မားပေမယ့် ဌာနတခုက ဦးဆောင်ညွှန်မှူး တယောက် ဆိုတာကိုလည်း သိရသည် ။
အင်းလျားမြိုင်က ထက်အာကာမြင့်တို့ ခြံဝင်းကြီး အပြင်ကို သူနဲ့အဖွဲ့သားတွေ ရောက်သွားကြတဲ့အခါ ရွှေနန်းဘုံရဲ့ကားလေးကို ခြံဝင်းထဲမှာ တွေ့ကြရသည် ။
နောင်ဆိုရင် ရွှေနန်းဘုံ ခေါ်လို့ သူတယောက်ထဲ လိုက်သွားခဲ့ရရင်တောင် အနောက်က အဖွဲ့သားတချို့ကို ကားတစီးနဲ့ လိုက်ဖို့ ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင်က သူတို့ကို ညွှန်ကြားတော့သည် ။
ရွှေနန်းဘုံသည် ထက်အာကာမြင့် အိမ်ထဲကနေ တော်တော်နဲ့ ပြန်ထွက်မလာဘူး ။
အင်း…ငါလဲ ကလေးထိန်း ဖြစ်နေပါလား …။
ဒါက စိတ်ထဲမှာ တွေးလိုက်တာပါ ။
သူ့တိုက်ခန်းကို ပြန်ရောက်တော့ သူသည် နံမည်မှာ ရွှေပါတဲ့ မိန်းမနှစ်ယောက်နဲ့ ကြုံဆုံ ဆက်ဆံနေရပါလား ဆိုတာကို တွေးမိလိုက်သည် ။
ရွှေနန်းဘုံ ဆိုတဲ့ “ လူကြီးသမီး ” ရယ်…ငယ်ငယ်ထဲက ချစ်သူ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ “ ရွှေရေးလွင်လွင် ” ရယ် …။
တနေကုန် စိတ်အိုက်ခဲ့ရသမျှ ရေအေးအေးနဲ့ ရေချိုး…ရေခဲသေတ္တာထဲက “ မြန်မာဘီယာ” အေးအေးစက်စက် ကို ထုတ် မော့သည် ။ တခုခု ၀ါးစရာ ရှာတော့ မြေပဲလှော်ထုပ် တွေ့သည် ။
မြေပဲဆံ နဲနဲကို ပါးစပ်ထဲ ပစ်ထည့် ၀ါးနေခိုက် ဖုန်းက အသံမြည်လာသည် ။
သည် တိုက်ခန်းမှာ သူနေတယ်သာ ဆိုရသည် ။ ည ပြန်အိပ်ရုံလောက်ဘဲလေ ..။ အခုလဲ လူကြီးအိမ်က ခေါ်ပြန်ပြီ ထင်ပါရဲ့ …..။
“ အမိန့်ရှိပါ..ထင်အောင်ကျော်ပါ …”
“ ငါ လိုက် လူစုကြည့်တာ ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ အိုကေတယ်..ဒို့တတွေ တနေရာရာမှာ စုကြမယ်..လှော်ကားဖြစ်ဖြစ်…သွားပြီး ပစ်ကနစ်ပေါ့ဟာ…စားကြပျော်ကြမယ်….နင် ပါမှ လုပ်မှာ…”
“ မီလှိုင်..ငါက ငါ့ကိုယ်ငါ ပိုင်တာ မဟုတ်ဘူး ….လူကြီးနားမှာ လုပ်နေရတယ် ဆိုတာ ငါပြောထားသားဘဲ ….”
“ ထင်အောင်ကျော်..မရဘူးဟာ..နင် ပါရမယ်….ရွှေရေး ကို နင် ပစ်ထားနေခဲ့တာ ကြာပြီ…အခုပွဲကလည်း နင်နဲ့ ရွှေရေးကို ပြန်ပေါင်းထုပ်ပေးတဲ့ ပွဲ…ငါတို့ အားလုံးက နင့်ကို ရွှေရေးနဲ့
ပြန် အဆင်ပြေစေချင်ကြတယ်..နင်တို့ လက်ထပ်လိုက်ကြတာကို ငါတို့ မြင်ချင်တွေ့ချင်ကြတယ်ဟဲ့ ….”
“ အေး…ငါ ကြိုးစားမယ်..မီလှိုင် ….”
“ မကြိုးစားနဲ့ …လာခဲ့..ခုထဲက ခွင့်ယူထားပေါ့ဟာ…..နင်ကလဲ….”
မီလှိုင်ကတော့ ဇွတ်ကြီးဘဲ…။ ငယ်ငယ်ကလိုဘဲ အာကျယ်နေဆဲဘဲ …။
“ နင့်ကို ရွှေရေးက စိတ်ပြေသွားပြီ..ထင်အောင်ကျော်….ဟီး….သူက နင်နဲ့ တွေ့ချင်နေတာ…ဟိတ်..ငါပြောပြတယ် လို့လဲ သွားပြောမနေနဲ့အုံး ….”
မီလှိုင့်စကားကြောင့် ရွှေရေး နဲ့ ပြန်အဆင်ပြေရမှာကို သူ ဝမ်းသာမိသည် ။ သို့သော် စစ်တပ်က အတင်း ထွက်ခိုင်းပြီး ပွဲရုံတွေ ဆိုင်တွေ ဦးစီးခိုင်းမှာကိုတော့ သူ မကြိုက်ဘူး ။
မီမီလှိုင် ဖုန်းချသွားအပြီး နောက်ထပ် ဘီယာတလုံး ထပ်ထုတ်ယူနေတုံးမှာဘဲ ဖုန်းထပ်မြည်လာပြန်သည် ။
မီလှိုင် ထပ်ခေါ်တာများလား …။
“ အမိန့်ရှိပါ..ထင်အောာင်ကျော် ပါ ….”
“ ခိခိခိ ….”
ရယ်သံ ကို ကြားလိုက်ရသည် ။ ဘယ်သူပါလိမ့် …။ ရွှေနန်းဘုံများလား ….။
“ ဟိတ်….ဗိုလ်ကြီး …..ပျောက်လှချည်လား …..”
ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ရဲ့ ဘော်ဒါအရင်းအခြာ ဒေါ်အေမီသွင် ….။
သူ့အနေဖြင့် စိန်နားကပ်ရောင်နဲ့ ပါးပြောင်နေသော ဒေါ်အေမီသွင်တို့ကိုလည်း လေးစားရပါသည် ။ ပြာပြာသလဲ လုပ်ရပါသည် ။
ဒေါ်အေမီသွင်က …“ ကိုထင်အောင်ကျော်….အားလား ….” လို့ မေးလိုက်သည် ။
“ အဟဲ..ဘီယာ ထိုင်သောက်နေတယ် ….”
“ ဟွန်း..ကြည့်စမ်း…အလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီး လုပ်နေတယ်ပေါ့လေ..ဒို့တွေကိုတော့ သူမခေါ်ဘူး….”
“ ဟေ့..ဒေါ်အေမီသွင်..ဒေါ်အေမီသွင်နဲ့..တစိမ်းဆန်လိုက်တာကွာ….အေမီလို့ဘဲ ခေါ်စမ်းပါ….”
“ ဟုတ်…မမအေမီ …”
သူ ဒီလို ခေါ်လိုက်တော့ ဒေါ်အေမီသွင် ရယ်သည် ။ သဘောကျသွားသည် ။
“ အားရင် မမဆီကို ခဏ လာခဲ့ပါလား…မမကို တနေရာ ကားမောင်းပို့ပေးမလား…”
သူ အဝတ်အစားလဲပြီး ဒေါ်အေမီသွင့်ဆီကို ထွက်ခဲ့သည် ။ သူရထားတဲ့ တပတ်ရစ် မာဇဒါဂျစ် အစိမ်းရောင်ကားနဲ့ ….။
ဒေါ်အေမီသွင်က သူ့ကို ဆိုင်တဆိုင်မှာ လာခေါ်ခိုင်းတာ …။
ကျောက်ကုန်းရပ်ကွက်ထဲက စားသောက်ဆိုင် တဆိုင် ဖြစ်သည် ။ သူရောက်သွားတော့ အဆင်သင့် အပေါက်ဝမှာ စောင့်နေတဲ့ ဒေါ်အေမီသွင် ကို တွေ့လိုက်ရသည် ။
“ သူ မြန်သားဘဲ ….”
ဒေါ်အေမီသွင် ကားပေါ် လှမ်း တက်လိုက်ချိန်မှာဘဲ သူမပါးစပ်က အရက်နံ့တွေ ထောင်းကနဲ ရလိုက်သည် ။
“ ဟိတ်..သူနဲ့ တနေရာရာမှာ တခုခုသွား စားချင်တယ် …..”
“ မမ ဒီဆိုင်မှာ မစားခဲ့ရသေးဘူးလား ….”
“ အင်း..မစားရသေးဘူး..သောက်ဘဲ သောက်တာ…ဟင်းဟင်း…ဘာလဲ…သူက မမကို မကျွေးချင်လို့လား …”
“ မဟုတ်ပါဘူး….မမ….ကျွေးချင်ပါတယ် …..”
“ အင်း..ဒါဆို….မမကို ဘယ်ဆိုင် ခေါ်သွားမှာလဲ….”
“ မမကြိုက်တဲ့ ဆိုင်ကို သွားပါ….”
“ အင်း…..မမကြိုက်တာ…..ဆိုရင်…အင်း……ကိုးမိုင်က နဝရတ်ကိုးသွယ်…ကို သွားမလား ….”
ဒေါ်ရွှေစင်သန့် မျက်နှာနဲ့ သူ့ဘော်ဒါ ဒေါ်အေမီသွင် ကို ဖါးထားရမည် ။
နဝရတ်ကိုးသွယ် ..သည် ကျယ်ဝန်းတဲ့ ခြံကြီးထဲ ဖွင့်ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင် ဖြစ်သည် ။
ဒေါ်အေမီသွင်က ခန်းမကျယ်ကြီးထဲမှာ လူတွေ များလွန်းပြီး သူ့ကို သိတဲ့လူတွေလဲ အများကြီး ပါနိုင်တာကြောင့် သီးသန့်ခန်းတခန်းကို သွားကြရအောင် လို့ သူ့ကို ပြောသည် ။
နဝရတ်ကိုးသွယ် မှာ သီးသန့်ခန်းတွေ အများကြီး စီစဉ်ထားပေးတာမို့ သူနဲ့ ဒေါ်အေမီသွင်တို့ သီးသန့်ခန်းတခန်း ရသည် ။
ဒေါ်အေမီသွင်က မာတီးနီး သောက်ချင်သည် လို့ ပြောသည် ။
စားပွဲထိုးလေးကို မာတီးနီးနဲ့ ဒိန်ခဲတုံး..စပျစ်သီး တွေ မှာလိုက်သည် ။
ဒေါ်အေမီသွင်က ညုတုတုနဲ့ သူ့ကို စိုက်ကြည့်ပြီး….“ ကျော်နဲ့ အခုလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ချင်နေမိတာ ကျော်နဲ့ စတွေ့ကထဲကပါဘဲကွာ …..” လို့ ပြောသည် ။ ဒေါ်အေမီသွင်
သည် သူ့ကို “ ကိုထင်အောင်ကျော် ” လို့ ခေါ်နေရာက “ ကျော် ” လို့ ပြောင်းလဲ ခေါ်ဆိုလိုက်တာကိုလည်း သတိပြုမိလိုက်သည် ။
သူ့လက်မောင်းကို အင်္ကျီအပေါ်ကနေ လက်သဲလေးတွေနဲ့ ကုတ်ခြစ် လိုက်တာကလည်း ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ ပညာခန်းတခန်း ဖြစ်လိမ့်မည် ..။
“ မမယောက်ျား….အခု ယူအက်စ်မှာ လေ …ကြာအုံးမှာ ….သူကလည်း မရှိ …မင်းတို့ မမ.. ရွှေဖြူသန့်ကလည်း မရှိနဲ့ မမမှာ တယောက်ထဲ ဖြစ်နေရတာ….”
ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်သည် လူကြီးနဲ့အတူ နိုင်ငံခြားကို လိုက်ပါသွားသည် ။
မာတီးနီး တပုလင်းကို ဒိန်ခဲဝါဝါ အတုံးကလေးတွေ နဲ့ စပျစ်သီး အစိမ်းရောင်လေးတွေနဲ့ မြည်းကြသည် ။
လွတ်လပ်တဲ့ သီးသန့် အခန်းထဲမှာမို့ ဒေါ်အေမီသင်က တော်တော့်ကို ရဲတင်းသည် ။ “ ကျော် ….မမကို ခင်လားဟင် …” ဆိုပြီး သူ့အနားကို အတင်း တိုးကပ်လာသည် ။ ဒေါ်အေမီသွင်
ဆီက တန်ဖိုးကြီး ရွှေမွှေးအနံ့က သူ့ကို မြှူဆွယ်နေသည် ။ဟိုက်လွန်းတဲ့ အကျ င်္ီကြောင့် ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ ရင်စိုင်ဖြူဖြူ တွေကို တဝက်လောက် တွေ့မြင်နေရသည် ။
“ မေးနေတယ်လေ..ကျော်….မမကို ခင်လားလို့…”
“ မမ သိပ် အထီးကျန်ဆန်တာဘဲ ကျော်ရယ် ….မမ…..မမ လေ ….တယောက်ထဲ ကွန်လွန်ခဲ့ရတဲ့ ညတွေ များခဲ့ရတယ်ကွာ..မမ ယောက်ျားက ဘန်ကောက်မှာ စမောလ်လေးနဲ့ ပျော်နေ
တဲ့အချိန် မမကတော့ တယောက်ထဲ…သိလား ..ဟွန်း …..ကံကြမ္မာက သိပ် ရက်စက်တာဘဲ ….”
ဒေါ်အေမီသွင်သည် သူ့အနားကို တိုးကပ်လာပြီး သူ့ရင်ခွင်ထဲကို ဝင်လိုက်ပြီ …။
“ မမကို ဖက်ထားပေးပါလား ကျော် ….”
အလိုက်သင့် ဖက်ထားပေးလိုက်တော့ ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ သူ့ကို ဖက်ထားတဲ့ လက်က လက်သဲတွေက သူ့ကျောပြင်ကို ခြစ်ကုတ်တော့တာဘဲ …။
“ ကျော် ….မမကို နမ်းစမ်းပါကွာ….”
နှုတ်ခမ်းနီရဲရဲတွေက သူ့နှုတ်ခမ်းဆီကို တိုးကပ်လာသည် ။
နှုတ်ခမ်းချင်း စုတ်မိသွားကြပြီ ….။
ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ လျာလေးက သူ့ပါးစပ်ထဲ ရောက်ရှိပြီး အငြိမ်မနေဘူး …။
တယောက်နဲ့ တယောက်လဲ ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်မိနေကြသည် ။ ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ လက်တဖက်က သူ့ပေါင်တဖက်ကို ပွတ်နေသည် ။ သူကလည်း ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို
“ ကျော်ရယ် ….မမ ပျော်လိုက်တာ….ကျော်ဟာ မမ ဘဝကိုစိုပြေစေမယ့် သူတယောက် ဆိုတာ မမ ယုံကြည်တယ် ….”
ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ လက်က သူ့ပေါင်ကြားဂွဆုံနေရာကို ရောက်သွားသည် ။
သံမဏိချောင်းကြီးလို မာကျောနေပြီ ဖြစ်တဲ့ သူ့လက်နက်ကြီးကို ထိကိုင် ပွတ်သပ်လိုက်တဲ့ ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ မျက်နှာသည် ပြင်းထန်တဲ့ ကာမစိတ်တွေကြောင့် နီရဲနေသလို စတော်ဘ
ယ်ရီရောင် နှုတ်ခမ်းနီဆိုးဆေး ဆိုးထားတဲ့ နှုတ်ခမ်း ထူပြဲပြဲတွေကလည်း တဆတ်ဆတ် တုန်နေသည် ။
( ကျော်…ကျော့်ဟာက အကြီးကြီးဘဲကွယ် ….မမ ထင်တော့ ထင်သား….ကျော့်ကိုလေ …မမ တွေ့တွေ့ချင်းထဲက စိတ်ဝင်စားခဲ့တာ …..)
ဒေါ်အေမီသွင်သည် ပါးစပ်က တတွတ်တွတ် ပြောနေသလို သူမရဲ့ လက်တွေကလည်း ဘောင်းဘီဇစ်ကို ဆွဲချနေသည် ။ သူကလည်း ဒေါ်အေမီသွင် အဆင်ပြေစေဖို့ ဖင်ကိုကြွပေး
ပြီး သူ့ဘောင်းဘီကို အောက်ကို လျောချပေးလိုက်တော့ ဒေါ်အေမီသွင်လည်း အတွင်းခံဘောင်းဘီအောက်က ထကြွနေတဲ့ သူ့လိင်တန်ကို ဖျစ်ညှစ် ဆုပ်နယ်နေသည် ။
( လှလိုက်တဲ့ ဟာကြီး ကွယ် ….ဟင်းဟင်း …..)
ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ ပွတ်သပ် ကိုင်တွယ်နေတာတွေကြောင့် သူ့စိတ်တွေ ထိန်းလို့ မရတော့ ..။ သူမ ဝတ်ထားတဲ့ အသားပျော့ပျော့ ပွပွ အင်္ကျီအောက်ကနေ လက်လှိုသွင်းလိုက်
ပြီး ရင်သားတွေကို စမ်းလိုက်မိသည် ။ ဒေါ်အေမီသွင်က သူက တုန့်ပြန်ကိုင်တွယ်လာတာကို ကျေနပ်သလို ပြုံးလိုက်ပြီး ဘရာစီယာကို ဖြုတ်ပေးလိုက်သည် ။ မာတင်းထောင်နေတဲ့
နု့သီးခေါင်း အဖုလေးတွေကို စမ်းမိလိုက်လို့ လက်မနဲ့ ဖိဖိ ပွတ်နေတဲ့ အချိန် ဒေါ်အေမီသွင်က သူ့အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ဖို့ ကြိုးစားပြန်သည် ။ စောစောကလိုဘဲ ဖင်ကြွပေး
ပြီး အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ပေးလိုက်သည် ။
နီညိုညို အတန်ချောင်း တုတ်တုတ်ကြီး ဘွားကနဲ ပေါ်လာသည် ။ ဒေါ်အေမီသွင်က ( အမလေး…ကြီးလိုက်တာ..မမ လင်ကြီးရဲ့ ဟာနဲ့ တခြားစီဘဲ….) လို့ အံ့သြစွာနဲ့ ပြောလိုက်
ရင်း သူ့လိင်ချောင်းကြီးကို အငမ်းမရဘဲ ဆွဲကိုင်လိုက်သည် ။ သူတို့နှစ်ယောက်သည် ပြင်းထန်လွန်းနေတဲ့ ကာမစိတ်တွေကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ဂရုမစိုက် သတိမမူကြေ
တာ့ ။ သီးသန့်ခန်းလေးထဲမှာ လွတ်လပ်နေလို့ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်ပျက်နေကြပေမယ့် ဆိုင်က ဝန်ထမ်း စားပွဲထိုးတွေ အချိန်မရွေး အကြောင်းတခုခုနဲ့ ဝင်ရောက်လာနိုင်သည်လေ ။
ဒေါ်အေမီသွင်က လိင်တန်ထိပ်ပိုင်း အထစ်ကြီးကို ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်ပေးနေသည် ။ သူကလည်း ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ ဆူဖြိုးတဲ့ နို့လှလှကြီးတွေကို အားရပါးရဘဲ ဆုပ်နယ်နေမိသည် ။
( မမ……နမ်းပေးရမလားဟင် ……)
တုန်ခါနေတဲ့ အသံလေးနဲ့ သူ့ကို မေးလိုက်တာကြောင့်…( ဟုတ်…မမ…..) လို့ ပြန်ဖြေမိသည် ။ ဒေါ်အေမီသွင် ပုလွေမှုတ်ပေးတော့မှာကို သိလိုက်တာနဲ့ မာကျော တောင်မ
တ်ပြီးသား သူ့လိင်တန်သည် ပိုမိုကြီးထွား သန်မာလာသလို ထင်လိုက်ရသည် ။
ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေက လိင်တန်ကို ငုံလိုက်ပြီ ….။
ဒေါ်အေမီသွင်သည် အတွေ့အကြုံ မရှိတဲ့ အပျိုဖျန်း အရိုင်းလေး တယောက် မဟုတ်ဘဲ ၀ါရးင့် ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ ကတော်ကြီး တယောက်မို့ သူ့လိင်ချောင်းကို လှလှပပကြီး စုတ်ေ
ပး ပါပြီ ..။
( အိုး…မမရယ်…ကောင်းလိုက်တာဗျာ ……)
လိင်တန် အရင်းပိုင်းကို လက်တဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ပြီး အားရပါးရ စုပ်နေတဲ့ ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ နို့ကြီးတွေကိုလည်း သူက စိတ်ကြိုက် ကိုင်တွယ်နေမိရသည် ။ ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ လျာက
သူ့လိင်တန်ထိပ်ပိုင်းကို ဖိဖိ ကလိပေးနေသည် ။ ကျွမ်းလိုက်တဲ့ ပုလွေ ….။
တအားကို စိတ်တွေ ထကြွ ..အရသာကလည်း ကောင်းလှတာကြောင့် ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို ပြန်လည် ထိုးညှောင့်ပေးနေမသည် ။
တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ သီးသန့်အခန်းလေးထဲ တချက်တချက် ပြွတ်ပြွတ် ပြတ်ပြတ် အသံတွေ ကြားနေရသည် ။ ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ လက်တဖက်က သူ့ဂွေးဥနှစ်လုံးကို ပွတ်သပ်ပေးနေသ
ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ ထမိန်က ပြေကျွတ်နေသည် ။ နို့ကြီးတွေကို အားရအောင် နယ်ဖတ်ပြီးနေပြီမို့ ပြေနေတဲ့ ထမိန်ထဲ လက်သွင်းပြီး ပေါင်တန်တွေ ကြားထဲကို စမ်းလိုက်သည် ။
ဒေါ်အေမီသွင်က သူ့လက် ဝင်သာအောင် သူမပေါင်တန်တွေကို ကားပေးလိုက်သည် ။ ပေါင်ကြားက အမွှေးလေးတွေကို စမ်းမိလိုက်တာကြောင့် ဒေါ်အေမီသွင်သည် ထမီအောက်
မှာ ဘာမှ ခံမဝတ်ထားဘူးဆိုတာကို သိလိုက်ရသည် ။ ဖေါင်းမို့တဲ့ ဆီးခုံကြီးသည် အရေတွေနဲ့ စိုစိုရွှဲနေသည် ။
အကွဲကြောင်း အဖုတ်ကြီးကို သူ့လက်ချောင်းတွေက ဖွဖွလေး စမ်းကြည့်နေတဲ့ အချိန် ဒေါ်အေမီသွင်ကလည်း သူ့လိင်တန်ကို အားရပါးရကို စုတ်နေသည် ။
ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ အဖုတ် အတွင်းသားတွေက နူးညံ့လှသည် ။ အရေတွေ ရွှဲနေတာကြောင့် သူ့လက်ညှိုးက အခက်အခဲ မရှိလှဘဲ အဖုတ်ထဲကို တိုးဝင်သွားနိုင်သည် ။ လိင်ချောင်း
ကို စုတ်နေတဲ့ ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ မျက်လုံးတွေ မှေးမှိတ်သွားတာ သူ တွေ့လိုက်ရသည် ။
အဖုတ်ထဲ ဝင်ရောက်နေတဲ့ သူ့ လက်ညှိုးက အငြိမ်မနေဘဲ မွှေနှောက်ပေးနေသလို လိင်တန်ကို စုတ်နေတာကလည်း ပိုပို မြန်ဆန်လာသည် ။
( အား…အား…….ကောင်းလိုက်တာ ….မမရယ် …..)
ဒေါ်အေမီသွင် အစွမ်းကုန် ပညာတွေ ပြသနေပြီ …။
အိုး..တအားကောင်းသွားတယ် …။ အား…အား…..ဒီအတိုင်း ဆိုရင် မလွယ်ဘူး …။ ကောင်းလွန်းနေပြီ …။ အိုး…မမ…..မမ……ရေရေလည်လည် ကလိပေးနေတယ်…….။
သူ့ လိင်ချောင်းကို ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲက ပြန်ထုတ်ယူဖို့ ကြိုးစားလိုက်ပေမယ့် ဒေါ်အေမီသွင်က ခွင့်မပြုဘူး ..။ ထုတ်ခွင့် မပေးတဲ့အပြင် ဖိဖိ စုပ်ပေးလိုက်သည် ။
မထိန်းနိုင်တော့ဘူး …။ သုတ်ရေတွေ တပြုံကြီး ပန်းထွက်သွားသည် ။ ဒီအချိန်မှာလည်း ဒေါ်အေမီသွင်က ဆက် စုပ်နေတုံးဘဲ ….။
ကောင်းချက်က ရာနှုန်းပြည့်ဘဲ…။ ယောင်ယမ်းပြီး ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ ခေါင်းကို ဖမ်းဆုပ်ကိုင်လိုက်မိရသည် ။
ဒေါ်အေမီသွင်သည် သုတ်ရေတွေကို မြိုချပစ်လိုက်တာကိုလည်း တွေ့လိုက်ရသည် ။
( ကောင်းသွားလား ကျော် ….)
( အင်း…တရမ်းကောင်းတာဘဲ…မမ ရယ် ….)
( ကျော်ကောင်းအောင် မမ အမြဲ လုပ်ပေးမယ် သိလား …..)
ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ ကိုယ်လုံးကို ဆွဲ ဖက်ထားလိုက်မိသည် ။
သူ့ကို ကောင်းအောင် လုပ်ပေးတဲ့ ဒေါ်အေမီသွင်ကို သူကလည်း ကောင်းတာတွေ ပြန်လုပ်ပေးအုံးမည် လို့ သူ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်သည် ။
ရွှေနန်းဘုံ ဘရိတ်ဖတ်စ် စားနေသည် ။
ခါတိုင်းလို ထမင်းကြော်တို့ ကြက်ဥကြော်တို့ မဟုတ်ဘူး ။
ပါးပါးလှီးပေးထားတဲ့ ပန်းသီးစိပ်လေးတွေ ရယ်..သင်္ဘောသီး စိပ်လေးတွေရယ်…..အိမ်မှာ ညှစ်တဲ့လိမ်မော်ရည် တခွက်ရယ် ….။
ရွှေနန်းဘုံ ပိန်ချင်နေသည် ။ ၀ိတ်ချနေသည် ။ ထက်အာကာမိုးမြင့် နဲ့ ညိနေတဲ့အချိန် ရွှေနန်းဘုံ ကိုယ်လုံး လှချင်သည် ။ ထက်အာကာမိုးမြင့်က ပိန်သည် ။ ဘိုက်ချပ်သည် ။
အခုလည်း ထက်အာကာမိုးမြင့်နဲ့ သွားတွေ့မလို့ …။
ညက သူနဲ့ ဖုန်း အကြာကြီး ပြောကြသည် ။ ထက်အာကာမြင့်က ဒီနေ့ တွေ့ကြဖို့ တောင်းဆိုသည် ။
ရွှေနန်းဘုံကလည်း သူနဲ့ တွေ့ချင်နေတာပါဘဲ ..။ လက်သွက်တဲ့ ထက်အာကာမြင့် ရဲ့ အဖက်အပွေ့တွေ အကိုင်အတွယ်တွေမှာ ရွှေနန်းဘုံ သာယာနေမိတာ ကြာပြီ ..။
ဒီနေ့ တွေ့မှာက အပြင်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ အပြင်မှာ တွေ့ကြရင် လူတွေ ၀ိုင်းကြည့်တာ ခံရသည် ။ ထက်အာကာမြင့်က အရပ်မြင့်မြင့် ပိန်ချပ်ချပ် အသာဖြူဖြူ နဲ့ ဝတ်တာစားတာက
လည်း နိုင်ငံခြား အခေါက်ခေါက် ထွက်နေတဲ့ သင်္ဘောသား တယောက်မို့ သားနား သည် ။
ရွှေနန်းဘုံနဲ့ ထက်အာကာမြင့်တို့ တွဲသွားရင် လူတွေက ရုပ်ရှင်မင်းသားနဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေများလား ဆိုပြီး ၀ိုင်းအုံကြည့်ကြသည် ။ ရွှေနန်းဘုံကလည်း အနောက်က ကားတစီး
နဲ့ လုံခြုံရေးလိုက်ပါကြတဲ့ လူတွေ နဲ့ ဆိုတော့ မလွတ်မလပ် ဖြစ်ကြရသည် ။
ညက ထက်အာကာမြင့်က ပြောသည် ။ သူ့အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိကြဘူး…..တဲ့ ..။
ထက်အာကာမြင့်ရဲ့ အဖေ နဲ့ အမေ က အထက်မြန်မာပြည်ကို သွားနေကြသည် …တဲ့…။
ရွှေနန်းဘုံနဲ့ သူနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အိမ်မှာဘဲ တွေ့ကြရအောင်……တဲ့…။ ရွှေနန်းဘုံက သဘောတူသည် ။ သူ့အနမ်းတွေ အကိုင်တွေကို ရွှေနန်းဘုံ တောင့်တလိုလားနေမိ
သည် မဟုတ်လား ….။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့ မနက် စောစော ရွှေနန်းဘုံ အိပ်ရာက ထတာနဲ့ ကိုယ်လက် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပြီးတာနဲ့ ရေချိုးသည် ။ တကိုယ်လုံးကို သေသေချာချာ ပွတ်တိုက်ပြီး သန့်စင်
သည် ။ သူ ကိုင်တဲ့အခါ မနံစေဖို့….။
ဘရိတ်ဖတ်စ်ကိုလည်း ၀ိတ်တက်စေတဲ့ဟာတွေ မစားတော့..။ မစားတော့တာ ကြာပါပြီ ..။ ထက်အာကာမြင့်နဲ့ စ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ အချိန်ထဲကပါ…။
( ကား အဆင်သင့် ဖြစ်ပါပြီ…မမလေး ….)
အိမ်ဖေါ်မလေး နော်ဖွေး လာပြောလို့ ထမင်းစား စားပွဲကြီးက ထလိုက်သည် ။
ရွှေနန်းဘုံတို့ အိမ်မှာ ရွှေနန်းဘုံကို လူတိုင်းက ဖူးဖူးမှုတ်ထားကြတာ ..။ ရွှေနန်းဘုံကို ဒက်ဒီ မာမီတို့က တအားချစ်ပြီး တအား အလိုလိုက်ကြတာကို အိမ်သားတွေ အိမ်စေတွေက
တိုက်ရှေ့ကို ရောက်တော့ အဝါရောင် မာဇဒါ၃၂၃ကားလေးရဲ့ ပေါ်မှာ ယဉ်မောင်း ဆရာသိန်းဆိုင် အဆင်သင့် ကားစက်နှိုးပြီးသား နဲ့ စောင့်ဆိုင်းနေတာကို တွေ့ရသည် ။
ဒီကား အနောက်မှာတော့ မာဇဒါ ၁၃၀၀ ဗင်ကားပြာလေး က ရှိနေသည် ။
ဗိုလ်ကြီး ထင်အောင်ကျော်နဲ့ အဖွဲ့က ကားထဲမှာ ရှိနေသည် ။
ဒီမာဇဒါ၁၃၀၀ အပြာလေးကို မောင်းသူက တပ်ကြပ်ခင်ညို ..။ ဒီခင်ညိုကို ရွှေနန်း နဲနဲမှ ကြည့်လို့ မရဘူး …။ ခင်ညို့မျက်လုံးတွေက ရိုင်းသည် ။ အကြည့်တွေက ရဲလွန်းသည် ။
ခင်ညို့အကြည့်တွေက တဏှာ အခိုးအေငွ့တွေ ဖုံးနေသည် ။ ရွှေနန်းလုံရဲ့ တင်ပါးတွေကို စိုက်ကြည့်နေတာတွေ ရွှေနန်းဘုံ တွေ့သည် ။ သူသည် ရွှေနန်းဘုံကို ပြစ်မှားနေတယ်
ဆိုတာ ရွှေနန်းဘုံ သိသည် ။
ဒီ ခင်ညိုသည် ရာဇဝတ်အိုးကို တုတ်နဲ့ ထိုးချင်နေတဲ့လူ …။
ရွှေနန်းဘုံ တိုင်လိုက်ရင် ခင်ညို သွားချီး ယိုးဒယားက ကသွားလိမ့်မည် ..။ မျက်နှာအားရ နဲ့ ၀ိုင်း ဗျင်းကြမယ့် အရာရှိတွေက တပုံကြီး …။
ခက်တာက ရွှေနန်းဘုံက သူ့အပြစ်ကို လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြဖို့က ခက်သည် ။ ခင်ညိုက ရွှေနန်း ဖင်တွေကို ကြည့်သည် လို့ တိုင်ရတာက သိပ် မခိုင်လုံလို့ ..။
ဟင်း…တနေ့နေ့တော့ ဒီနှာဘူးကို တိုင်မယ် …။
( ဘယ်ကို မောင်းရမလဲ..ရွှေနန်း ….)
( ကိုထက်တို့ အိမ် ….)
( ဗိုလ်ကြီးတို့..အပြင်မှာဘဲ စောင့်..ရွှေနန်း …လွတ်လွတ်လပ်လပ် စကားပြောချင်လို့ …..)
ရွှေနန်းဘုံ က ကားပြာလေးထဲက ထွက်လာတဲ့ ထင်အောင်ကျော်ကို လှမ်း ပြောလိုက်ပြီးတာနဲ့ ခြံထဲကို ဝင်သွားသည် ။
ထင်အောင်ကျော်လည်း ဘာမှ မတတ်နိုင် ..။ နေဆိုတော့လဲ နေရုံပေါ့ ..။ ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင် ဆီကိုတော့ အကြောင်း ကြားလိုက်သည် ။ ရွှေနန်းဘုံ သူတို့ကို ခြံထဲ အဝင်မခံတဲ့အကြောင်း
စက်နဲ့ အကြောင်းကြားလိုက်သည် ။
ရွှေနန်းဘုံကို ထက်အာကာမြင့်က အိမ်ထဲကို ဝင်လိုက်တာနဲ့ ဆီးကြို ပွေ့ဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့ စုတ်နမ်းလိုက်သည် ။
ရွှေနန်းဘုံကလည်း အငမ်းမရ ပြန်လည် စုတ်ယူနမ်းလိုက်သည် ။
( ကိုထက်….အိမ်ကလူတွေ အားလုံးကို ရှင်းထားတယ် မဟုတ်လား ….}
( ဒါပေါ့….သူတို့ကို ရက်နား ပေးလိုက်တယ် …..ဒါမှ ရွှေနန်း နဲ့ ကိုထက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်နိုင်မယ် လေ…}
( အက်စ်ကော့ တွေကိုတော့ ခြံထဲ မဝင်ခိုင်းဘဲ အပြင်မှာဘဲ စောင့်နေခိုင်းလိုက်တယ် …..)
( ကောင်းတယ်…ရွှေနန်း …..)
ထက်အာကာမြင့်က ရွှေနန်းကို လက်ဆွဲပြီး အိပ်ခန်းထဲကို ခေါ်ဆောင်သွားလိုက်သည် ။
( ဟိတ်..ကိုထက်..ရွှေနန်းကို ဘယ်ခေါ်သွားမလို့လဲ ….အိပ်ခန်းကြီးလား ….)
( အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောရအောင်ပါ ရွှေနန်းရယ် …..)
လေအေးစက် ( အဲယားကွန်း ) က အေးစိမ့်နေသည် ။
နှစ်ယောက်အိပ် ကုတင်ကြီး က ရွှေနန်းဘုံကို ရင်တွေ တုန် စေသည် ။ ကိုထက် ငါ့ကို အစွန်းဆုံး အထိများ ချစ်ပစ်တော့မလား မသိဘူး …..ဆိုတဲ့ စိတ်က ရွှေနန်းဘုံ ကို ကြက်သီးတွေ
ဖျန်းကနဲ ထသွားစေသည် ။
( ကိုထက် …ရွှေနန်း ကြောက်တယ် …)
( ချစ်တာဟာ ကြောက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး..ရွှေနန်းရယ် ….ကိုထက်က ရွှေနန်းကို အရမ်း ချစ်နေတာ မသိဘူးလား …)
( တကယ် ဟုတ်လို့လား …..)
( တကယ်ပေါ့..လာ..သက်သေပြမယ် …)
( အိုး..ကြောက်ပါတယ်ဆို …..)
ကိုထက်ရဲ့ အနမ်းတွေက သဲသဲမဲမဲ ဘဲ ….။
ရွှေနန်းရဲ့ လည်တိုင်ကို သူ တအား စုတ်နမ်းတေ့ ရွှေနန်း အသဲတယားယားနဲ့ စိတ်တွေ မတရားကြီး ထကြွလာရသည် ။
( ကိုထက်ရယ်…အင်ဟင် …..)
ကိုထက်ရဲ့ လက်ဖဝါးကြီး တဖက်က ရွှေနန်းရဲ့ စွင့်အားတဲ့ တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို ဆုပ်နယ်နေသည် ။ ရွှေနန်းကလည်း အရင် သူနဲ့ ချိန်းတွေ့တိုင်း သူက ရွှေနန်းရဲ့ အတွင်းခံ ပင်တီကို
ချွတ်ချွတ်နေလို့ ဒီတခါတော့ သူ အခက်အခဲ မရှိရအောင် အိမ်က ထွက်ကထဲက ပင်တီ ကို ဝတ်မလာခဲ့ဘူး ..။ ရွှေနန်း ပင်တီ မပါတာကို ကိုထက်ကလည်း သတိပြုမိဟန်တူသည် ။
ရွှေနန်း ဝတ်လာတဲ့ ဆဲဗ်းဒေးအသား ထမိန် အနက်ကလေးကို ဖြေချွတ်ဖို့ ကြိုးစားသည် ။ ထမိန်စ ပြေသွားတော့ ထမိန်အထဲကို လက်နှိုက်ပြီး ပေါင်ကြားက မိန်းမအင်္ဂါကို စမ်းသည် ။
ကိုထက်ရဲ့ လက်ချောင်းတွေက တရွရွနဲ့ ရွှေနန်းရဲ့ မိန်းမ အင်္ဂါစပ်အပေါ်မှာ ပွတ်ပေးနေသည် ။
ရွှေနန်း စိတ်တွေ တအား ထကြွသထက် ထကြွလာသည် ။
အရည်တွေက စိုစိုရွှဲနေပြီ ….။
ကိုထက်က ရွှေနန်းဘုံရဲ့ လက်တဖက်ကို ဆွဲယူကာ ပြေကျနေတဲ့ သူ့ပုဆိုးထဲကို ပို့ပေးလိုက်သည် ။
ရွှေနန်း ကြက်သီးမွေးညင်းတွေ ဖျန်းကနဲ ဖျန်းကနဲ ထသွားရသည် ။ ကိုထက်ရဲ့ ပူပူနွေးနွေး အတန်ချောင်းကြီးကို စမ်းမိလိုက်လို့ ..။
ရွှေနန်း လက်ကို ဒီမာမာအချောင်းကြီးဆီကနေ ပြန်ရုပ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်ပေမယ့် ကိုထက်က သူ့လက်နဲ့ ရွှေနန်းရဲ့ လက်ကို အုပ်ကိုင်ထားလို့ ဖယ်လို့မရဘဲ ဒီပူနွေးနွေး အတန်ကြီးကို
ထိထားကိုင်ထားနေရသည် ။ ရွှေနန်းလဲ တကယ်တော့ ဒီလို အတွေ့အကြုံကို လိုချင်နေမိတာပါ ..။ ကိုယ့်ကို အထင်အမြင်သေးမှာကို စိုးလို့ ဟန်ဆောင် ရုန်းကန်နေရတာ…။
“ အရမ်းကို တင်းကြပ်နေတယ်..ရွှေနန်းရယ်…ကိုယ့်ဟာကြီးကို ဆုပ်ပေးစမ်းပါ….”
“ ကိုထက်ဟာကြီးက အကြီးကြီးဘဲ..ရွှေနန်း ကြောက်တယ်ကွာ…”
“ မကြောက်နဲ့ ရွှေနန်း..ချစ်သူ ဘဝမှာ ဒါတွေက အမြဲ လုပ်နေကျ သဘာဝ ဘဲ..လူတွေ စခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာဦးအစ အချိန်ကထဲက လူယောက်ျားနဲ့ လူမိန်းမ ဒီလိုတွေ လုပ်လာခဲ့ကြလို့ လူဦးရေ တိုးပွား
လာကြရတာ…ကိုထက်တို့ မိဘတွေ အဖိုးအဖွားတွေလည်း ဒီလိုဘဲ ချစ်ခဲ့ကြ ပေါင်းဖက်ခဲ့ကြလို့ ကိုထက်တို့ လူဖြစ်လာကြရတာဘဲ လေ …”
“ အို..ရွှေနန်းတော့ ကလေး ရသွားမှာကို ကြောက်မိတယ် ….”
“ ကလေး မရစေရပါဘူး ..ကိုထက် တာဝန်ယူပါတယ်…”
“ တကယ်လား …ကိုထက်..”
“ တကယ်ပေါ့ ရွှေနန်းရယ်..ရော့ သေသေချာချာ ဆုပ်ထား..ဒီခေါင်းပိုင်း ကို နယ်ပေး..ရွှေနန်း လက်ကလေး နဲ့ ချေနယ်ပေး…”
“ ဟုတ်တယ်…ရွှေနန်းအထဲကို ထိုးထည့်ချစ်ပေးမယ့် ဒစ်ကြီးပေါ့ ….”
“ အို..ဟင့်..ကိုထက်က ဘာတွေ ပြောနေမှန်း မသိပါဘူး…ရွှေနန်း ရှက်တယ်…”
“ မရှက်နဲ့..နယ်ပေး..ဒစ်လုံးကြိးကို နယ်ပေး….အင်း..အင်း….ရွှေနန်း လုပ်တာ တအားကောင်းတာဘဲ….အင်း..ဟုတ်ပြီ..နယ်…နယ်…နယ်ပေး…”
ရွှေနန်းလည်း ကိုထက်ရဲ့ တုတ်တုတ်ခဲခဲ အတန်ချောင်းကြီးကို ဖျစ်ညှစ် ဆုပ်နယ်ပေးနေမိသည် ။ ကိုထက်ကလည်း ရွှေနန်း အင်္ဂါစပ်ကို လက်ညှိုးနဲ့ ထိုးသွင်း ကလိပေးသည် ။
အရေတွေ ပေလူးရွှဲနေတာကြောင့် ကိုထက် လက်ညှိုးက ရွှေနန်း အင်္ဂါစပ်ထဲကို တိုးဝင်လို့ ရနေသည် ။ ကိုထက် က ရွှေနန်းကို ပက်လက်လှဲခိုင်းပြီး ရွှေနန်းရဲ့ ပေါင်ကြားကို ခေါင်းထိုးဝင်
“ ကိုထက် ရွှေနန်းကို နမ်းပေးမလို့…”
“ အို့..အယ့်နေရာကို နမ်းရလို့လား..ကိုထက် မရွံဘူးလား…”
“ နမ်းရတယ်….သမီးရီးစားတွေ ချစ်သူတွေ နမ်းကြတယ်..ကဲ..ကိုထက် နမ်းပေးမယ်..ခံကြည့်..ရွှေနန်း ကြိုက်မှာပါ…”
ပြောပြောဆိုဆို ကိုထက်က ရွှေနန်းရဲ့ အကွဲကြောင်းကို သူ့လျာကြီး ထုတ်ပြီး အောက်ကနေ အထက် ပင့်ကော် ယက်လိုက်ပါသည် ။
ရွှေနန်း တဆတ်ဆတ် တုန်ခါသွားသည် ။
ရွှေနန်းသည် ကိုထက်ကို ဟန်ဆောင်ကာ မေးခဲ့ခြင်းပါ ..။ စောက်ပတ်ယက်ခြင်း ( သို့မဟုတ် ) ဘာဂျာကိုင်ခြင်းကို ရွှေနန်း သိပြီးသားပါ ..။ သူငယ်ချင်းတွေ နဲက အပြာ ဗီဒီယိုကားတွေကို အခါခါ
အကြိမ်ကြိမ် ကြည့်ဖူးထားသူမို့ ဘာဂျာကိုင်တာ ဘာလဲ ဆိုတာကို သိပြီးသား ပါ …။
ဒီလို ဘာဂျာကိုင်ခံရတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ခံဘူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဆီကလည်း သိခဲ့ပြီးသား ဖြစ်လို့ ဘာဂျာမှုတ် ခံချင်နေခဲ့သူ ဖြစ်သည် ။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား သင်တန်း အတူတူ တက်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ စစ်သံမှူးရဲ့ သမီး နာနာ က ဘာဂျာမှုတ်တာ ခံရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ခရေစေ့တွင်းကျ ဖေါက်သည်ချ ပြောပြခဲ့လို့ ရွှေနန်းလည်း
ဘာဂျာကိုင်တာကို ခံချင်နေမိခဲ့တာ ကြာပါပြီ …။
ကိုထက်က လျာပြားကြီးနဲ့ ဖြေးဖြေးချင်း စုန်ချီ ဆန်ချီ ယက်ပေးနေသည် ။
“ အို..ဟင်….အို…ဟင်….အိုး…ဟင်း…ဟင်း…ဟင်း…….ကိုထက်ရယ်..ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲဟင် ……”
ကိုထက်က စကားပြန်မပြောအားဘူး ..။
ရွှေနန်း အဖုတ်ကို ယက်ပေးနေသည် ။ ရွှေနန်းလည်း ဒီနေရာ တဝိုက်ကို ရေနဲ့ရော ဆပ်ပြာနဲ့ရော သေသေချာချာ ဆေးကြောခဲ့လို့ တော်ပါသေးတယ် လို့ စိတ်ထဲမှာ တွေးနေမိရင်း ကိုထက်
ယက်သမျှကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ခံယူနေမိရပါသည် ..။
ရွှေရေးလွင်လွင်..မီမီလှိုင်တို့ နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ကားကို လှော်ကားကန်ဖက်ကို ဦးတည်ပြီး မောင်းနေရင်း ရွှေရေးလွင်လွင်နဲ့ တွေ့ကြရင် ရွှေရေးလွင်လွင်ကို ချော့မော့ဖို့ စဉ်းစားလာခဲ့သည် ။
မီမီလှိုင် ကမကထ လုပ်ပြီး ဖုန်းလိုက်ဆက်..လူစုစည်းခဲ့လို့ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်း တော်တော်များများ ကို စုစည်းမိသည် ။ ထမင်းတွေ ဟင်းတွေ ချက်သူက ချက် အော်ဒါမှာတဲ့လူက မှာနဲ့ မိတ်ဆုံ
စားပွဲ ဖြစ်မြောက်လာလို့ ဆက်ဆက် လာခဲ့ဖို့ မီမီလှိုင် သူ့ဆီကို ခဏ ခဏ ဆက်သည် ။
သူ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကို ရောက်ပြီး ရွှေရေးလွင်လွင် နဲ့ တဖြေးဖြေးကင်းကွာခဲ့ပြီး ပြတ်သလို ဖြစ်ခဲ့ရပေမယ့် ရွှေရေးနဲ့ သူ ဘာမှ ရန်ဖြစ်တာ စိတ်ဆိုးတာ မဖြစ်ခဲ့ကြဘူး ..။ အနေဝေးပြီး
တယောက်နဲ့ တယောက် ဝေးသွားခဲ့ကြတာ ..။ ဒါဏ်ရာရပြီး ဆေးရုံတက်ခဲ့တဲ့ အချိန် ရွှေရေး သူ့ကို လာတွေ့သည့်အချိန် ရွှေရေးက သူ့ကို တပ်ထဲက ထွက်ခိုင်းခဲ့တော့ သူက
မထွက်နိုင်ဘူးလို့ ပြောခဲ့သည် ။ ရွှေရေး စိတ်ဆိုးသွားခဲ့သည် ။
ရွှေရေးလွင်လွင် နဲ့ သူ အကြိမ်ကြိမ် ညားခဲ့ကြတာတွေ ကို ပြန်လည် မြင်ယောင်မိပြန်တော့ သူ့စိတ်တွေ ပူနွေး ထကြွလာရသည် ။
လင်မယား ဘဝမှာ အရှက်ကုန်ကြသည် ဆိုတဲ့ စကားလိုဘဲ လင်မယားလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အစွန်းဆုံး အထိ ချစ်ခဲ့ အိပ်ခဲ့ကြတဲ့ ရွှေရေးလွင်လွင် နဲ့ သူ့အကြားမှာ အရှက်ကုန်ခဲ့ကြသည်
လို့ ပြောရမည် ..။ လူမရှိတဲ့ ရွှေရေးတို့ ခြံကြိးထဲ သူတို့ ချိန်းတွေ့ကြတဲ့အခါ အခါခါ လုပ်ခဲ့ကြပြီးတာမို့ နှစ်ယောက် တွေ့ကြရင် အဝတ်အစားတွေ အကုန် ချွတ်ပစ်ပြီး ကိုယ်တုံးလုံးတွေနဲ့ တဝကြီး
မီးကုန်ယမ်းကုန် စပ်ရှက်ခဲ့ကြတာ ..။ ပုံစံ အမျိုးမျိုး ပြောင်းပြီး အပီအပြင် စပ်ရှက်ခဲ့ကြလို့ တယောက် နဲ့ တယောက် မရှက်ကြတော့ဘူး ..။ ရွှေရေးကလည်း သူမလိုချင်တာတွေကို
ပွင်ကပွင့်လင်းလင်း တောင်းဆို တောင်းခံတတ်သလို သူကလည်း ရွှေရေး လိုချင်တာတွေကို ကောင်းကောင်းကြိး ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည် ။
ရွှေရေး နဲ့ လုပ်ခဲ့တာတွေကို ပြန်လည် မြင်ယောင်မိပြန်တော့ အရင်တုံးကလို ဘဝမျိုး ပြန်ရောက်ချင်မိသွားရသည် ။ ရွှေရေးကို စိတ်ကျေနပ်အောင် ပြန်ချော့မော့ပြီး ရွှေရေးနဲ့ ဟိုတုံးကလိုဘဲ
ပွဲကြမ်းကြရရင် ကောင်းမည် လို့ စိတ်ရိုင်းအတွေးရိုင်းတွေ ဝင်နေမိသည် ။
သည်ကို လာဖို့ ခွင့် မနည်း တောင်းခဲ့ရသည် ။
ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင်က လူစားထိုးစရာ မရှိလို့ သွားခွင့်မပေးနိုင်ဘူး လို့ သူ့ကို ငြင်းဆန်လို့ တော်တော့်ကို ခက်ခဲ့တာ ..။
ရွှေနန်းဘုံ ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် အနောက်က လိုက်ရတာ တော်တော့်ကို ခက်သည် ။ ရွှေနန်းဘုံ ရီးစားနဲ့ ချိန်းတွေ့တဲ့အခါ သူတို့ကို ခြံထဲ ဝင်ခွင့် မပြုခဲ့လို့ ရွှေနန်းဘုံ လုပ်ချင်တာ လုပ်နေတာကို
မလုပ်ပါနဲ့လို့ တားဖို့ ဆီးဖို့တော်တော့်ကို ခက်ခဲသည် ။
သူမရီးစား ကိုထက် နဲ့ ချိန်းတွေ့အပြီး မောပန်းခွေလျော့ကာ ကားပေါ် ပြန်လိုက်ပါလာတဲ့ ရွှေနန်းဘုံကို သူကြည့်ပြီး “ အင်း..ကောင်မလေးတော့ ရေရေလည်လည် အဖြုတ်ခံလာပြီ ” လို့ သူ့စိတ်ထဲ
ဟော..မိတ်ဆုံစားပွဲ ရှိရာကို သူ ရောက်လာပြီ ..။ ရွှေနန်းဘုံအကြောင်းကို တွေးတောလာတာတွေ ရပ်ဆိုင်းသွားသည် ။
သူ့ကားမောင်းဝင်လာတာကို စူးစိုက်ကြည့်နေတဲ့ ရွှေရေးလွင်လွင် နဲ့ မီမီလှိုင်တို့ကို သူ တွေ့ရသည် ။
“ ဟား..ထင်အောင်ကျော် လာပြီဟ…”
မီမီလှိုငိ နဲ့ ရွှေရေး အနားမှာ စားစရာတွေ ခင်းကျင်းပြင်ဆင်နေတဲ့ စိန်အောင်ကြီးရဲ့ အသံသြသြကြီးနဲ့ အော်လိုက်တဲ့ အသံကို အားလုံး ကြားကြသည် ။
သူ့ကားဆီကို လျောက်လာကြတဲ့ သူငယ်ချင်း ကျောင်းနေဖက်တွေကို နုတ်ဆက်ရင်း ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်သည် ။
သူ့အကြောင်းကို ကြားထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက သူ့ကို “ လူကြီးအိမ် ” ရောက်နေတာ ဘယ်လိုလဲ လို့ ၀ိုင်းမေးကြသည် ။ သူက ပြန်ဖြေနိုင်သလောက် ပြန်ဖြေပြီး မီမီလှိုင် နဲ့ ရွှေရေးတို့ အနားကို
သွားလိုက်သည် ။ မီမီလှိုင်က သူ့ကို ရွှေရေးနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ ထားခဲ့ပြီး ရှောင်ပေးသွားခဲ့လို့ ရွှေရေးကို သူ ပြန် ချော့ဖြစ်သွားသည် ..။ ရွှေရေးကလည်း သူနဲ့ ပြန်ပေါင်းထုပ်ချင်တဲ့ သဘောရှိကြောင်း
သူ သိလိုက်သည် ။
ရွှေရေးနဲ့ သူ ပြန်ပြေလည်မိကြတာနဲ့ မိန်းမသဘာဝ အရ ရွှေရေးက သူ့ကို မာန်မဲ ဆူပူတော့တာဘဲ ..။
“ ထင်အောင်ကျော်..နင့်ရဲ့ လူကြီးသမီး နဲ့ နင် ဘယ်လောက်အဆင့်အထိ ရင်းနှီးနေကြပြီလဲ…” လို့ မျက်စောင်းထိုးပြီး နှုတ်ခမ်းစူကာ မေးတော့တာဘဲ ..။
“ ဘယ်လိုအဆင့်မှ မဟုတ်ပါဘူး..ရွှေရေးရယ်…သူတို့ ခိုင်းတာကို လုပ်နေရတာပါ…” လို့ သူဖြေပေမယ့် ရွှေရေးက မကျေနပ်လှဘူး ..။
“ ဟွန်း..ရွှေဘဲ စားသောက်ဆိုင်ကို နှစ်ယောက်ထဲ လိုက်ပို့ခိုင်းတာလား..ထမင်း လက်ဆုံ စားကြတယ်ပေါ့လေ..ဟုတ်လား….”
“ နှစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ပါဘူး ရွှေရေးရယ်..ရဲဘော်တွေ ကားတစီးအပြည့် ပါပါတယ်….” လို့ သူက ပြန်ဖြေသည် ..။
“ ထင်အောင်ကျော်..နင်က ထောက်လှမ်းရေး လား..” လို့ လည်း မေးပြန်သည် ..။
“ဘာလို့ မေးတာလဲ..နင် ဘာကြားလို့လဲ ရွှေရေး..”
“ အော်..ထောက်လှမ်းရေး ဆိုတာတွေကို လူတွေက အသေမုန်းနေကြတာဟဲ့..နင့်ကို လူမုန်း မများစေချင်လို့…တနေ့ကျရင် နင် လူထုရဲ့ ဆုံးမတာကို မခံရစေချင်လို့….”
ရွှေရေးလွင်လွင်ရဲ့ တပ်က ထွက်ဖို့ ပြောတာတွေကို သူ အထပ်ထပ် ကြားရပြန်သည် ..။
မိတ်ဆုံစားပွဲနေ့က ရွှေရေးနဲ့ သူ ပြန်ပေါင်းထုပ်တဲ့ပွဲကလေး အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ကြလို့ အခု ရွှေရေး နဲ့ သူ ချစ်သူတွေ ပြန်ဖြစ်နေကြပြီ ….။
“ နင်နဲ့ငါနဲ့ အရင်တုန်းကလိုဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြန်တွေ့ကြရအောင်ဟာ…”
“ ဟွန်း ..အခုမှ လာလုပ်နေတယ်..နင် ငါ့ကို ပစ်ထားတာ အကြာကြီးဘဲ…”
“ ရွှေရေးကလဲဟာ..စိတ်ကလဲ နာနေတုံးဘဲ…ခွင့်လွှတ်ပြီး ချစ်မယ်ဆို…”
“ တော်ပါ ထင်အောင်ကျော်ရယ်..ငါ့ကို နင် ရိုးအီသွားပြီး အဆက်ဖြတ်တာ မဟုတ်လား….ငါးစိမ်းမြင်လို့ ငါးကင် ပစ်တာ မဟုတ်လား ….”
“ မဟုတ်ပါဘူးဟာ..နင့်ကို ဘယ်တော့မှ မရိုးမအီပါဘူး..နင်က ဒီလောက် လှတာ..တောင့်တာလဲ အရမ်း…”
“ တော်စမ်းဟာ..ငါလေ..နင့်ကို စိတ်နာနေတုန်းဘဲ…”
“ မနာပါနဲ့တော့ဟာ..နင်နဲ့ ငါနဲ့ အရင်လို ပြန်ချစ်ကြရအောင် …”
ရွှေရေးကျေနပ်အောင် တော်တော်ကြီး ကြာအောင် ပြန်ချော့ခဲ့ရသည် ။ သူနဲ့ ရွှေရေး သူအခုနေတဲ့ တိုက်ခန်းမှာ တွေ့ကြဖို့ ချိန်းလိုက်ကြသည် ။
ရွှေရေး အခုလို နှစ်ယောက်ထဲ တွေ့ကြဖို့ သဘောတူလက်ခံလိမ့်မယ်လို့ မထင်ခဲ့ ။ ရွှေရေးက တွေ့မယ်လို့ ပြောလိုက်တော့ အရမ်း ဝမ်းသာသွားရသည် ။
ရွှေရေးမလာခင် ညက အခန်းရှင်းရသည် ။ ညစ်ပတ် ရှုပ်ပွနေရင် ရွှေရေး စိတ်ဆိုးပြီး ပြန်သွားမှာ စိုးလို့ ။
ရွှေရေး စားဖို့ မုန့်ပြေးဝယ်ထားရသေးသည် ။
မနက်စောစော ရေထချိုးတော့ တကိုယ်လုံးကို ဆပ်ပြာတိုက်တဲ့အချိန် ပေါင်ကြားနဲ့ ဖွားဖက်တော်နေရာတွေကျု အထူး ဆေးကြောပွတ်တိုက်သည် ။ မတော်လို့ ဒီနေ့ ရွှေရေးနဲ့ ဟိုဒင်း ဖြစ်ခဲ့ရင် ရွှေရေးက နံစော် ညစ်ပတ်နေတယ်လို့ အပြစ်တင်မှာ စိုးလို့ ။ ရည်းစား ဘဝက ရွှေရေးနဲ့ ချိန်းတွေ့ကြတာ တနေကုန် အလုပ်များနေတာကြောင့် ရေမချိုးခဲ့ရ ။ ရွှေရေးနဲ့ ဖက်ရင်း နမ်းရင်း တဆင့်ပြီးတဆင့်တက်လာကြပြီး ရွှေရေးက “ နမ်းပေးရမလားဟင်..” လို့ မေးရင်း သူ့ဖွားဖက်တော်ကို ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်ရင်း ပါးစပ်နဲ့ ငုံဖို့ လုပ်တဲ့အချိန် ဖွားဖက်တော်က ရေမဆေးရသေးလို့ နံစော်ညစ်ပတ်တာနဲ့ကြုံသွားရသည် ။ ရွှေရေးက နမ်းမပေးတော့ဘူး ။ နင် သိပ်ညစ်ပတ်တယ်ဟာ..လီးလဲ မဆေးဘူး..လို့ ပြောပြီး အိမ်ပြန်မယ်..ပြန်မယ် လုပ်တော့တာဘဲလေ ..။
ဒီနေ့မနက်တော့ ကျကျနန နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကို သေသေချာချာ ဆေးကြောထားလိုက်တယ် ..။ ရွှေရေး မှုတ်တဲ့အခါ အနံ့အသက်နဲ့ ချေးတွေ ဘာတွေ မရှိနေအောင် ။အင်း..တွက်ရေးကတော့ စက်သူဌေး..ဘဲ..။ နောက်မှ တွက်ကြည့်..စက်မရှိ ဖြစ်နေမလား မသိဘူး ဆိုပြီး ပြုံးမိရတယ် ..။
ရွှေရေးလာရင် စားဖို့ သစ်သီးတွေ မုန့်င်္တေ ပြင်ဆင်နေတုံး ရွှေရေး ဖုန်းဆက်တယ် ။ သူ ထွက်လာပြီ…တဲ့ ။ ရွှေရေး လာတော့မယ် သေချာသွားတော့ ပေါင်ကြားထဲက ငတိက အလိုက်ကန်းဆိုး မသိဘဲ ဆတ်ကနဲ ခေါင်းထောင်လာတယ် ။
ရွှေရေး ကားကို ပြူတင်းပေါက်ကနေ မျှော်စောင့်နေမိတယ် ။ စိတ်ကောက်တာကို ပြန်ချော့ ပြန်ပေါင်းထုပ်ရတဲ့ အရသာက တော်တော်တော့ ထူးခြားတယ် ။ဟော..ရွှေရေးရဲ့ ကား ရောက်လာပြီ ။ တိုက်အောက်ကို ပြေးဆင်းပြီး ကြိုလိုက်တယ် ။
ရွှေရေးက ကားပြူတင်းပေါက်ကနေ လှမ်းအော်ခေါ်တယ် ။“ ဟဲ့..ထင်အောင်ကျော် လာစမ်း…အထုပ်တွေ ၀ိုင်းသယ်….”တဲ့ ။ ရွှေရေးရဲ့ အပြောအဆို အမူအရာတွေက ကဗျာမဆန်ရုံတင်မကဘူး ။ ဖီလင်ပြယ်စရာကြီး …။သူများ သမီးရည်းစားတွေ ခေါ်ကြသလို ကိုကို..မောင်မောင် မခေါ်တဲ့အပြင် ခပ်ငေါက်ေါက် ဟောက်တတ်တာကို ပြောတာပါ ။ တကယ်တော့လဲ ဖီလင် မပြယ်ပါဘူး ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ရွှေရေးရဲ့မို့မောက်တဲ့ ရင်ထွားထွားတွေကို မြင်လိုက်ရတော့ စိတ်ထဲမှာ နွေးကနဲ အရှိန်တက်သွားရတယ် ။
ရွှေရေးက ရင်တွေတင် ထွားတာ မဟုတ်ဘူး..တင်ပါးကြီးတွေကလည်း ပထမတန်းစား ဆိုတာ တိုက်ပေါ်ကို တက်ကြတဲ့ အချိန် ရွှေရေးရဲ့ အနောက်က လိုက်လို့ ရွှေရေး တင်ပါးတွေ ဟိုတုန်းကထက်ပိုကားထွားလာတာ သတိပြုမိရတယ် ။
“ ငါက လာကြည့်တာဟ ..နင်က စစိဗိုလ် ဆိုတော့ ဘယ်လောက်များ သားသားနားနား နေသလဲလို့..တိုက်က မဆိုးပါဘူး..သန့်သားဘဲ…”
ရွှေရေးက တိုက်လှေခါးကို ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်တာပါ ။
အခန်းထဲလဲ ရောက်ရော ရွှေရေးတယောက် ဟိုအခန်းဝင်ကြည့်..ဒီအခန်းဝင်ကြည့် စပ်စုပါတော့တယ် ။
“ နင်..လူကြီးသမီးကို နင့်အခန်း ခေါ်ဘူးလား..”
“ အာ..ရွှေရေးရယ်..ဘာတွေ လျောက်မေးနေတာလဲ..သူတို့က လာမလား..လာပါ့မလား..နင်ကလဲ..”
“ အံမာ…သူတို့က ဘာသာဲး့ ထုထားတာမို့လဲ..သူတို့လဲ လူတွေ ဘဲလေ..ဟွန်း….”
ရွှေရေးသည် စကားပြောရတာ မလွယ်ဘူး ။ အထအန လဲ ကောက်တတ်သလို စိတ်ကလဲ တအား တိုသည် ။ ရွှေရေးက အိပ်ခန်းထဲကိုတော့ မဝင်ဘူး ။ အပေါက်ဝကဘဲ အထဲကို ချောင်းကြည့်တယ်။
“ အဟီး..ဒီလိုဆိုတော့လည်း နင်က သန့်ရှင်းသားဘဲ..အင်း…နင့်အခန်းက မိုက်တယ်..မိုက်တယ် …”
“ ဘာစားမလဲ ရွှေရေး..ဆနွင်းမကင်းလဲ ဝယ်ထားတယ် ..အုန်းနို့ကျောက်ကျောရော….”
“ နင်က တော်တော် အလိုက်သိသားဘဲ…”
ပြုံးပြီး ရွှန်းရွှန်းစားစား ကြည့်နေတဲ့ ရွှေရေးကို ကြည့်ပြီး စိတ်ထဲမှာ မချင့်မရဲ ဖြစ်လာပြီး ခါးသိမ်လေးကနေ ဆွဲပွေ့ဖက်ပစ်လိုက်မိပါတော့တယ် ..။
ရွှေရေး ဆူဆဲနေတဲ့ စွာနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ငုံခဲပြီး စုတ်ပစ်လိုက်မိတယ် ။ ခဏ ငြိမ်သွားပေမယ့် ရွှေရေး သူ့ရင်ဘတ်တွေကို တွန်းပစ်ပြီး ရုန်းဖို့ ကြိုးစားတယ် ။ သူက တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖက်ထားလိုက်တယ် ။ “ ရွှေရေး..ပြန်နမ်းလေ..” လို့ ပြောလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို နောက်ထပ်တခါ စုတ်နမ်းလိုက်မိပြန်တယ် ။ ဒီတခါမှာတော့ ရွှေရေး မရုန်းကန်တော့ဘဲ နမ်းတာကို ခံနေတယ် ။ ပြန်တော့ မနမ်းဘူး ..။ ဖက်ထားတဲ့ လက်တွေက စွင့်ကားတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေ အပေါ်ကို ရောက်သွားတယ် ။ တကယ်တော့ ရွှေရေးနဲ့က တကယ့်ကို နည်းစုံလမ်းကုန်ကို လုပ်ခဲ့ပြီးကြတာပါ ။ သွေးအေးသွားခဲ့တာကြောင့် ပြန်နွှေးနေရတဲ့ ဆက်ဆံရေးကြောင့် တဆင့်ပြီး တဆင့် တထစ်ပြီး တထစ် ပြစနေရတယ်လေ ..။
တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို ပွတ်သပ်ရာက ဆုပ်နယ်ကိုင်ညှစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ရွှေရေး နှုတ်ခမ်းတွေက သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို ပြန်တုန့်ပြန် စုတ်နမ်းလာလို့ ဝမ်းသာသွားမိတယ် ။ရွှေရေး စိတ်ပါလာပြီ ။ ပြတ်လပ်နေတာကြောင့် ရွှေရေးလဲ တောင့်တလိုလားမှာဘဲ လို့ တွက်ဆလိုက်တယ် ။ ရွှေရေးရဲ့ ထမိန်စကို ဖြေဖြုတ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်တော့ ရွှေရေးက သူ့လက်ကို ဖယ်ပစ်တယ် ။
“ ဟိတ်…ကဲလိုက်တာ ..”“ ချစ်ကြရအောင်..ရွှေရေးရယ် …”“ အဝတ်တွေ ကျေကုန်မယ်..ဒီကနေ အလုပ်ကို ဆက်သွားရမှာ…”“ ဒီနေ့ အလုပ် မသွားပါနဲ့တော့ ရွှေရေးရယ်…ဒို့နှစ်ယောက် အတူတူ နေကြရအောင်ပါ..”“ မရဘူး..အလုပ်တွေ များနေတယ် …”“ ဒါဆိုရင်..”“ကဲ..လာ..လာ အထဲ သွားရအောင်…”
ဝမ်းသာအားရ ရွှေရေးနဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို ဝင်ခဲ့ကြတယ် ။
“ သွား..ကုတင်ပေါ်တက်..မျက်လုံးတွေ မှိတ်ထား….”
ရွှေရေး ခိုင်းတဲ့အတိုင်း ကုတင်ပေါ်တက်လှဲ မျက်လုံးတွေကို စုံမှိတ်ထားလိုက်တယ် ။
အင်း..ရွှေရေး ဘာလုပ်တော့မယ် ဆိုတာကို စိတ်ထဲမှာ သိနေသလိုလိုဘဲ ။ရွှေရေးလဲ သူနဲ့ ကွဲကွာနေတာ ကြာလို့ သူ့အကိုင်အတွယ် အထိအတွေ့ သူ “ ချစ် ”ပေးတာတွေနဲ့ ကင်းကွာနေခဲ့ရတာ ကြာလို့ ဒါတွေကို ပြန်သတိရ လိုလား တောင့်တမိခဲ့ရတာ အကြိမ်ကြိမ်ပါ ။
သူက တွေ့ချင်တာ အရမ်းဘဲ..တွေ့ကြရအောင်လို့ ပြောလာတော့ ရွှေရေးလဲ ခေါင်းညှိမ့်လိုက်တယ် ။ သူ့အပြောကို ရွှေရေးက စောင့်နေတာလေ ..။ ဒီကလဲ တွေ့ချင်နေတာ တပိုင်းသေနေတာ ။
သူ့အခန်းပေါ်ကို ရောက်ကထဲက သူတော့ မကြာခင် ဇာတ်လမ်း စတော့မှာ ဆိုပြီး ရွှေရေး ရင်တွေ ခုံနေတာ အရမ်းဘဲ ။ အရင်တုံးက ဖြစ်ခဲ့လုပ်ခဲ့တာတွေ ကို မြင်ယောင် သတိရတော့ သူတော့ ဒီနေ့ ငါ့ပေါင်ာကားကို တအားကြီး ယက်ပေးတော့မှာဘဲ ဆိုပြီး ရွှေရေးစိတ်တွေ နိုးကြွ ဖေါက်ပြန်လာတာ အရမ်းဘဲ ။
သူလဲ ရွှေရေးကို စဖက် စနမ်းရော ရွှေရေး တအား စိတ်တွေ ဖြစ်လို့ ပေါင်ကြားက အဖုတ်မှာ အရေတွေ ထိန်းလို့မရအောင် စိမ့်ယိုတာ ရွှဲရွှဲစိုနေရုံမကဘူး..ပေါင်ခြံကိုပါ စီးကျလာတဲ့ အထိဘဲ ။
သူက ထမိန်ကို ဆွဲဖြေတော့ ရွှေရေးလဲ အလုပ်ကို ပြန်သွားရမှာမို့ အဝတ်တွေ မကျေချင်ဘူးလို့ သူ့ကို ပြောလိုက်တယ် ။ ငယ်ငယ်က ချိန်းကြတဲ့အခါ အဝတ်တွေ ကျေပြီး အိမ်ညပန်ရင် အမေတို့ မသင်္ကာ ဖြစ်မှာ စိုးလို့ သူ့ကို ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ပေးခဲ့ဘူးတယ် ။ ဒါတွေကို သူ သတိရမယ်လို့ ထင်တာဘဲ ။ ဒါဆိုရင် အခုလဲ ရွှေရေး သူ့ကို ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ပေး တော့မယ် ဆိုတာ သူ သဘောပေါက်လောက်မယ် ထင်တယဘဲ ။
သူ့အိပ်ခန်းထဲကို အတူတူ ဝင်လိုက်ကြတော့ သူ့ကုတင်ကြီးနဲ့ မွေ့ယာခင်းထူထူတွေကို မြင်လိုက်ရတယ် ။ စိတ်တွေက ဟုန်းကနဲ ထကြွ လာတယ် ။ ဒီကုတင်ကြီးပေါ်မှာ တဖန်းဖန်း တဖုန်းဖုန်းနဲ့ကြိတ်ကြတော့မှာကို သိနေလို့ ။ အတွင်းထဲက လှိုက်လှိုက်ပြီး ယားနေတဲ့ ရွှေရေးရဲ့ စောက်ပတ်ကို သူ့လီးတန်ကြီးနဲ့ ပယ်ပယ်နယ်နယ် လိုးဆောင့်ပေးတော့မယ် မဟုတ်လား ။
သူ့ကို ကုတင်ပေါ် လှဲပြီး မျက်လုံးတွေ စုံမှိတ်ခိုင်းလိုက်တယ် ။ သူကလဲ အထက်အရာရှိရဲ့ အမိန့်ကို နာခံတဲ့ စစ်သားလေးတယောက်လိုဘဲ ရွှေရေး ခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်တယ် ။ ရွှေရေးလဲ သူ့ကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီ ။ သူ့ကို ရွှေရေး ချစ်တယ် ။ သူနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး အရင်တုံးကလိုဘဲ လိုးပစ်လိုက်မယ် ။
ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်တွေကို ရွှေရေး တခုပြီး တခု ချွတ်နေတဲ့အချိန် သူများ ရွှေရေးဖက်ကို ခိုးချောင်းကြည့်နေလေမလား ဆိုပြီး သူ့ဖက်ကို ကြည့်လိုက်တော့ သူ မျက်လုံးတွေ
စုံမှိတ်ပြီး ရွှေရေးကို စောင့်နေတာ တွေ့လိုက်ရတယ် ။ နောက်ဆုံး ကျန်တဲ့ ရွှေရေးရဲ့ ဇာနားကွပ် အတွင်းခံ ပင်တီလေးကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန် ရွှေရေး ကိုယ်ပေါ်မှာ အဝတ်ဆိုလို့
ချည်တမျင်တောင် မကျန်တော့ဘူး ။ သူအိပ်စောင့်နေတဲ့ ကုတင်ဖက်ကို ရွှေရေး ခြေဖေါ့နင်းပြီး တိုးကပ်သွားလိုက်တယ် ။
ထင်အောင်ကျော်သည် ရွှေရေး ဘာအဆန်းထွင်မလဲ သိလိုနေတယ် ။ မပြုံးမိအောင် သတိထားနေရတယ် ။ ဒီအချိန်မှာဘဲ သူ့မျက်နှာပေါ်ကို အိအိထွေးထွေးအသားစိုင်ကြီး လာထိကပ်တယ် ။ချက်ချင်းဘဲ သိလိုက်တယ် ။ ရွှေရေးရဲ့ ဆူဖြိုးအောင်မြင်တဲ့ ရင်သားစိုင်ကြီးတွေ ဆိုတာ ..။
မျက်နှယပေါ်ကို ဘယ်ညာ ရွှေ့လျား ပွတ်သပ်နေတော့ မာတင်းတဲ့ အသားဖု နို့သီးခေါင်းလေး နှာခေါင်းကို ထိပွတ်သွားတာ ခံလိုက်ရလို့ စိတ်တွေ တအား ထိုးကြွတက်လာရတယ် ။ ဒီနို့သီးခေါင်းလေးကို ပါးစပ်နဲ့ ငုံစို့လိုက်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်တယ် ။ရွှေရေးရဲ့ တခိခိ ရယ်သံလေး ကြားလိုက်ရတယ် ။
“ ကြိုက်လား..” လို့ ရွှေရေး မေးတဲ့အသံကြားလိုက်ရတယ် ။
“ အင်း…ကြိုက်တယ်..အရမ်း..” လို့ သူဖြေလိုက်တယ် ။ ရွှေရေးက “ မျက်လုံး မဖွင့်နဲ့အုံး…” လို့ ပြောရင်း သူ့နို့သီးခေါင်းလေးတဖက်ကို ပါးစပ်နား လာကပ်ပေးလို့ အငမ်းမရဘဲ စို့လိုက်မိတယ် ..။
ဒီအချိန်မှာ ပေါင်ကြားက ငပဲဒုတ်က တအားကို မာကျောတောင်မတ်နေတယ် ။ နို့သီးခေါင်းမာမာလေးနောက်တဖက်ကို လာတိုးကပ်ပေးပြန်လို့ အားရပါးရ စို့နေမိတဲ့အချိန် သူ့ဒုတ်ကို ရွှေရေး လက်ကလေး တဖက်က ဖွဖွလေး လာကိုင်လိုက်တာ သူ သိလိုက်ရတယ် ။ ပုဆိုးကို ဖြေချပေးလိုက်တယ် ။
“ ဟယ်..ကြီးလှချည်လား..ထင်အောင်ကျော်..နင် တခုခုများ လုပ်ထားသလား …” လို့ မေးလိုက်လို့ ပြာပြာသလဲ..“ ငါ ဘာမှ လုပ်မထားပါဘူး…ရွှေရေးရယ်..သဘာဝအတိုင်းပါဘဲ အရင်လိုပါဘဲ…” လို့ သူဖြေလိုက်တယ် ..။ ရွှေရေး လက်ချောင်းလေးတွေက အတန်ထိပ်ပိုင်း ဒစ်လုံးကြီးကို ကိုင်ဆုပ် ပွတ်သပ်နေတယ် ။ “ ကြိုက်လား..” လို့ သူ့ကို ပြန်မေးလိုက်တော့ ရွှေရေးက “ အင်း..ကြိုက်တယ်” လို့ ပြန်ဖြေတယ် ။
နို့သီးတွေကို တဝစို့လိုက်ချိန် လက်တွေကလဲ အောင်မြင်လှတဲ့ နို့ကြီးတွေကို ကောင်းကောင်း ကိုင်နေတယ် ။ ရွှေရေးလဲ နို့တွေကို အနောက်ညပန်ဆုတ်သွားပြန်လို့ ဒီတခါတော့ ဘာလာအုံးမလဲလို့ မှန်းဆမိတယ် ။ ရွှေရေးရဲ့ အဖုတ်အကွဲကြောင်းကြီးများ မျက်နှာကို လာပွတ်ဖိလေမလား လို့လည်း စိတ်ကူးယဉ်မိလိုက်တယ် ။ ရည်းစား ဘဝတုံးက ရွှေရေးကို သူ့မျက်နှာပေါ်ကို ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ခိုင်းဘူးတယ် ။ ရွှေရေးရဲက စောက်ဖုတ်ကြီးကို သူ ကောင်းကောင်း ယက်ပေး..စုတ်ပေး…ခဲ့တာ အမှတ်ရတယ် ..။ သူ့နှာခေါင်းနဲ့ အကွဲကြောင်းတလျောက် လိုင်းဆွဲသလို ပွတ်တိုက်ပေးတာကို ရွှေရေး အရမ်းသဘောကျခဲ့ဘူးတယ် ..။ တခါတလေ ရွှေရေးက “ နင့်နှာခေါင်းနဲ့ လိုးပေးတာ ငါ အရမ်းကြိုက်တယ်..” လို့ တိုးတိုးလေး နားနားကပ်ပြီး လာပြောဘူးတယ် ။
ထင်ထားတာနဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ မတူဘူး ။ မျက်နှာပေါ်ကို စောက်ဖုတ်နဲ့ လာမပွတ်ဘဲ ရွှေရေးက သူ့အတန်ချောင်းကို လက်တဖက်နဲ့ အရင်းကနေ ဆုပ်ကိုင်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကြား ငုံခဲလိုက်လို့ပါ ။သူ့ အတန်ချောင်း ထိပ်ပိုင်း ဒစ်လုံးကြီးတခုလုံး ရွှေရေးရဲ့ ပါးစပ်ထဲ ရောက်နေတဲ့အချိန် ရွှေရေးရဲ့လျာက ဒစ်လုံးကြီးတခုလုံးကို ပတ်ချာလည် ကလိပေးလိုက်လို့ သူ တွန့်ကနဲ တုန်သွားတဲ့အချိန် ရွှေရေးက သူမလက်ကလေးနဲ့ သူ့လက်ကို ဆွဲယူလိုက်ပြီး ဆူဖြိုးလုံးဝန်းတဲ့ ရင်စိုင်တွေ အပေါ်ကို တင်ပေးတယ် ။ သူမ ရင်သားကြီးတွေကို ကိုင်စေချင်တဲ့သဘော ဆိုတာ ထင်အောင်ကျော် သဘောပေါက် နားလည်လိုက်တယ် ။
ရွှေရေး နို့ကြီးတွေက မတွေ့ကြတာ ကြာလို့လား မသိဘူး ..။ အရင်ထက်တောင် ပိုကြီးလာသလိုဘဲ။တင်းမာပြီး ထောင်ထနေတဲ့ နို့သီး လေးတွေကို လက်နဲ့ ပွတ်သပ်လိုက်..နို့အုံကြီး တခုလုံးကို ကိုင်ညှစ်လိုက် လုပ်ပေးနေတဲ့ အချိန် ရွှေရေးက သူ့အတန်ထိပ်က အပေါက်လေးကို လျာထိပ်နဲ့ ကလိပေး ထိုးပေးလို့ တုံကျင်တဲ့ အရသာထူးကို သူခံစားလိုက်ရတယ် ..။ ရွှေရေးလဲ တော်တော်ကြာအောင် ကလိပေးနေပြီးမှ အတန်ကို ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်နဲ့ စုတ်လိုက် လျာနဲ့ကစားလိုက် လုပ်ပေးပါတော့တယ် ..။
ထိလွန်းအားကြီးလို့ အသံထွက်ပြီး ညည်းငြူမိရတယ် …။ရွှေရေးက စုတ်နေရာက မော့ကြည့်တယ် ..။ သူစုတ်ပေးတာ ထိရောက်တာကို တွေ့ရလို့ ကျေနပ်နေတဲ့ပုံ ရှိတယ် ..။
ရွှေရေး လက်တဖက်ကလည်း ဂွေးဥများကို ဖွဖွလေး ကိုင်ဆုပ်ပေးလိုက်..ဂွေးဥတွေအောက်ကနေ ဖင်ကြားကို ပွတ်ပေးလိုက် ..လုပ်ပေးနေတယ် ။ အတန်ချောင်း တဆုံး အရင်းနားအထိ ငုံငုံစုတ်ပေးနေတဲ့ ရွှေရေးက ထင်အောင်ကျော့်အမွှေးများနဲ့ သူမနှာခေါင်း ထိမိနေလို့ စုတ်နေတာကို ရပ်..အတန်ချောင်းကို ပါးစပ်ထဲက ထုတ်လိုက်ပြီး “ ဟေ့..ယူ့လမွှေးတွေ ညှပ်အုံးကွာ…ရှည်နေပြီ….”လို့မကျေမနပ် ပြောလိုက်တယ် ..။
“ အင်း..အင်း…..ညှပ်မယ်….ညှပ်မယ်…” လို့ ပြောလိုက်တော့ ရွှေရေး အတန်ချောင်းကို ပြန်စုတ်ပေးပြန်တယ် ။ ရွှေရေးရဲ့ အစုတ်ကို မခံရတာ ကြာပြီ ဆိုတော့ အရမ်း ခံလို့ကောင်းနေတယ် ။ ရွှေရေးရဲ့နို့လှလှကြီးတွေကိုလည်း တအား စို့ချင်လာတယ် ။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လက်ညှိုးနဲ့လက်မကြားချေနေမိတယ် ..။ တချက်တချက် စုတ်တာ ကောင်းလွန်းလို့..“ အား…အင်း…အိုး…” နဲ့ ညည်းတွားမိရတယ် ။ ရွှေရေးက လျာကို တအားသုံးပြီး မှုတ်တာ ..။ ရွှေရေး မှုတ်ပေးလို့ သူ ခဏခဏ ရွှေရေး ပါးစပ်ထဲမှာ ပြီးခဲ့ဘူးတယ် ..။
ထူးကဲတဲ့ အရသာကို မျက်လုံးစုံပိတ်ပြီး ခံနေမိလိုက် စုတ်တာ ရပ်သွားတယ် ..။
“ ဟိတ်…ဇိမ်ခံနေလိုက်တာ..သူများကိုလည်း လုပ်ပေးအုံး…”
ရွှေရေး အမှုတ်ရပ်သွားပြီ..။ဒီတခါ ရွှေရေးကို သူက မှုတ်ပေးတဲ့ အလှည့်..။ ပက်လက်အိပ်ပေးတဲ့ ရွှေရေးရဲ့ပေါင်ကြားကို ခေါင်းထိုးအပ်လိုက်တယ် ။ ရွှေရေး စောက်ဖုတ်ကြီးက အရင်လိုဘဲ ကြည့်ကောင်းနေတယ် ။ ရွှေရေးက နှုတ်ခမ်းထူ ပါးစပ်ပြဲသလို စောက်ဖုတ်လည်း ကြီးတယ် ..။ မို့ဖေါင်းတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးရဲ့ အကွဲကြောင်းကြီးက နီညိုညိုကြီး ထင်းနေတယ် ..။ အရင်ဆုံး စောက်ဖုတ်ကြီးကို ချစ်စနိုးနဲ့ နမ်းရှုံ့ လိုက်တယ် ..။ ဒီလို စနမ်းကတည်းက ရွှေရေး တအင်းအင်းနဲ့ ခေါင်းလေးမော့ပြီး ခြေထောက်တွေ ထောင်လိုက် ချလိုက် လုပ်လာတယ် ..။ အကွဲကြောင်းကြီးကို အောက်ကနေ အထက် ပင့်ကော်ပြီး လျာ အပြားလိုက်နဲ့ စယက်ပေးလိုက်တယ် ..။ “ အိုး…” ဆိုတဲ့ အသံလေး ထွက်လာတယ် ။ ထင်အောင်ကျော် လည်း ရွှေရေးက စေတနာထားပြီး ပုလွေ အကောင်းစား မှုတ်ပေးသလို ရွှေရေးကိုလည်း ကောင်းကောင်း မှုတ်ပေးချင်လို့ ရွှေရေး ကောင်းလိမ့်မယ် ထင်တာတွေ အကုန် လုပ်ပေးတော့တာဘဲ ..။ ရွှေရေးက အစိကြီးတယ် ..။ အစိက စိတ်ထနေလို့ ထောင်နေတယ် ..။ ကြွနေတယ်။ အစိကို လျာနဲ့ ယက်လိုက..လျာထိပ်နဲ့ တို့ထိ ကလိလိုက် လုပ်ပေးသလို လက်တွေကို ဆန့်ထုတ်ပြီးနို့ကြီးတွေကို ကိုင်ဆုပ်ပေးတယ် ..။ ရွှေရေး အသံစုံ ညည်းပြီး ဖင်ကြီးင်္တေ တကြွကြွ နဲ့ အရသာတွေ့နေတယ် ..။ တဟင်းတဟင်း….နဲ့ တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေတယ် ..။
စောက်ဖုတ်ထဲကို လျာနဲ့ ထိုးသွင်းတော့ ရွှေရေး သူ့လက်တွေကို တအား ဆုပ်ကိုင်ပြီး…“ အား…ဟား…အား…..အမလေး….အိုး……ငါ…ငါ….မရတော့ဘူး…ငါ့ကို လိုးပါတော့…” လို့ ပြောလာတယ် ။ ဒါပေမယ့်သူက ယက်လို့ ကလိလို့ ကောင်းတုံးမို့ ရပ်လိုက်လို့ မရဘဲ ဆက် ယက်နေတယ် ။
“ တော်တော့်ဆို….ငါ့အထဲက တအားယားနေတယ်ဟာ..လိုးပါတော့….”လို့ ရွှေရေး ပြောပြီး သူ့နဖူးကိုတွန်းတယ် ..။
ရွှေရေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးက ကာမစိတ်တွေ ထကြွနေတဲ့ အရှိန်နဲ့ အရမ်းကို ဖေါင်းကြွ ခုံးမောက်နေတယ် ..။
လှေကြီးထိုး ပုံစံနဲ့ဘဲ ရွှေရေးကို အားရပါးရ စပ်ယှက်ပစ်လိုက်တယ် ..။ ရွှေရေးက တအား စိတ်တွေ ထနေ ပြင်းထန်နေတော့ အောက်ကနေပေမယ့် တဆတ်ဆတ်နဲ့ ဖင်ကြီးတွေ ကော့ပေးလိုက် ဝေ့လိုက်ဝိုက်လိုက်နဲ့ လုပ်ပေးရင်း ပါးစပ်ကလည်း“လိုး….လိုး….လိုးစမ်းပါဟာ…တအားဆောင့်ပေး..ဆောင့်..အားမနာနဲ့..ဆောင့်..အင်း..အင်း…..အိုး…ကောင်းတယ်..ကောင်းတယ်….လိုး….လိုး……” ဆိုပြီး တတွတ်တွတ် ဆက်တိုက် ပြောဆိုနေပါတယ် …။
ထင်အောင်ကျော်လဲ အားကုန် ဆောင့်ထည့်ပေးတယ် ..။ အချက်ပေါင်း သုံးဆယ်လောက် မနားတမ်းဆောင့်ထည့်ပေးပြီးတဲ့ အချိန် ရွှေရေး ကော့လန်ပြီး တုန်ခါပြီး အထွဋ်အထိပ်ကို တက်လှမ်းသွားတာကို မြင်လိုက်ရတယ် ..။ ရွှေရေးရဲ့ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားအိအိတွေက သူ့အတန်ချောင်းကို တအား ဖျစ်ညှစ် ဆွဲယူနေကြတာ သူလည်း ဆက် ထိန်းမထားနိုင်တော့ဘဲ သုတ်ရည်တွေ တအား ပန်းထွက်ခါ ပြီးဆုံးခြင်းကို ရောက်ရတယ် ..။ ချွေးတွေက တကိုယ်လုံး ရွှဲနေတယ် ။ စိတ်ရှိလက်ရှိ လုပ်ပစ်လိုက်ပြီး ဘေးတစောင်းလေး လှဲခွေသွားတဲ့ ရွှေရေးရဲ့ ဘေးမှာ ထင်အောင်ကျော် ပက်လက် လှဲနေလိုက်တယ် ..။ တော်တော်လေး ကြာတော့ ရွှေရေး သူ့ဖက်ကို လှည့်လာတယ် ။
“ ဟိတ်..ယူ တအား အားသန်တာဘဲ….ကောင်းလိုက်တာ…ရွှေရေး သုံးခါတောင် ပြီးတယ် …”ရွှေရေးလေသံလေးက တိုးတိုးလေး ..။ခုထိ ထမိန် မကပ်သေးလို့ ရွှေရေးရဲ့ တပ်မက်စရာ ဆူကြွကော့ထွက်နေတဲ့ ရင်သားစိုင်ကြီးတွေကို တွေ့နေရတယ် ။
“ ရွှေရေး အဖုတ်ကလည်း မတွေ့ကြတာ ကြာလို့ တအား ပြန်ကြပ်နေတယ် ..”“ ခစ်ခစ် ..ဟုတ်လား …ရွှေရေးလဲ တအား ထိတာ..ယူ့ဟာကြီးက အရင်ကထက်များ ပိုကြီးလာသလား ထင်မိရတယ် …”
ထင်အောင်ကျော် က ရွှေရေးလွင်လွင်ရဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတဖက်ကို လှမ်းကိုင်လိုက်သည် ။
“ ဟိတ်..ယားတယ်…လုပ်နဲ့…”“ ရွှေရေး ကိုယ်လုံးက အရမ်းလှတာဘဲ…ရွှေရေးကို လိုက်ဖန်တဲ့ဘဲတွေ အများကြီးဘဲလား…”“ ဘာလဲ..ယူက ပစ်တုံးက ပစ်ထားပြီး လာ သဝန်တိုနေတာလား…..”“ မပစ်ထားပါဘူး..ရွှေရေးရယ် …. ရွှေရေးကို အရမ်း ချစ်တဲ့ဥစ္စာ….”“ တော်ပါ..အပိုတွေ…”“ ချစ်တယ် …ရွှေရေးကရော ချစ်တယ် မဟုတ်လား ..”“ အင်း ..”
ရွှေရေး က ကုတင်ပေါ်က ထလိုက်သည် ။
ရေချိုးခန်းဆီကို လျှောက်သွားတဲ့ ရွှေရေးရဲ့ နောက်ပိုင်း အလှအပတွေကို သူ ကြည့်ရင်း..ရွှေရေးလို လှပတောင့်တင်းတဲ့ မိန်းမတယောက်ကို စိတ်ကြိုက် သူလိုးရတာ အတော် ကံထူးတယ်လို့ဆိုရမယ် လို့ သူ တွေးလိုက်မိသည် ။
ရွှေရေး အနောက်ကို သူ လိုက်သွားလိုက်သည် ။
အလုပ်ကို သွားမယ် လို့ ပြောနေခဲ့တဲ့ ရွှေရေးလည်း ထင်အောင်ကျော်နဲ့ တချီပြီး နောက်တချီ ထပ်ခါ ထပ်ခါ လုပ်ဖြစ်ကြကာ ကာမနွံထဲက ရုန်းထွက်လို့ မရခဲ့ ။ အလုပ်ကို မသွားဖြစ်တော့ပါ ။ ဖုန်းနဲ့သူ့တပည့်မ တယောက်ကို တာဝန်တွေ လွှဲရတော့သည် ။
ညနေ ငါးနာရီ ကျော်ပြီ ။ရွှေနန်းဘုံ ကိုထက် ခြံထဲက လှမ်းထွက်လာတော့ ခြံအပြင် ကားအပြာလေးထဲမှာ ကိုထင်အောင်ကျော် ကို တွေ့ရတယ် ။ သူက စာအုပ်တအုပ် ကို ဖတ်နေတယ် ။ ရွှေနန်းဘုံလည်း ထွက်လာတာ သူမြင်ရော ကားကို စက်နှိုးလိုက်တယ် ။
ရွှေနန်းဘုံ တကိုယ်လုံး နုံးချိနေတယ် ။ဒီနေ့ မနက် ဆယ့်တနာရီကျော်ကျော်ထဲက ကိုထက် အိမ်ကို ရွှေနန်း လာတာ ..။ကိုထက်နဲ့ ရွှေနန်း အခု တွေ့တိုင်း ရေရေလည်လည် “ အချစ်လွန် ”ဖြစ်နေကြပြီ ။ ညဖက်တောင် ကိုထက်နဲ့ဖုန်းပြောကြရင်း စိတ်တွေက ပြန်ထန်လာကြပြီး တွေ့ချင်ကြပြန်ရော ..။
ဒီနေ့လည်း ကိုထက်နဲ့ ဘယ်ျနှစ်ချီမှန်းတောင် မမှတ်မိတော့ဘူး ..။ ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ အချစ်တွေ လွန် ဖြစ်ကြတယ် ..။ ရွှေနန်း အရမ်းမော အရမ်း ပင်ပန်း နွမ်းသွားတယ် ။ ပေါင်ကြားက အဖုတ်လဲ ကျိန်းစပ် နာကျင်သွားတယ် ။ ပါးစပ်..နှုတ်ခမ်းတွေလည်း ထူပူနေတယ် ..။ ကိုထက် လီးကို စုတ်ပေးရတာ..ခဏခဏဘဲလေ ..။ သူက ရွှေနန်း ပါးစပ်ကိုလည်း ညှောင့်ထည့်သေးတယ် ။ ကိုထက်လည်း ဖလက်ပြပြီး အိပ်ကျန်ခဲ့တယ် ..။
ရွှေနန်း သတိထားမိတာက ကိုထက်က ရွှေနန်းကို လုပ်ချင်နေတဲ့အချိန် မလုပ်ရသေးခင်မှာ ချစ်တယ် လွမ်းတယ် စုံနေအောင် တတွတ်တွတ် နဲ့ ချွဲပြပေမယ့် လုပ်လဲပြီး သုတ်ရည်လဲ ထွက်ပြီးရော ရွှေနန်းကို လှည့်တောင် မကြည့်တော့ဘူး။ အခုလဲ ရွှေနန်း ပြန်မှာတောင် ဘာမှ မနုတ်ဆက်ဘူး။ သူ့ဖါသာအိပ်နေတယ် ။
ဟွန်း..ယောက်ျားတွေများ..မရခင် တမျိုး..ရပြီးတော့ တမျိုး ..။
ကားထဲရောက်တော့ ကိုထင်အောင်ကျော်က “ ဘယ်ကို မောင်းရမလဲ ..ရွှေနန်း..” လို့ မေးတယ် ။ ဒီလူကြီး..တော်တော့်ကို စိတ်ရှည်တယ် ။ မနက် ဆယ့်တစ်နာရီထဲက ကားထဲမှာ ထိုင်စောင့်ပေးတာတချက်မှ မျက်နှာ မပျက်ဘူး ..။ အခုလည်း ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံး နဲ့….။
“ တနေ့လုံး စောင့်ရတာ မပင်ပန်းဘူးလား..ဘာမှလဲ မစားရသေးဘူး ထင်တယ်…”“ စားပြီးပြီ …ရွှေနန်း ..”“ ဟင်..ဘာစားလဲ..ဆိုင်မှာ သွား စားတာလား….”“ မဟုတ်ဘူး…တိုဟူးသုတ် အထမ်းသည် လာလို့ ဝယ်စားလိုက်တာ …”“ ဟုတ်ဘား…ရွှေနန်းလည်း စားချင်လိုက်တာ….”
အဲလို ဖြစ်သလို နေတတ်..ရှိတာနဲ့ ကြံဖန်လုပ်တတ်ပြီး ပဲမများတဲ့ သူ့ကို ရွှေနန်း ခင်မိသွားတယ် ။
ရွှေနန်း ကိုထက်နဲ့ လာလာချိန်းတွေ့ ဖြုတ်တာတွေကိုလည်း ဒက်ဒီဲနကြ မာမီ့ကို သူပြန်မပြောဘူး ။
သူတယောက်ထဲဘဲ လုံခြုံရေး လိုက်ပါလို့ ပြောတာကိုလည်း ဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးခဲ့တယ် လေ ..။
ရွှေနန်းဘုံ အပြင်ထွက်တာ တနေကုန် လိုက်ခဲ့အပြီး သူတို့အိမ်ကို ပြန်ရောက်တော့ ဘိုက်ထဲက တဂွီဂွီအော်နေတယ် ။ ဆာလွန်းလို့ မီးဖိုထဲကို ပြေးရတယ် ။
ဆရာမောင်သောင်းက “ ဗိုလ်ကြီး….ထမင်း စားမလားဟင် …အမဲသားဟင်း ရှိတယ်…” လို့ မေးတယ် ။ သူ့မိန်းမ မသန်းက ပြာပြာသလဲ ထမင်းပွဲ ပြင်တယ် ။ ရွှေနန်းဘုံနဲ့ အပြင်ထွက်ရတာ တခါတလေ ဘာမှ စားချိန် မရဘူး ။ ထမင်းစားနေတုံး ရဲဘော်တယောက် ရောက်လာပြီး ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က တွေ့ချင်လို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ် လို့ လာပြောတယ် ။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် ဘယ်မှာလဲ လို့ မေးလိုက်တော့ ခြံထဲမှာလို့ ပြောတယ် ။ ကဗျာကရာ ရေအေးတခွက် မော့သောက်ပြီး ခြံထဲကို ဆင်းခဲ့တယ် ။
ခြံက အကျယ်ကြီး ..။ ခြံအနောက်ဖက်မှာ သစ်ခွပန်းတွေ စိုက်ထားတဲ့ မှန်အမိုး မှန်အကာနဲ့ မှန်အိမ်လေး ရှိတယ် ။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် အမြဲလို ရှိနေတတ်တဲ့ နေရာပေါ့ ..။ မှန်အိမ်လေးကို ရောက်တော့ သစ်ခွပင်တွေကို ကြည့်နေတဲ့ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ကို သူ တွေ့လိုက်ရတယ် ။
“ ထင်အောင်ကျော်..လာပါအုံး….အမလေး….မတွေ့ရတာ ဘယ်လောက်တောင် ကြာသွားပြိလဲ….”“ မမ ခေါ်တယ် ဆိုလို့ ..”“ အေးလေ..မင်းနဲ့ မမ မတွေ့ရတာ ကြာနေပြီ…ဘယ်လိုလဲ..ရွှေနန်း နဲ့ သွားရလာရတာ အိုကေရဲ့လားမင်းကို တော်တော်မှ နှောက်ယှက်ရဲ့လား…မလွယ်ဘူး…..သမီးတယောက်ထဲ ရှိပေလို့ဘဲကွယ်…ဟင်းဟင်း…..”
“ အိုကေပါတယ်…မမ….အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ် …”
ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ရဲ့ မျက်နှာက ပြုံးစိစိ ဖြစ်လာတယ် ။
“ မေးရအုံမယ် ..ထင်အောင်ကျော့်ကို…”
“ မေးပါ မမ..ဘာလဲဟင်..”
“ မင်းနဲ့ မမ သူငယ်ချင်း အေမီသွင် ..က ဘယ်လိုတုံး…”
ဒေါ်အေမီသွင် ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ကို ဘာတွေများ ပြောလိုက်ပြီလဲ မသိဘူး ။
ဘာဖြေရမှန်း မသိလို့ မဖြေဘဲ နေနေတဲ့အချိန် ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က “ အေမီသွင်..နိုင်ငံခြား ခရီးက ပြန်
ရောက်လာတယ် ..သူက မင်းမှ မင်း ဖြစ်နေတယ်…မမလည်း ထူးဆန်းနေတယ် ..သူ ဘာကြောင့် မင်းနဲ့
တွေ့ချင်နေလဲ…ဘာကြောင့် မင်းနံမည်ကို တဖွဖွ ပြောနေသလဲ မမသိချင်လို့ပါ…” လို့ သူ့ကို
စိုက်ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်တယ် ။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ရဲ့ အမူအရာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အေမီသွင်နဲ့ သူနဲ့ ဘာဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို သိနေတဲ့ ပုံပါ ..။
“ မမ အေမီသွင် က သူ့ကို ကူညီခဲ့လို့ ခင်မင်ရင်းနှီးလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်….”
“ ဒါပေါ့..ဒါပေါ့..ထင်အောင်ကျော်ရယ်..အေမီသွင်ရဲ့ ယောက်ျားကြီးက အသက်ကြီးပြီ မဟုတ်လား….ဒီတော့ သူ့ယောက်ျားကြီး လုပ်မပေးနိုင်တာတွေကို ထင်အောင်ကျော်က လုပ်ကိုင်ပေးတော့ အေမီက ကျေးဇူး အရမ်းတင်နေမှာပေါ့လေ..ဟင်းဟင်း….”
သူ မျက်နှာ ပျက်နေတာကို ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်တွေ့လို့ ဖြစ်မည် ။
“ ဘာမှ မစိုးရိမ်းပါနဲ့ကွာ..မမ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပါဘူး..မမ…ကိုကို့ကိုလည်း မပြောဘူး…” လို့ ခပ်တိုးတိုး ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။
“ ဟုတ်ကဲ့ မမ …”
“ သွားရအောင်ကွယ်..အေမီ့အိမ်ကို..မမ ကို လိုက်ပို့…”
ခြံနောက်ကနေ အိမ်ကြီးဘေးက လမ်းကလေး အတိုင်း အိမ်ရှေ့ဖက်က ကားဆီကို ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်နဲ့အတူတူ လျောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ခြံထဲကို ရှေ့မီးကြီးတွေ ဖွင့်ထားတဲ့ မာဇဒါ ၁၃၀၀ ဝက်ဂွန်း လေးဝင်လာတာ တွေ့လိုက်ရသည် ။ အနောက်က ကားမဲကြီး ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်ဝင်လာတာလည်း တွေ့လိုက်ရသည် ။
“ ဟင်…ကိုကို ပြန်လာပြီ….”
ကားပြာလေး က ဆင်ဝင်အပေါက် ကို ကျော်ပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းက နှင်းဆီပင်တန်းတွေ အနားမှာ သွားရပ်လိုက်ပြီး ကားမဲကြီးကတော့ အိမ်ရှေ့ အပေါက်ဝ တည့်တည့် မှာ ရပ်ဆိုက်လိုက်သည် ။
ပြုံးပြီး ဆင်းလာတဲ့ အဖိုးကြီးကို ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် ခပ်သွက်သွက်လေး လျောက်သွားကာ နုတ်ဆက်သည် ။အဖိုးကြီးက “ ကိုကို တို့ ရှမ်းပြည်ဖက် ခရီးထွက်ကြမယ် ..” လို့ ပြောတယ် ။ “ ဟုတ်လား..ကောင်းတာပေါ့..ကိုကို…” လို့ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က ပြန်ပြောတယ် ။
ထင်အောင်ကျော်လဲ အဖိုးကြီးကို အလေးပြုလိုက်တယ် ။
“ ဟေး..မင်းကို လွန်းမောင် ပြောပြီးပြီလား…”“ မပြောသေးပါဘူး ..အဘ..”“ အေး..ဟင်းဟင်း….မင်းကို ပရိုမိုးရှင်း ပေးလိုက်ပြီကွ..”
ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က “ ဟယ်..ထင်အောင်ကျော်….ဝမ်းသာစရာဘဲ..ကောင်းလိုက်တာ…ဗိုလ်မှူး ဖြစ်ပြီပေါ့”လို့ ဝမ်းသာအားရ ပြောလိုက်သည် ။ အဖိုးကြီးက အိမ်ထဲဝင်ဖို့ လုပ်သည် ။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က “ ကိုကို…မီး အေမီ့အိမ် ခဏ သွားအုံးမယ်..ထင်အောင်ကျော်ကို လိုက်ပို့ခိုင်းမယ်..” လို့ ပြောသည် ။
အဖိုးကြီးက..“ အေးအေး..” လို့ ပြောပြီး အိမ်ထဲ ဝင်သွားသည် ။
“ ကဲ..ထင်အောင်ကျော်..သွားစို့….”ထင်အောင်ကျော်သည် အနီးကပ် လုံခြုံရေးအရာရှိအဖြစ် ရှမ်းပြည်ကို ရွှေနန်းဘုံတို့ မိသားစုနဲ့ လိုက်ပါသွားရသည် ။ ဖေါ်ကာဖရင်းရှစ်ပ် အထူးလေယာဉ်ပေါ်မှာ ဗီအိုင်ပီ မိသားစု ..ကိုယ်ရေးအရာရှိတယောက် နဲ့ သူ ဘဲ ပါသည် ။
သူသည် အရပ်ဝတ်နဲ့ ဖြစ်ပေမယ့် ခါးမှာ ပွိုင့်ဖိုးဖိုက် ပစ္စတိုကို အိတ်နဲ့ချိတ်ထားပြီး လက်ထဲမှာတော့အူဇီစက်သေနတ်လေး တလက်ကို ကိုင်လာခဲ့သည် ။
ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ရော ..ရွှေနန်းဘုံရော ပါကြသည် ။ ဒီကို ထွက်မလာခင်က ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ အိမ်ကို ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ကို လိုက်ပို့ခဲ့ရသည် ။ ဒေါ်အေမီသွင်သည် နိုင်ငံခြားက ပြန်ရောက်တာမို့သူ့အတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ပါလာသည် ။ အခု ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ ယောက်ျား က လောနိုင်ငံကို ထွက်သွားလို့ အိမ်မှာ မရှိပြန်ဘူး ။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်..ဒေါ်အေမီသွင်တို့နဲ့ ညနေစာ အတူတူ ထိုင်စားရင်း ဘီယာနဲ့ဝိုင် သောက်ကြတော့ သုံးယောက်သား အာသွက်လျာသွက် ဖြစ်လာခဲ့ကြသည် ။
ဒေါ်အေမီသွင်က ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် ရေချိုးခန်း ခဏဝင်တဲ့အချိန် သူ့ကို တိုးတိုးလေး..“ ဟိတ်…ရွှေဖြူ့ကို မင်းနဲ့ဒို့ ဖြစ်ပျက်တာတွေ အကုန် ပြောပြလိုက်တယ်…” လို့ ပြောလို့ “ ဟာ..ဘာလို့ ပြောလိုက်တာလဲ မမရယ်..” လို့ သူ ပြန်ပြောလိုက်သည် ။ ဒေါ်အေမီသွင်က “ရပါတယ်…ဘာမှ မစိုးရိမ်နဲ့ ရွှေဖြူနဲ့ မမက ဒီလိုဘဲ ဆီးခရက်တွေ တိုင်ပင်နေကြ..ဒို့နှစ်ယောက် က ဘယ်တော့မှ တယောက်နဲ့တယောက် သစ္စာမဖေါက်ဘူး….ခိခိ…ရွှေဖြူက မင်းနဲ့ ဒို့ ဖြစ်ခဲ့တာကို အရမ်း စိတ်ဝင်စားတယ် သိလား.မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းတွေက အများကြီး…သူက အသေးစိတ်ကို မေးတာ..မမကလည်း အသေးစိတ်ကို ပြန်ပြောပြလိုက်တာပေါ့…” လို့ ပြောသည် ။
“ မမရယ်…ဘာတွေများ အသေးစိတ်လိုက်တာဘဲဗျာ…” လို့ သူ ညည်းသလို ပြောလိုက်သည် ။ ဒေါ်အေမီသွင်က “ အကုန်ပေါ့..မင်းရဲ့ ဟိုဒင်းရဲ့ ဆိုက်တို့..မင်း အမှုတ်ကောင်းတာတို့..” လို့ ပြောတဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် ပြန်ရောက်လာသည် ။
ဒေါ်အေမီသွင်က ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် အနားမှာ မရှိတာနဲ့ သူ့ကို ပွတ်ချင်ကိုင်ချင်သည် ။ သူ့ဖင်ကိုလဲညှစ်သည် ။ ဖင်ကြားထဲကိုလဲ လက်ချောင်းတွေနဲ့ ပွတ်ဆွဲသည် ။ အဲလိုတေါ လုပ်တဲ့အချိန် တခစ်ခစ်နဲ့။ ဒေါ်အေမီသွင် တော်တော် ထန်နေပုံရသည် ။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်အလစ်မှာ တိုးတိုးလေး…“ ရွှေဖြူလဲ ဆာနေတယ် သိလား..မင်း ဖန်လိုက်ရင်ရမှာသေချာတယ်…” လို့ ပြောသည် ။“ ဟာ..မလုပ်ပါနဲ့..မမရယ်…ငရဲကြီး..မင်းဒါဏ်သင့်နေပါ့မယ်….မလုပ်ကောင်းပါဘူး….” လို့ သူပြောလိုက်တော့ ဒေါ်အေမီသွင်က “ ဟွန်း..ဒို့ကို လုပ်တာကျတော့ ငရဲမကြီးဘူးပေါ့လေ…ဒို့ကလည်း လင်ကြီးငုတ်တုတ်နဲ့ပါ…” လို့ ပြုံးစိစိနဲ့ မျက်စောင်းလေး ထိုးကာ ပြောလိုက်ပါသည် ။
ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ အိမ်က အပြန်လမ်းမှာ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က “ ရှမ်းပြည်သွားရင် ထင်အောင်ကျော် လိုက်ခဲ့နော်…” လို့ ပြောလို့..“ ဟုတ်ကဲ့..လိုက်ပါမယ်..မမ…” လို့ သူဖြေသည် ။ ရွှေနန်းဘုံအတွက်ရွှေပုဇွန်က ဖါလူဒါ ဝယ်ချင်သည် ဆိုလို့ သူ ရွှေပုဇွန်ကို မောင်းရသည် ။
ရွှေပုဇွန်ဆိုင်ကို ရောက်တော့ “ မမလဲ တခုခုထိုင်စားချင်သား..” လို့ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က ပြောလို့ ဆိုင်ထဲကို ဝင်ခဲ့ကြသည် ။
လူကြီး လုံခြုံရေး တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေသည် ဆိုတာကိုတော့ သူ အမြဲ သတိရှိသည် ။ ဆိုင်ထဲပတ်ဝန်းကျင်ကို သူအမြဲ ကြည့်သည် ။ ပေါ့ဆလို့ မရ ။ မြေပေါ်မြေအောက် ရန်သူဆိုတာတွေကအချိန်မရွေး ပေါ်လာနိုင်သည် ။ “ လူနဲ့ လက်နက် မကွာစေရ ” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း သူ့မှာသေနတ် အမြဲပါသည် ။ ပါရသည် ။
ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က အိုက်စ်ခရင်းမ် စားရင်း သူ့ကို မြို့သစ်မှာ သူတို့မိသားစုအတွက် တိုက်တလုံး ဆောက်ဖို့ လုပ်နေတာ သိပြီးပြီလား ..လို့ မေးသည် ။ “ ဟုတ်ကဲ့မမ.သိပါတယ်..” လို့ သူဖြေသည် ။
ရွှေနန်းဘုံအတွက် ဝယ်လာတဲ့ ဖါလူဒါအထုပ် ဆွဲရင်း ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် ဝင်ဖို့ ကားတံခါးကို သူ ဖွင့်ပေးသည် ။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က “ ကိုကို့ကို ထင်အောင်ကျော့် ပရိုမိုးရှင်း အတွက် မမ အမြဲ သတိပေးပေးတာ သိလား…” လို့ သူ့ကို အပြန်လမ်းမှာ ပြောသည် ။“ သိုင်းကျူးပါ.မမ ” လို့ သူပြောတော့..“ မင်းက မမတို့မိသားစုဝင်လို ဖြစ်နေပြီး သိပ်လဲ အလိုက်သိ အလုပ်လဲ လုပ်တော့ ချီးမြှင့်ရမှာပေါ့ကွယ်…” လို့ ပြောသည် ။
သိမ့်ကနဲ လေယာဉ်ဘီးနဲ့ ပြေးလမ်း ထိတွေ့လိုက်တော့ သူ့အတွေးတွေ ပြတ်တောက်သွားသည် ။ဟဲဟိုးလေယောဉ်ကွင်းကို ဆင်းပြီ ။
တောင်ကြီးမြို့ရောက်တော့ ကြီးမားခန်းနားတဲ့ ဧည့်ရိပ်သာကြီးမှာ ရွှေနန်းဘုံတို့ မိသားစုတွေအတွက် တည်းခိုဖို့ ပြင်ဆင်ထားသည် . ။ ရွှေနန်းဘုံရဲ့ အဖေ “ အဘ ” ကတော့ ရောက်ကတည်းက တွေ့ဆုံစရာ လူကြီးတွေ က တန်းစီနေတာကြောင့် မအားလပ်တော့ဘူး ။ သူ့ကို သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိကအစစ လုပ်ကိုင်ပေးနေသလို ထင်အောင်ကျော်ကလည်း ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်နဲ့ ရွှေနန်းဘုံတို့ သွားလိုရာ လုပ်ချင်တာ အားလုံးကို စီစဉ်လုပ်ကိုင်ပေးရမှာဖြစ်သည် ။
ရွှေနန်ုးံသည် တကယ်တော့ ဒီ ခရီးစဉ်ကို မလိုက်ချင်ဘူး ။ အဖေက လိုက်ရမည် လို့ တချက်လွှတ်အမိန့် ထုတ်လို့သာ မတတ်သာဘဲ လိုက်ခဲ့ရတာ ။ သူမ အနေနဲ့ကတော့ မိဘတွေ ခရီးသွားနေတဲ့အချိန် ကိုထက်နဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ချင်တာပေါ့ ..။ မလိုက်ချင်ဘဲ လိုက်လာရလို့ ရွှေနန်းဘုံ စိတ်က သိပ် မကြည်လင်ဘူး ။ ဟိုဟာတောင်းဆို ဒီဟာတောင်းဆိုနဲ့ ..။
ဧည့်ရိပ်သာ အပေါက်ဝမှာ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်နဲ့ ရွှေနန်းဘုံတို့ “ အင်းလေးကန် ” နဲ့ “ ဟိုပုန်းရေထွက်”ကို လည်ပတ်ဖို့ လုံခြုံရေး အစီအစဉ်တွေကို တောင်ကြီး စစ်ဌာနချုပ်က အရာရှိနဲ့ တိုင်ပင်နေခိုက်..ရွှေနန်းဘုံက ..“ မီးရဲ့ ချော့ကလက် မပါခဲ့ဘူး…..ဘယ်လို လုပ်မလဲ…”ာနချုပ်က လလိလိုလို့ ထင်အောင်ကျော်ကို နှုတ်ခမ်းလေး စူထော်ပြီး လာပြောသည် ။
“ ဒို့ အခုဘဲ တောင်ကြီးဈေးက ပြေးဝယ်လိုက်မယ်..ရွှေနန်း..ဘာအမျိုးအစားလဲ..”“ ဟွန်း…ဒီမှာ ရမှာ မဟုတ်ဘူး….မီးစားနေကျ ချော့ကလက်က အင်္ဂလန် က လာတာ….”“ သွားရှာကြည့်ပေးမယ်လေ…ရန်ကုန်ကိုလည်း နောက်လေယာဉ်နဲ့ ပို့ပေးဖို့ ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင်ကို ဖုန်း ဆက်လိုက်မယ်…အခုဘဲ ဒို့ ဈေးကိုသွားလိုက်မယ် ..”
လက်ထဲက လမ်းလျောက်စကားပြောစက်နဲ့ “ အပြင်သွားဖို့ ကား လိုတယ်..” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။
နှစ်မိနစ်အတွင်း ပက်ထရိုနစ်ဆန်း ဂျစ် အသစ်တစီး ဆင်ဝင်အောက်ကို ထိုးဆိုက်လာသည် ။
“ ရွှေနန်း..ဒို့ သွား ရှာမယ်..ဘာအမျိုးအစားလဲ ဟင်..”ရွှေနန်းဘုံက ချော့ကလက် နံမည်ကို မပြောဘဲ “ ရွှေနန်းလဲ လိုက်မယ် ..” လို့ ပြောလိုက်လို့ စောစောက သူတယောက်ထဲ ဒရိုင်ဘာနဲ့ ထွက်မလို့ လုပ်ထားပေမယ့် ရွှေနန်းဘုံလည်း ပါမှာမို့ လက်နက်ကိုင် ရဲဘော်သုံးယောက် ကို ကားနောက်ခန်းမှာတင်ပြီး ခေါ်ခဲ့လိုက်သည် ။
တောင်ကြီးဈေးမှာ ရွှေနန်းဘုံ သူလိုချင်တဲ့ ချော့ကလက် ချွတ်စွပ် အတိအကျကို မရပေမယ့် တခြားမုန့်တွေ နဲ့ အဝတ်အထည်တွေ ဝယ်ရတာကြောင်က ပျော်သွားသည် ။ မျက်နှာလေး ကြည်လင်ဝင်းပသွားသည် ။
ဈေးလဲ ဝယ်ပြီးရော ရွှေနန်းဘုံက “ ဘိုက်ဆာတယ်…” လို့ ပြုံးစိစိနဲ့ သူ့ကို ပြောသည် ။“ ရတယ်လေ…ဧည့်ရိပ်သာမှာ စာစရာတွေ အစုံဘဲ…အဲဒီမှာ စားမလား…အပြင်ဆိုင်မှာစားမလား…” လို့ ထင်အောင်ကျော် မေးလိုက်သည် ။
“ အပြင်ဆိုင်မှာဘဲ စားမယ် …”ရွှေနန်းဘုံ ရောက်ခါစကလို မဟုတ်တော့ဘဲ ပျော်လာတာ တွေ့ရလို့ သူ ဝမ်းသာမိပြီး ရွှေနန်းဘုံ စားချင်တဲ့ ရှမ်းဆိုင်တဆိုင်ကိုခေါ်သွားလိုက်သည် ။
ရွှေနန်းဘုံက စားစရာတွေကို တို့ကနန်းဆိတ်ကနန်းဘဲ စားတာပါ ။ စိတ်ရှိသလောက်သာ သူစားရင်လဲသူ့ကိုယ်ကြီး ပုတ်လောက် ဖြစ်နေမှာဘဲလေ ။ လူကြီးမိသားစုမို့ အစားအစာတွေက အမြဲလို အလျံအပယ်ဘဲလေ ..။
ရွှေနန်းဘုံနဲ့ ထိုင်စားနေကြတဲ့အချိန် “ ဟေး..သူငယ်ချင်း…..ဟား..တွေ့ရတာ ဝမ်းသာလိုက်တာ..မင်းဒီကို လာလည်တာလား…အိမ်ထောင်ကျနေပြီလား….အမျိုးသမီးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါအုံး….” လို့ ဝမ်းသာအားရ ပြေးလာနုတ်ဆက်တဲ့အပတ်စဉ်တခုထဲ ဆင်းခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း ထိန်လင်းနောင်က ရွှေနန်းဘုံကိုသူ့ရည်းစား ဒါမှမဟုတ် မိန်းမလို့ ထင်နေသည် ။
ထိန်လင်းနောင်ကို ရွှေနန်းဘုံဟာ သူ့လူကြီးရဲ့ သမီး ဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်ရသည် ။ ထိန်လင်းနောင်လည်းလူကြီးစမီး ဖြစ်နေလို့ လန့်သွားးပြီး ဆောရီး သုံးခါလောက် ပြောပြီး နုတ်ဆက်ခါ လစ်သွားသည် ။
ရွှေနန်းဘုံနဲ့ ဧည့်ရိပ်သာကို ပြန်ရောက်တော့ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က စစ်ဌာနချုပ်က လူကြီးကတော်တွေနဲ့ပါသွားကြောင်း ဧည့်ရိပ်သာ တာဝန်ခံ ဗိုလ်ကြီးက ပြောပြသည် ။ အဖိုးကြီးကတေ့ Golf ကွင်းမှာ လို့သိလိုက်ရသည် ။
ရွှေနန်းဘုံရဲ့ ချော့ကလက် ရန်ကုန်က လေယာဉ်နဲ့ ရောက်လာသည် ။ အပေါ်ထပ်မှာ ရှိနေတဲ့ ရွှေနန်းဘုံကို ချော့ကလက်ပေးဖို့ သူ အပေါ်ထပ်ကို လှေခါးကြီးကနေ တက်သွားလိုက်သည် ။
“ ကိုထင်အောင်ကျော် …”
အိပ်ခန်းထဲက ထွက်လာတဲ့ ရွှေနန်းဘုံကို သူ မြင်လိုက်ရတော့ ဒိန်းကနဲက တကိုယ်လုံး တုန်သွားသည် ။ရွှေနန်းဘုံသည် အပေါ်ပိုင်းမှာ ရင်စည်းအနက်..အောက်ပိုင်းမှာ အသားကပ် အားကစားဘောင်းဘီရှည်နဲ့ အားကစားလုပ်နေရာက ထွက်လာပုံရသည် ။ လုံးဝန်းတဲ့ ရွှေနန်းဘုံရဲ့ ရင်သားစိုင်နှစ်မွှာက ရင်စည်း အနက်လေးအထက်က လျံထွက်နေသည် ။ ဝမ်းပျဉ်သားဖြူဖြူဖွေးဖွေးရှပ်ရှပ်လေးကိုလည်းအသဲယားစရာတွေ့နေရသည် ။ အသားကပ်ဘောင်းဘီက ကိုယ်လုံးတွေကို အရှိကို အရှိအတိုင်း ပြသနေသလို မို့ ပေါင်တန်လှလှတွေနဲ့အဲဒီကြားက မို့ဖေါင်းနေတာကြီးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေ့နေရလို့ သူ့စိတ်တွေ ဂယောင်ခြောက်ခြား ဖြစ်ကုန်ရတာပါ ။ ရွှေနန်းဘုံက သူ့အကြည့်တွေကြောင့် လက်တဖက်နဲ့ ရင်စိုင်တွေကို ကာလိုက်သည် ။ ကျန်တဲ့ လက်တဖက်နဲ့ သူ ကမ်းပေးတဲ့ ချော့ကလက် အထုပ်ကို လှမ်းယူသည် ။
“ ရွှေနန်း..ဘယ်သွားချင်သေးလဲဟင်..သွားချင်တာ ရှိရင် ဒို့ကို ပြောပေါ့..”“ အင်း..ခုထိတော့ ဘာမှ မရှိပါဘူး…..ရှိမယ်လဲ မထင်ပါဘူး.. သိုင်းကရူးနော်..ကိုထင်အောင်ကျော်…ဟီး..လေ့ကျင့်ခန်း ဆက် လုပ်လိုက်အုံးမယ်…”
ရွှေနန်းဘုံ အိပ်ခန်းထဲကို ပြန်ဝင်သွားသည် ။ သူ့ကို ကျောခိုင်းပြီး လျှောက်သွားတဲ့ ရွှေနန်းဘုံကို သူကြည့်မိပြန်သည် ။ သေးကျဉ်တဲ့ ခါးလေး အောက်က ၀ိုင်းစက်စွင့်ကားတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေက အပေါ်အောက် ယိမ်းလှုပ်သွားတာ အရမ်းကို တပ်မက်စရာ ကောင်းလှသည် ။အမေတူသမီး လို့ စိတ်ထဲက မှတ်ချက်ချလိုက်မိသည် ။
လှုပ်ရှားသွားခဲ့သော စိတ်တွေနဲ့ အောက်ထပ်ကို ပြန်ဆင်းခဲ့သည် ။ “ ကိုထက် ” ဆိုတဲ့လူနဲ့ လူမရှိတဲ့ အိမ်ထဲ အကြာကြီး ချိန်းတွေ့တွေ့နေတာ ဒီလို တောင့်တင်း အချိုးကျတဲ့ ကိုယ်လုံးနဲ့ ရွှေနန်းကို ကိုထက်က ထိုင်ပြီး အလှကြည့်နေမှာ မဟုတ်ဘူး လို့လည်း တွေးမိသည် ။ တခါတခါ ရွှေနန်း ကိုထက်နဲ့ ချိန်းတွေ့ပြီးလို့ အပြန်ကျရင် နွမ်းနယ်ပျော့ခွေနေတာ သူသတိထားမိသည် ။ ကိုထက် ကကောင်းကောင်း ဖြုတ်ပေးလိုက်ပုံရသည် ။ ရွှေနန်းဘုံသာ ဝတ်လစ်စလစ် ဆိုရင် ဘယလိုနေမလဲ လို့လည်း စး တွေးလိုက်မိပြန်သည် ။ စိတ်ရိုင်းတွေ ထကြွလာမှုကြောင့် ဘောင်းဘီအောက်က သူ့ဖွားဖက်တော် ငကဲ လည်း တင်းလာသည် ။ ခေါင်းကြွထောင်လာသည် ။
ဒီအချိန်မှာ အဖိုးကြီးနဲ့ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်တို့ပါလာတဲ့ကားကြီး ဧည့်ရိပ်သာ ရှေ့ပေါက်မှာ ထိုးဆိုက်လာသည် ။ တဏှာစိတ်တွေ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်သွားပြီး ခပ်သွက်သွက်လေးပြေးထွက်သွားလိုက်ရသည် ။
“ ထင်အောင်ကျော် ရေ..ရန်ကုန်ကို အရေးတကြီး ပြန်ရမယ်ကွ..အရေးပေါ်ကိစ္စ ရှိလို့..ရွှေနန်းက ဒီမှာလျှောက်လည်ချင်သေးတယ် ဆိုရင်တော့ မောင်ရင်ဘဲ လိုက်ပို့လိုက်တော့…ကိုယ်တော့ ခုချက်ချင်းဘဲပြန်ရမယ် …” လို့ အဖိုးကြီးက ပြောသည် ။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ကလည်း..“ မမလည်း ပြန်လိုက်သွားမယ်..ရွှေနန်း နေခဲ့ချင်ရင်တော့ နေခဲ့ပစေ…ထင်အောင်ကျော် ဘဲ လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပေါ့ကွယ် …” လို့ ပြောသည် ။ ရွှေနန်းနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့ရမှာကို သူစိတ်လေးမိသည် ။ ရွှေနန်းနဲ့ နီးနီးစပ်စပ်နေရတာ မလွယ်ဘူး ။ ခုနလေးတင်ကတောင် ရွှေနန်းရဲ့ ကိုယ်လုံး အချိုးအဆက်တွေကို အသားကပ် ဘောင်းဘီ နဲ့ တွေ့ရတာ စိတ်တွေ ဟုန်းကနဲ ထကြွပြီး ဖေါက်ပြန်နိုးကြွမိခဲ့သည် မဟုတ်လား ။
ရွှေနန်းက သူ မနေခဲ့ချင်တော့ဘူးလို့ သူ့မိဘတွေကို ပြောတာကြောင့် တော်ပါသေးသည် ။ အားလုံး ဟဲဟိုးလေယာဉ်ကွင်းကို ပြန်ဆင်းခဲ့ကြတော့ ရွှေနန်းဘုံနဲ့ သူနဲ့က ကားတစီးနဲ့ စီးရတော့ သူ့အနားကို ကပ်ပြီး…“ ကိုထက်နဲ့ ပြန်တွေ့ချင်နေပြီ…ရန်ကုန် ရောက်တာနဲ့ သူ့ဆီ ကိုထင်အောင်ကျော် လိုက် ပို့ပေးနော် ..” လို့ ရွှေနန်းဘုံက ပြောသည် ။
ရန်ကုန်ကိုရောက်တော့ ရွှေနန်းဘုံက လေယာဉ်ပေါ်မှာကတည်းက အမေဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ကို ရန်ကုန်ရောက်တာနဲ့ သူ တနေရာကို သွားစရာ ရှိလို့ ကိုထင်အောင်ကျော်ကို လိုက်ပို့ခိုင်းချင်တယ်လို့ ပြောထားပြီး ဖြစ်တာကြောင့် ရွှေနန်းဘုံသွားဖို့ ကားသီးသန့်တစီးသည် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ အသင့် ရှိနေပေသည် ။ မိဘတွေရဲ့ ကားမဲကြီး လျောကနဲ ထွက်သွားတော့ တောင့်တောင့်ကြီ အလေးပြုကာ ကျန်ခဲ့တဲ့ သူ့ကို ရွှေနန်းဘုံက လက်မောင်းကို ပုတ်ကာ “ လုပ်ပါ..မြန်မြန်…သွားကြရအောင်…” လို့ ပြောသည် ။ သူသည် အသင့်ရှိနေတဲ့ မာဇဒါ၃၂၃ ကားဝါလေးနဲ့ ရွှေနန်းဘုံကို လိုက်ပို့ရပါသည် ။သွားချင်နေတဲ့ ကိုထက်ရဲ့ အိမ်ကို လိုက်ပို့ရပါသည် ။
ကိုထက်ရဲ့ ခြံကို ရောက်တော့ ရွှေနန်းဘုံက ကားပေါ်က ဆင်းပြီး ထုံးစံအတိုင်း သူ့ကို “ ကိုထင်အောင်ကျော်..ရွှေနန်း ကြာချင်ကြာမယ် …အေးဆေးသာ စောင့်..တခုခုသွားစားချင်လည်း စားပေါ့”လို့ ပြောပြီး ခြံတံခါးကို တွန်းဖွင့်ဝင်တော့ ခြံတံခါး သော့ပိတ်ထားတာ တွေ့လိုက်ရသည် ။
“ ဟာ…ဘယ်သူမှ မရှိကြဘူး…ဟွန်း..ကိုထက်တယောက် ဘယ်များသွားနေသလဲ မသိဘူး ..”
ရွှေနန်းဘုံ ကိုထက်နဲ့ တအား တွေ့ချင်နေပုံရသည် ။
ခြံရှေ့မှာ စောင့်ကြသည် ။
လေယာဉ်ပေါ်မှာလည်း တပည့်တွေက အစားအသောက်တွေ ကျွေးလို့ ရွှေနန်းဘုံရဲ့ မိဘနှစ်ပါးက စားကြပေမယ့် ရွှေနန်းဘုံက မစားဘဲ အိပ်ဘဲနေခဲ့တော့ အခု ရွှေနန်းဘုံ ဆာနေပြီ ။
“ ဆာလိုက်တာ..” လို့ တီးတိုးလေး သူမဖါသာ ပြောလိုက်တာကို နားပါးတဲ့ သူ ကြားပါသည် ။
“ ရွှေနန်း …”
“ ရွှေနန်း ဘိုက်ဆာတယ်…”
“ ရွှေနန်း ဘာစားမလဲ….ဘယ်မှာ စားချင်လဲ..သွားမယ်လေ ..”
“ အင်း.စဉ်းစားအုံးမယ်..ဒီအနားတဝိုက်မှာ ဘာဆိုင်ကောင်းလဲ….”
ရွှေနန်းရဲ့ အမိန့်ကို သူ ငံ့လင့်စောင့်စားနေသည် ။
“အင်းလျားလိတ် က ကျောက်ပုဇွန်နဲ့ ထောပတ် စားချင်တယ် ..”
ကိုထက် အိမ်နားက ကိတ်မုန့်တိုက် တခုကနေ အင်းလျားကန်ဟိုတယ်ကို လှမ်း ဖုန်းဆက်လိူက်ပါသည် ။ မန်နေဂျာတွေ က သူ့ကို သိနေသည် ။ လူကြီးတွေ ထမင်းစားပွဲတွေအတွက် သူက ဖုန်းဆက်နေကျ ဖြစ်လို့ ..။ ရွှေနန်းအတွက် သူမစားချင်နေတဲ့ ကျောက်ပုဇွန်ထုပ်ကြီးကို ကြိုတင် မှာကြားထားလိုက်သည် ။
အင်းလျားကန် ဟိုတယ်ဝင်း ထဲကို ဝင်ခဲ့တဲ့ အချိန် ရွှေနန်းဘုံက ရုတ်တရက်…“ ကိုထင်အောင်ကျော်..ပြန်ကွေ့..ပြန်ကွေ့…” လို့ အော်ပြောလိုက်လို့ ဘရိတ်ပေါ် ခြေတင်လိုက်ရသည် ။
“ ဘာဖြစ်လဲ…ရွှေနန်း . . ”
“ ဟိုကား နောက်ကို လိုက် ..ဟိုကား..ဟိုကား…..”
တိုယိုတာ စပရင်တာ ရှဲဇောင်း အဖြူလေး ..။ ကိုထက်ရဲ့ ကားတော့ မဟုတ်ဘူး ။ ကိုထက်ရဲ့ အိမ်က ကားတွေနဲ့ အဲဒီကားတွေရဲ့နံပါတ်ပြားတွေကို သူအကုန် သိသည် ။ှ
“ လိုက်..လိုက်..ကိုထင်အောင်ကျော် …. မြန်မြန်လေး ..လိုက်ပါ …မှီအောင် လိုက်ပါ …”
အရှိန်ကိုမြှင့်တင်လိုက်သည် ။ ရှေ့မှာ လမ်းဆုံလမ်းခွ ..။ မီးပွိုင့် ရှိသည် ။
ရှေ့က စပရင်တာက ခပ်မြန်မြန်နဲ့ မီးစိမ်းနေတဲ့ မီးပွိုင့်ကို ဖြတ် လမ်းဆုံကို ဖြတ်ကျော်သွားသည် ။ကားရှေ့မီးကြီးကို တထောက်ထောက်နဲ့ အထောင်အချလုပ်ပြီး မီးပွိုင့်လမ်းဆုံကို အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ သူဖြတ်ကျော်သည် ။ ယဉ်ထိန်းရဲက သူတို့ ကားတွေကို သိသည် ။ သူ့ကို အလေးပြုလိုက်တာ ဖျတ်ကနဲတွေ့လိုက်သည် ။
ရှေ့က စပရင်တာကို တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမကြီးပေါ်မှာ မှီသည် ။
ရွှေနန်း အမိန့်အတိုင်း စပရင်တာအဖြူကို ကျော်လိုက်တော့ ဘေးချင်းယှဉ်မိနေတဲ့အချိန် ရွှေနန်းကကားမောင်းတဲ့လူနဲ့ ဘေးကထိုင်တဲ့ မိန်းမကို သေသေချာချာ မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန် ထင်အောင်ကျော် လည်း ကြည့်လိုက်တော့ ကိုထက်နဲ့ မိန်းမတယောက်ကို တွေ့လိုက်ရသည် ။
မိုင်းဗုံးတလုံးတော့ ပေါက်ကွဲတော့မည် ဆိုတာကို ထင်အောင်ကျော် သိလိုက်သည် ။ ရွှေနန်းရဲ့ မျက်လုံးတွေ မီးဝင်းဝင်းတောက်နေသည် ။ ကိုထက်ကလည်း တရှိန်ထိုး ကျော်တက်လာတဲ့သူတို့ကားဖက်ကိုကြည့်တော့ ရွှေနန်းနဲ့ သူ့ကို တွေ့လိုက်တော့ အရှိန်လျှော့သွားသည် ။
“ ကိုထင်အောင်ကျော်..သူ့ကို ရပ်ခိုင်းလိုက် …”
ရွှေနန်းက တုန်ခါနေတဲ့ အသံနဲ့ ပြောလိုက်တော့ ကိုထက်ကို လမ်းဘေးကို ချရပ်လိုက် ဖို့ သူ လက်နဲ့ပြလိုက်သည် ။ ကိုထက်ကား အရှိန်လျှော့ပြီး လမ်းဘေးမှာ ရပ်လိုက်တော့ သူ့ကားကိုလည်း ကိုထက်ကားရဲ့ အရှေ့မှာ သူ ရပ်လိုက်သည် ။
ကားရပ်လိုက်တာနဲ့ ရွှေနန်းက ကိုထက်ကားဆီကို ဆင်းပြေးသွားတာကြောင့် သူလည်း ပြောလိုက်သွားရသည် ။
“ ကို..ကိုထက်..ဒါဘာလဲ..သူ…သူက ဘယ်သူလဲ….”
ကိုထက်က ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်ပြီး ရွှေနန်းဘုံကို “ သူက ကိုယ့်ရဲ့ ကာစင် ပါ ..သူ့ကို အိမ်လိုက်ပို့မလို့…”လို့ ခပ်တိုးတိုး ရှင်းပြသည် ။ ရွှေနန်းဘုံက “ ဘာကာစင်လဲ..ဘင်္ဂလားကာစင်လား..အင်းယားလိတ်ထဲက ထက်လာတာ မတွေ့ဘူးထင်လား…နင်..လူလိမ် လူညာ…နင် ကွယ်ရာမှာ ဖေါက်ပြန်တယ်..ငါ ရှမ်းပြည်မှာ ၁ဝရက်လောက် ကြာမယ် ပြောခဲ့လို့ နင် ငါ မရှိဘူး ဆိုပြီး ကွယ်ရာမှာ ဖေါက်ပြန်တာသစ္စာမဲ့တာပေါ့လေ …” လို့ အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ပြောဆိုရင်း ကိုထက် ပါးကို ဖြန်းကနဲ ရိုက်ထည့်သည် ။ ကားထဲက မိန်းမ ဆင်းလာသည် ။ ဒီမိန်းမက ကိုထက် ထက် အသက်ကြီးပုံရသည် ။အရပ်ပုပေမယ့် ရင်သားတွေက တအားကြီးထွားလွန်းနေသည် ။
ဒီမိန်းမက“ ဟေ့..မင်းဘာလို့ သူ့ကို ရိုက်တာလဲ..မင်းက ဘယ်သူလဲ…” လို့ ရွှေနန်းဘုံကို မေးသည် ။ရွှေနန်းဘုံးက “ အံမာ…နင်က ငါ့ကို မေးနေတယ်..ငါကသာ နင့်ကို မေးရမှာ..နင်က ဘယ်သူလဲ..ကိုထက်နဲ့ ဘယ်လို ပတ်သက်လဲ….” လို့ ပြန်အော်သည် ။
သည်မိန်းမက “ ကိုထက်က ငါ့ချစ်သူ..နင်နဲ့က ဘာဆိုင်လို့လဲ..” လို့ ရွှေနန်းဘုံကို အော်ပြောတော့ရွှေနန်းဘုံက သည်မိန်းမရဲ့ ပါးကို ဖြန်းကနဲ ရိုက်ထည့်လိုက်ပြန်သည် ။ ရုတ်တရက်မို့ ခံလိုက်ရပေမယ့် ဒီမိန်းမက ရွှေနန်းဘုံကို ပြန်ရိုက်ဖို့ ကြိုးစားသည် ။
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ကြားကို သူ ဝင်လိုက်သည် ။ ရွှေနန်းဘုံကို ရိုက်မယ့်လက်က သူ့ရင်ဘတ်ကို ရိုက်မိသည် ။
“ ဟ်ိတ်..နောက်ဆုတ် …မလုပ်နဲ့….”
မဆွဲလို့ မဖြစ်တော့တာကြောင့် ထင်အောင်ကျော်လည်း ရွှေနန်းဘုံကို ဆွဲရတော့သည် ။
“ ကိုထင်အောင်ကျော်….ရွှေနန်းကို ဆွဲမယ့်အစား ဒီသစ္စာဖေါက်တဲ့ကောင်ကို ပိတ်ကန်ပစ်လိုက်..ဟိုဟာမကိုလည်း နားရင်းရိုက်လိုက်…”
ရွှေနန်းသည် ဒေါသတကြီး အော်ဟစ်သည် ။ သူ ရွှေနန်းကို ကားဆီကို ဖက်ချုပ်ပြီး ခေါ်သွားသည် ။
ရွှေနန်း ရုန်းရင်းကန်ရင်း သူ့နောက်ကို ပါလာသည် ။
ရွှေနန်းရဲ့ ရင်စိုင်အိအိတွေနဲ့သူ့လက်တွေ ရင်ဘတ်တွေ ထိမိကိုင်မိပွတ်မိရသလို ရေအနန်းက ရုန်းကန် တာကြောင့် ရွှေနန်းရဲ့ တင်ပါးအိအိကြီးတွေကိုလည်း ထိမိကိုင်မိကုန်သည် ။
ကိုထက်နဲ့ သူ့အမျိုးသမီးလဲ ကားပေါ်ပြန်တက်ကာ မောင်းထွက်သွားသည် ။ရွှေနန်းဘုံမှာတော့ ရည်းစားဖြစ်သူက သစ္စာမဲ့တာကို အလူးအလဲ ခံစားနေရသည် ။
“ ကိုထက်..စောက်ရူး..ခွေးမသား…..သူ့ကိုတော့ ငါက ချစ်လိုက်ရတာ…သူက ခွေး…ခွေးဘဲ..သူ့ကိုသတ်ပစ်ချင်တယ်……အီး…ဟီး………..ဟီး……..”
ထင်အောင်ကျော်လည်း သူ့ကို ဖက်ပြီး ငိုနေတဲ့ ရွှေနန်းကို ပြန်ဖက်ပြီး ချော့ရသည် ။ ရွှေနန်းရဲ့ ဆူဖြိုးတဲ့ ရင်သားတွေနဲ့ ထိမိနေတာကိုတော့ သူ အတော့်ကို ရင်ခုံသည် ။ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားသည် ။
ရွှေနန်းဘုံ ငိုတာမှ မရပ်မနား ငိုသည် ။“ အသဲတွေ ကွဲကြေကုန်ပြီ…” လို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ရေရွတ်နေသည် ။“ ကိုထက် ” ကို သူကအပျိုစင်ပန်းကို ပေးလိုက်တာ..သူ့ကို ဘာလုပ်လုပ် ရွှေနန်းက ကြည်ဖြူခဲ့တာ..ပီကေလို စိတ်တိုင်းကျ ၀ါးပြီး ထွေးထုတ်သွားတာ..ဒီကောင်..တောက်…မကျေနပ်ဘူး….မကျေဘူး…..”
ရွှေနန်းက သူ့ကို “ ကိုထင်အောင်ကျော်..ရွှေနန်းအတွက် ကိုထက်ကို တခုခု လုပ်ပေးပါလား…ရွှေနန်းအတွက် သူ့ကို တခုခု လက်စားချေပေးပါလားဟင် …” လို့ ပြောသည် ။
“ လက်စားချေတာ မကောင်းပါဘူး..ရွှေနန်းရယ်…သူမကောင်းရင် သူ့ကို ကိုယ့်ဘဝထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်ပေါ့…ယောက်ျားတွေ ပေါပါတယ်…ရွှေနန်း တနေ့မှာ ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့ သစ္စာရှိတဲ့ ယောက်ျား တယောက် ထပ်တွေ့လာမှာ သေချာပါတယ် …” လို့ ဖြောင့်ဖျ ပေမယ့်လည်း မရဘဲ အိမ်မပြန်ဘူး..တနေရာကို သွားမယ် လုပ်နေသည် ။
ရွှေနန်း စိတ်သက်သာစေဖို့ သူ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ။ အင်းယားလိတ်ဟိုတယ်ကို သူတိုက ပြန်ရောက်သွားကြသည် ။ ဟင်းတွေ မှာထားတယ် ဆိုတော့ သွားစားရမယ့် တာဝန်ရှိနေသည် ။ ရွှေနန်း အ်ိမ်သာဝင်နေတဲ့ အချိန် ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ဆီကို ဖုန်းဆက်လိုက်သည် . ရွှေနန်း အိမ်ကို မပြန်ဘူး လုပ်နေတာကို ပြောပြလိုက်သည် ။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က ရွှေနန်းကို ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်လံ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးပါ…..” လို့ မှာသည် ။ ရွှေနန်းသည် စောစောက စားချင်တယ် လုပ်နေတဲ့ ကျောက်ပုဇွန်ထုပ်ကြီးကို နဲနဲတောင် မထိမတို့တော့ဘဲ မာတီနီ ၀ိုင်တွေကိုဘဲ တခွက်ပြီး တခွက် မှာသောက်နေတော့သည် ။ ထင်အောင်ကျော်လည်း ရှေ့တန်းမှာ စစ်တိုက်နေရာကနေ မြို့ပေါ်မှာ ကလေးလာထိန်းနေရတဲ့ သူ့ဘဝကို ပြန်တွေးမိနေသည် ။
ရွှေနန်းဘုံ မူးပြီး အိမ်ပြန်သည် ။ ထင်အောင်ကျော်လည်း ရွှေနန်းဘုံကို အိမ်အကူ အိမ်ဖေါ်တွေက သူမ အိပ်ခန်းထဲကို တွဲခေါ်သွားပြီးကာမှ အိမ်ပြန်ရသည် ။ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ရေချိုးလိုက်သည် ။ ရေချိုးခန်းက ပြန်အထွက်မှာ ဖုန်းလာသည် ။ ရွှေရေးလွင်လွင်ခေါ်တာ ။
“ ထင်အောင်ကျော်..ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ….”“ အလုပ်များနေတယ်…ရွှေရေးရေ….”“ ဘာအလုပ်များတာနဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ အင်းယားလိတ်ဟိုတယ်မှာ အရက်ထိုင်သောက်တာလား…”“ ရွှေရေး..ဘယ်လိုသိတာလဲ..ဘယ်သူပြောလဲ…”“ အိုး…ပြောတဲ့လူ ရှိတာပေါ့..ဘယ်သူပြောလဲက အရေးမကြီးပါဘူး ..အဓိက က ဟုတ်လား မဟုတ်လား နင်ဖြေ..ထင်အောင်ကျော် …”“ ဟုတ်တယ်..ရွှေရေး..ဒါပေမယ့် နင် ထင်သလို အပျော် အရက်ထိုင်သောက်နေတာတော့ မဟုတ်ဘူး .ငါ အလုပ်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေတာ …ငါ့ အလုပ် ..အထက်က အမိန့်ပေးရင် ငါ အလုပ် အမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်ရတယ်..ရွှေရေး …”“ နင်က ဒါဘဲ..ပြောလိုက်ရင် အလုပ် အလုပ်နဲ့ နင် ဏှာသောင်းကျန်းနေတာ ငါ မသိရင် ခက်မယ် ထင်အောင်ကျော်….”ရွှေရေး ဖုန်းချသွားသည် ။ သူ ပြန်ခေါ်သည် ။ ရွှေရေး ဖုန်းထူးပေမယ့် “ နင်နဲ့ ငါ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး..” လို့ ပြောပြီး ဖုန်းချသွားသည် ။
စိတ်ရော လူရေ ပင်ပမ်းတာကြောင့် ရွှေရေးကို မနက်ဖန်ကျမှ သွားချော့တော့မယ် လို့ သူ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်သည် ။ ရွှေရေးဆီကိုလည်း သူ ဖုန်းထပ် မခေါ်တော့ ။
နောက်တနေ့ မနက်မှာ နိုးနေပေမယ့် အိပ်ရာထဲက သူ မထွက်ချင်လို့ ဆက်အိပ်နေတဲ့အချိန် ဖုန်း လာလို့ ကုတင်ဘေး ကပ်ရက် စားပွဲပေါ်က ဖုန်းကို လှမ်းကောက်ကိုင်လိုက်တယ် ။
“ ထင်အောင်ကျော်လားဟင် …”
“ ဟုတ်ကဲ့…မမ ”
ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် ..ခေါ်တာ ….။
“ ထင်အောင်ကျော် ရေ..နိုးပြီလား..စောစောစီးစီး ခေါ်ရတာတော့ အားနာတယ်ကွယ်…ဒါပေမယ့် ရွှေနန်း အိမ်က တယောက်ထဲ ထွက်သွားလို့..မမတို့ စိတ်ပူနေကြတယ် …ထင်အောင်ကျော်လိုက်ရှာပေးပါအုံးကွယ်….ဒီကောင်မလေး ညလဲ မအိပ်ဘူး..ငိုလိုက်တာလည်း အရမ်းဘဲ…”
“ ဟုတ်ကဲ့မမ..ကျနော် အခုဘဲ လိုက်ရှာပါမယ် …”
“ သူ ဘာဖြစ်တာလဲ..ရီးစားနဲ့ ကွဲတာလား….”
“ ဟုတ်ပါတယ်..မမ…အဲဒီ သဘောပေါ့…”
“ အေး..မင်းက သူ ဘယ်တွေ သွားနိုင်သလဲ ပိုသိမယ်..လူလိုရင် ကားလိုရင် ဖုန်းဆက်လိုက်နော်…”
“ ဟုတ်ကဲ့…မမ….ရွှေနန်းက ကား နဲ့ ထွက်သွားတာလား…”
“ ဟုတ်တယ်…သရီးတူးသရီး နဲ့ ထွက်သွားတာ….”
“ ကျနော် အမြန်ဆုံး လိုက်ရှာမယ်..မမ…စိတ်ချပါ….”
“ အေးအေး..ထူးခြားရင်…တွေ့ရင် အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ပါကွယ် …”
“ ဟုတ်ကဲ့ ..မမ…”
အိပ်ရာက ချက်ချင်းထ..မျက်နှာသစ် သွားတိုက် ရေချိုးလိုက်ရတယ် ။
ရွှေရေးဆီ သွားချော့မယ့် အစီအစဉ် ပျက်သွားပြီ ။ ရွှေနန်းကို လိုက်ရှာဖို့ သူ့ကို ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က
အိမ်က မထွက်ခင် “ ရွှေရေး ” ကို ဖုန်းထပ် ခေါ်ကြည့်သေးသည် ။ ရွှေရေး မကိုင်ဘူး ။
အရင်ဆုံး ရွှေနန်း ချိန်းတွေ့နေကျ “ ကိုထက် ” တို့ ခြံကို သူ လိုက်သွားကြည့်လိုက်သည် ။ ရွှေနန်း
ရဲ့ အရိပ်အရောင်ကို မတွေ့ဘူး ။ ကိုထက်ကို ခေါ်မေးလိုက်တော့လည်း ကိုထက်က ရွှေနန်း မလာ
ဘူးလို့ ပြောတယ် ။ ရွှေနန်း နဲ့ တွဲတာများတဲ့ ဒေလီယာဝင်းထွန်း ကို သတိရလိုက်သည် ။
ဒေလီယာဝင်းထွန်း အိမ်ကို သူ ရောက်သွားသည် ။
ဒေလီယာဝင်းထွန်းက ရွှေနန်းဘုံ သူ့ဆီကို ရေက်မလာဘူး လို့ ပြောသည် .။ သူ သူငယ်ချင်းတွေကို
ဖုန်းဆက်ပြီး မေးပေးမယ်ဆိုပြီး သူ့ရှေ့မှာဘဲ ဖုန်းနဲ့ သူငယ်ချင်း အိမ်တွေကို ဆက်ပေးသည် ။
သူငယ်ချင်းတယောက်က ရွှေနန်း အလုံလမ်းက သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ ပါတီမှာ ရောက်နေတယ် လို့
သတင်းပေးတယ် ။ သူ လိပ်စာမေးပြီး ချက်ချင်းဘဲ လိုက်သွားလိုက်တယ် ။ ခြံဝင်းကျယ်ကြီး ထဲမှာ
ကားတွေ တော်တော်များများ ရပ်ထားတာ တွေ့ရတယ် ။ ခြံစောင့်က တံခါး ဖွင့်မပေးလို့ သူ
ဘာကောင်လဲ ဆိုတကို နဲနဲ မာမာ ပြောလိုက်တော့ ပြာပြာသလဲ တံခါးဖွင့်ပေးတယ် ။ တိုက်ကြီးထဲကို
ဝင်ဖို့လည်း ခြံပေါက်ဝကလိုဘဲ တံခါးစောင့်ကို ခပ်မာမာ မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ ပြောလိုက်မှ ဝင်ခွင့်
ရတယ် ။ အထဲမှာ မှောင်နေတယ် ။ တံခါးပေါက်တွေ..ပြူတင်းပေါက်တွေကို ကန့်လန့်ကာတွေ
ချထားတယ် ။ ဆူဆူညံညံ ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်း သီချင်းသံတွေ ဆူညံနေတယ် ။ ကောင်လေးတွေနဲ့ ကောင်မလေးတွေ ထိုးထိုးထွန့်ထွန့်နဲ့ ခုန်ပေါက်ပြီး ကနေကြတယ် ။
အမှောင်ထဲမှာ ခုန်ပေါက်ကနေတဲ့ လူငယ်တွေထဲ ရွှေနန်း ပါမလား သေသေချာချာ လိုက်ကြည့်တယ် ။
မတွေ့ဘူး..။ စားသောက်စရာတွေ ထားတဲ့ အခန်းထဲမှာတော့ မီးလင်းနေတယ် ။ အဲဒီအခန်းထဲ ဝင်လိုက်တော့ စားနေတဲ့ ကောင်လေး..ကောင်မလေးတွေကို တွေ့ရတယ် ။
“ ရွှေနန်းဘုံ သိလား…”
ကောင်လေးတွေကတော့ သူ့ကို မသိသလို မထေမဲ့မြင်ပုံစံတွေနဲ့ တဖက်ကို လှည့်နေကြပေမယ့် ကောင်မလေး တယောက်ကတော့ “ သိတယ်..” လို့ ပြန်ဖြေတယ် ။ “ သူ ဘယ်မှာလဲ…” လို့ ထပ်မေး
တော့ ဘေးက ကောင်လေးတယောက်က “ ဖြေမနေနဲ့..ဘာဘဲကြီးလဲ မသိဘူး…” လို့ တားလိုက်တယ် ။ ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးက ဖြေပါတယ် ။ “ အပေါ်ဆုံးထပ် တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်မှာ ရှိတယ် …” လို့
ဖြေတယ် ။ တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်ကို ဘယ်လိုသွားရသလဲတော့ သူ ထပ်မမေးတော့ပါဘူး..။ သူ့ဖါသာ ရအောင် ရှာတယ် ။ အပေါ်ဆုံးတပ်ကို ရောက်တော့ ရွှေနန်းကို ခုံရည်တလုံးပေါ်မှာ ခွေခွေလေး
အိပ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။ သူ့ဘေးမှာက ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ သရုပ်ပျက် ဝတ်စားထားတဲ့ ကောင်လေး တယောက် ရှိနေတယ် ။
“ ရွှေနန်း …ဘာဖြစ်လဲ….”
ကောင်လေးကို မေးလိုက်တော့ “ အရက်မူးသွားတာပေါ့…” လို့ ဖြေတယ် ။ သူရွှေရေးကို နှိုးကြည့်တယ် ..။ ရွှေရေး သတိရှိပေမယ့် အင်းအဲနဲ့ တော်တော့်ကို မူးနေတယ် ။
သူ့ကို တွေ့တော့..“ ရွှေနန်း ပြန်ချင်တယ်…” လို့ ပြောတယ် ..။
သူ ရွှေနန်းကို မထူတယ် ..။ တွဲဖက်ပြီး အောက်ကို ဆင်း..ကားပေါ်တင်တယ် ။ ကားပေါ်မှာလည်း
ရွှေနန်း မျက်လုံး မဖွင့်နိုင်ဘဲ ခွေနေတယ် ။ အရက်နံ့တွေ နံဟောင်နေတယ် ။ ပါးစပ်က “ အိမ်ကို
တော့ မပြန်ဘူး…ကိုထင်အောင်ကျော့်အိမ်ကို မောင်း….” လို့ ပြောတယ် ။
ရွှေနန်း ဘာပြောပြော သူ ရွှေနန်းကို သူတို့အိမ်ကို ပြန်ခေါ်သွားဖို့ လုပ်တယ် ။ ရွှေနန်းတို့အိမ်ဖက်ကို ဦးတည်ပြီး မောင်းလိုက်တယ် ။
ရွှေနန်း. မျက်လုံးပွင့်လာပြီး….“ ရေသောက်ချင်တယ်…..ရေပေးပါ….” လို့ ပြောတယ် …။
ပေးစရာ ရေကလည်း မရှိဘူး..။ ရောက်နေတဲ့ နေရာ အနီးအနားကို ကြည့်တော့ ဘဖက်ရည်ဆိုင်လေး တဆိုင် တွေ့တယ် ။ ကားထိုးရပ်ပြီး ဆင်းကြည့်တယ် ။ ရေတော့ မရဘူး..။ စပတ်ကလင် ရ
တာနဲ့ ရွှေနန်းကို တိုက်တယ် ။ ရွှေနန်းပုံက တော်တော့်ကို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဘဲ ။ ဝတ်ထားတဲ့ ထမိန် ကလည်း ပြေကျွတ်လို့ ..။ “ ကိုထင်အောင်ကျော်..အကိုက ဘာအချိုးချိုးတာလဲ….” လို့ သူ့ကို မေးလို့
“ ဘာဖြစ်လို့လဲ ရွှေနန်း…” လို့ သူပြန်မေးလိုက်တယ် ..။
“ အိမ်မပြန်ချင်ပါဘူး လို့ ပြောတဲ့ဟာကို အိမ်နား ရောက်နေပြီလေ….” လို့ ပြောလိုက်လို့ ရွှေနန်း သတိတော့ ရှိသား..။ဘယ်နားရောက်နေလဲ ဆိုတာ သိနေတယ် …လမ်းကိုမှတ်မိနေတယ်….ဒါဆို
ရင်တော့ သိပ်မဆိုးပါဘူး…လို့ စိတ်ထဲ မှတ်ချက်ချမိတယ် ။
“ ကားပြန်လှည့်…အကို့အခန်းကို သွားမယ် …”
ရွှေနန်းက မျက်လုံးမဖွင့်ဘဲ ပြောလိုက်တယ် ။
ရွှေနန်း အမိန့်အတိုင်း သူ ရွှေနန်းကို သူ့တိုက်ခန်းကို ခေါ်သွားလိုက်ပါတယ် ။
တိုက်ခန်းကို ရောက်တော့ ရွှေနန်း အိပ်ပျော်နေတယ် ။လူတွေ မြင်ခဲ့ရင်တော့ သူ့ကို တမျိုးထင်ကြမှာဘဲ ။ မတတ်နိုင်ဘူး..။ ရွှေနန်းကို ရောက်ပြီ…တိုက်ခန်းပေါ် တက်ကြရအောင်..လို့ ပြောရတယ် ။ နှိုးရတယ် ..။
ရွှေနန်းဘုံ နိုးလာတယ် ။ “ ရွှေနန်း ဒီလိုပုံနဲ့ အိမ် မပြန်ချင်ဘူးလေ ..ဒါကြောင့် ကိုထင်အောင်ကျော်ရဲ့ တိုက်ခန်းမှာ ခဏ နေချင်လို့…ဖြစ်တယ် မဟုတ်လား…” လို့ မေးပါတယ် ။ အရက်အမူးလွန်လို့ဖရိုဖရဲဖြစ်နေပေမယ့် ရွှေနန်းဘုံဟာ တအားလှနေဆဲပါဘဲလို့ သူ့စိတ်ထဲက မှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ် ။
တိုက်ခန်းပေါ်ကို ရွှေနန်းဘုံ သူ့ပုခုံးကိုမှီ..သူ့လက်မောင်းတွေကို ကိုင်တွယ်ဆုပ်လို့ တက်ခဲ့ပါတယ် ။ဘေးတိုက်ခန်းတွေကတော့ သူနဲ့ ရွှေနန်းဘုံတို့ကို ရီးစား စုံတွဲတွေလို့ ထင်ကြမှာပါ ။
တိုက်ခန်းထဲကို ရောက်ကြတော့ ရွှေနန်းကို ဧည့်ခန်းလေးက ဆိုဖါထိုင်ခုံတွေမှာ ထိုင်ခိုင်းပါတယ် ။သံပုရာသီး တွေ ရှိနေတာ သတိရပြီး သံပုရာရေချဉ်ချဉ်လေးတခွက် ရွှေနန်းအတွက် သူဖျော်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ရွှေနန်းက မျက်လုံး မှိတ်ပြီး အိပ်နေလို့ နှိုးရတယ် ။ ရွှေနန်းက ရှုံ့မဲ့ပြီး သံပုရာရေကို ယူသောက်ပါတယ် ။ ပြီးတော့“ ရွှေနန်း..ရေချိုးချင်တယ်…ရေချိုးလို့ ရမလားဟင်…” လို့ မေးတယ် ။“ ရတာပေါ့..ရတယ်…ရွှေနန်း..ခု ချိုးမလား….”လို့ သူပြန်ဖြေရင်း ရွှေနန်းအတွက် မျက်နှာသုတ်ပုဝါ ထုတ်ပေးပြီး ရေချိုးခန်းထဲမှာ ဆပ်ပြာ ရှိမရှိ ကြည့်ပေးတယ် ။
“ အိုကေ..ဒါဆို ရွှေနန်း ရေချိုးလိုက်အုံးမယ် …”
ရွှေနန်း ရေချိုးနေတဲ့ အချိန်မှာ သူ့ဖုန်း မြည်လာပါတယ် ။ အို..ရွှေနန်းအတွက် စိတ်ပူလို့ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်တို့ ဖုန်းခေါ်ပြီ ထင်တယ် ။ ဘယ်လို ဖြေရမလဲ..။ ရွှေနန်း သူ့တိုက်ခန်းမှာ ရေချိုးနေပါတယ် လို့တတ်နိုင်ရင် မဖြေချင်ဘူး ။
ဖုန်းကိုင်လိုက်တော့ သူထင်ထားသလို ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် မဟုတ်ဘဲ မထင်ထားတဲ့ ရွှေရေး ဖြစ်နေတယ် ။
“ ဟိတ်…ဘာလုပ်နေလဲ…”“ ရွှေရေး…..ဟိုလေ..ဒို့..တီဗီ ကြည့်နေတယ်….ဟင်းဟင်း…”“သူ့ကို မုန်းလို့ မေ့လို့ မရဘူးကွာ..ခက်တယ်…သိလား….ဟင်း..”“ ဝမ်းသာလိုက်တာ ရွှေရေးရယ်….ရွှေရေး ဒို့ကိုခွင့်လွှတ်လို့…”“ဒီမှာ…တခုပြောမယ်…အလုပ်ထွက်ဖို့ အမြန် လုပ်ပါ.. ရွှေရေးကို ချစ်ရင် ရွှေရေးစကားကို နားထောင်”“ ဘာလို့ အလုပ်ထွက်ခိုင်းနေတာလဲ ရွှေရေးရယ်…ဒို့က ရာထူးတောင် တက်ပြီ….”“ ဟင်..ဟုတ်လား….အေးလေ…နင်က အလုပ်ကြိုးစားတဲ့လူဘဲ…လူကြီးကလည်း ကြိုက်မှာပေါ့လေ..ငါကတော့ အပြင်စီးပွားရေးဘဲ လုပ်စေချင်တယ် …မင်းခစား ကမ်းနားသစ်ပင်လေဟာ…ကိုယ်ဘာဖြစ်မယ် ဆိုတာကို ကိုယ် ကြိုမသိနိုင်တဲ့ဟာ….”“ ရွှေရေး..ဒို့၂ယောက် ဘယ်တော့ တွေ့ကြမယ် ဆိုတာသာ ပြော….”“ ဘာလုပ်ဖို့ တွေ့မှာလဲ..ခုလဲ ဖုန်းပြောနေတာဘဲ…”“ နင်ကလဲ သိသားနဲ့ဟာ…ရွှေရေးကလည်း…”“ ဟွန်း…မသိပါဘူး…”“ ကဲ..ကဲ..ဒီ ညနေ တွေ့ကြရအောင်…”“ အေး..ဖုန်းဆက်ကြည့်..ငါ အားမအား မသိသေးဘူး …”
ရွှေရေး ဖုန်းချသွားပါသည် ။
အင်း..ငါလည်း ရွှေနန်း နဲ့ ရွှေရေး ကြားထဲမှာ တော်တော် မလွယ်ဘူး….ရွှေနန်းကိုလည်း သူ့အိမ်ကို အမြန်ပြန်ပို့ဖို့ လုပ်ရမယ် ..လို့ စိတ်ကူးကြံဆနေဆဲ ရေချိုးခန်း တံခါး ပွင့်လာသည် ။
ထမိန်ရင်လျားနဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့ ခေါင်းက ရေစိုနေတာကို သုတ်ရင်း ထွက်လာတဲ့ ရွှေနန်း ကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ ပုခုံးသား လုံးလုံးဝင်းဝင်းလေးတွေ ရင်ဘတ် ဝင်းဝင်းလေး အပေါ်ပိုင်းတွေကို သူမြင်ရတာ စိတ်လှုပ်ရှားမိရသည် ။
“ ရေချိုးလို့ ကောင်းလိုက်တာ….အမူးနဲနဲ ပြေသွားသလိုဘဲ….”“ သံပုရာရေ သောက်အုံးမလား..ရွှေနန်း …”“ မသောက်တော့ဘူး…တခု လုပ်ပေးမလား….”“ တခု မကဘူး..လုပ်ပေးမယ်….ဘာလုပ်ပေးရမလဲ…”“ ရွှေနန်းကို မဆတ်ခ်ျ လုပ်ပေးမလား….”“ အင်း..ရတယ်လေ …ရတယ်…” လို့ ပြောတဲ့ သူ့အသံတွေ မူမှန်ရဲ့လား..။ တုန်ခါနေသလား…။
“ လာ..အိပ်ခန်းထဲက ကုတင်မှာ လုပ်ပေးမယ် …”
ရွှေနန်းနဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို ဝင်ခဲ့ကြတာနဲ့ သူ့စိတ်တွေ ယိမ်းယိုင်ကုန်ပြီ ။ရွှေနန်းကတော့ ဘာမှ မဖြစ်သလိုနဲ့ ကုတင်ပေါ် မှောက်အိပ်လိုက်တယ် ။ တင်ကားကားလုံးလုံးတွေကသိသိသာသာ ခုံးမောက်နေသည် ။
ရွှေနန်းဘေးမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး ပုခုံးလေးတွေကို အသာ စနှိပ်ပေးလိုက်သည် ။“ အားလေးထည့်ပြီး နှိပ်ကွာ..ပျော့လွန်းတယ်…”“ ရွှေနန်း နာသွားမှာ စိုးလို့ပါ….”
ရွှေနန်းက ဟိုနေရာ..ဒီနေရာ နဲ့ သူနှိပ်စေချင်တဲ့ ကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပြောသည် ။ သူကလည်းရွှေနန်း စိတ်ကြိုက် နှိပ်ပေးနေသည် ။ သူ့ပေါင်ကြားက လက်နက်ကတော့ တအားထကြွနေသည် ။ ရွှေနန်းရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးတွေကို ဒီလောက် ကိုင်နေရတော့ မကြွဘဲ ဘယ်နေတော့မလဲ ။
“ ပေါင်ကိုနှိပ်ပါအုံး…”ခက်တော့ ခက်နေပြီ ။ ပေါင်တန်လုံးလုံးတွေကို နှိပ်ပေးလိုက်တော့ တခါတခါ လက်က တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို ထိမိသွားသည် ။ စိတ်ရိုင်းတွေက တအား ထကြွဖေါက်ပြန်နေပြီ ။
“ အကို….”“ ဟင်..ရွှေနန်း….”“ ရွှေနန်း လှလားဟင်….”“ လှတယ်..ရွှေနန်း…”သူ့အသံတွေ တုန်ခါနေတာကို သူကဖါသာ သတိပြုမိသည် ။
“ မျက်နှာ လှတာလား..ကိုယ်လုံး လှတာလား….”သူဖြေရမှာ နဲနဲ တုန့်နှေးသွားသလိုဘဲ…။“ နှစ်ခုလုံး လှတယ်…ရွှေနန်း….”“ ရွှေနန်း ခါးကို နှိပ်ပေးအုံး……”သေးကျဉ်တဲ့ ထွာဆိုင်ခါးလေးကို နှိပ်ပေးတော့ လက်ချောင်းတွေက တင်ပါးကြီးကို ထိမိပြန်သည် ။
“ ရွှေနန်း ဖင်တောင့်သေးရဲ့လားဟင်..”
အိုး….ရွှေနန်း မေးခွန်းကို သူဖြေရမှာ ခက်နေသည် ။
“ ကိုထက်နဲ့ ဖြစ်လိုက်လို့ ဖင်များ လျောသွားသလားလို့..သေသေချာချာ ကြည့်ပေးပါလား…”
ဘယ်နေရာလို့ မပြောလို့ ဘယ်ကို နှိပ်ပေးရမှန်း သူမသိဘူး ..။
ခါးလေးကိုဘဲ ထပ်ဖိနှိပ်ပေးလိုက်သည် ။
“ “ အောက်ကိုဆင်းအုံး….ဖင်ကို နှိပ်ပေး….”
ရွှေနန်းတော့ ဆိုးပြီ ။ ရွှေနန်း ဆိုးတာက သူ့အတွက် ကောင်းတာ ဖြစ်ပြီ ထင်သည် ။
စွင့်ကားတင်းအိနေတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို သူ ကိုင်နယ်ပေးလိုက်သည် ။ ပေါင်ကြားက ဖွားဖက်တော်က ငေါက်ကနဲ ထောင်သွားသည် ။ ပိုပြီး တင်းမာသထက် တင်းမာလာသည် ။
ရွှေနန်း တအင်းအင်းနဲ့ အသံထွက်လာသည် ။ ဘယ်လိုမှ စိတ်ထိန်းလို့ မရတော့ဘူး…။ ရွှေနန်းရဲ့တင်ပါးကြီးတွေ ကြားထဲကို သူ စမ်းလိုက်သည် ။ လက်ချောင်းတွေနဲ့ ပွတ်စမ်းသည် ။
“ ကြိုက်လား….ရွှေနန်း ဖင်တွေကို ကြိုက်လား…”
“ အင်း..ကြိုက်တယ် …. အရမ်းလှတာဘဲ…““ ဟုတ်လို့လား…..မလျောသေးဘူးလား…”“ ဟင့်အင်း…မလျှောပါဘူး….အရမ်းတောင့်တယ်…..”
တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို စိတ်တိုင်းကျ ကိုင်ညှစ်နေမိရသည် ။ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖင်တုန်းကြီးတွေ …။
ရွှေနန်းရဲ့ လက်တဖက်က သူ့ပေါင်ပေါ်ကို ရောက်လာသည် ။ တခုခုကို ရှာဖွေနေသလို တရွေ့ရွေ့နဲ့။ဖွားဖက်တော်က ပိုပို တင်းလာသည် ။ ရွှေနန်းလက်က မကြာခင် သွားလိုတဲ့နေရာကို ရောက်ရှိသွားသည် ။ ဖွားဖက်တော်ပေါ်ကို ရွှေနန်းရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေ စမ်းမိသည် ။ ထိုးထွက်နေတဲ့ သူ့ဖွားဖက်တော်ကို ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ ရွှေနန်း ကိုင်ပွတ်ကြည့်နေသည် ။
“ အကြီးကြီး ပါလား..အကိုရယ် …ဟင်း….”
“ ပြ……ရွှေနန်းကို အကို့ဟာ ပြ…..”
ရွှေနန်းသည် သူ့ဘောင်းဘီကကို ခါးပတ်ကို င်္ဆွဲချွတ်သည် ။ဇစ်ကို ဆွဲချသည် ။ ဘောင်းဘီကို ချွတ်ချသည် ။ အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲက ငေါထွက်နေတာကြီးကို ကြည့်ပြီး ခစ်ကနဲ ရယ်သည် ။ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ဘေးတဖက်တချက်ကနေ ကိုင်ပြီး ဆွဲချွတ်ချလိုက်သည် ။ဒုံးလက်နက်ကြီးက မတ်မတ်ထောင်နေသည် ။ ပစ်ရန် အဆင်သင့် တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေသည် ။ရွှေနန်းက သူ့လက်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည် ။
“ ဟီး..ပူပူနွေးနွေးကြီး…..ရွှေနန်း နမ်းပေးရမလားဟင်….”“ အင်း….”
ရွှေနန်းသည် သူ့ဖွားဖက်တော်ကြီးကို စပြီး ငုံစုတ်ပေးသည် ။ အား……ရွှေနန်း လျာလေးက သူ့ဖွားဖက်တော်ကြီးရဲ့ ထိပ်က အပေါက်လေးကို ကလိပေးလိုက်လို့ သူ့တကိုယ်လုံး တွန့်သွားရအောင်အရသာ ထူးသွားရသည် ။ ရွှေနန်းသည် ပုလွေမှုတ် တော်တော် ကျွမ်းတာကို သူသိလိုက်ရသည် ။သူခေါင်းထဲမှာ ဒီလောက် ပုလွေကောင်းပြီး အိမ်တိုင်ရာရောက် လာကုန်းပေးတဲ့ လှလည်းလှ တောင့်လဲတောင့်တဲ့ ရွှေနန်းကို ဘာလို့ သူ့ဘဲ ကိုထက်က သစ္စာဖေါက်ပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားမိလိုက်သည် ။ တဏှာစိတ် ဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့် ရှေ့ကို ဘာဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာကို မတွေးတော့ဘဲ ရွှေနန်းဘုံကို အပီဖြုတ်ဖို့ သူ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ ..။
ရွှေနန်းသည် အားရပါးရ လီးကို စုတ်ပေးနေတာ တခါတခါ ပွပ်..ပွပ် ဆိုတဲ့ အသံတွေ ထွက်ထွက်လာသည် ။ အိုး…ဟား…..အား…….ကောင်းလိုက်တာ ရွှေနန်းရယ် ….လို့ သူ့ပါးစပ်က အသံထွက် ညည်းမိရသည် ။ရွှေနန်းက လက်တဖက်နဲ့ သူ့ဖွားဖက်တော် အရင်းပိုင်းကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး စိတ်ပါလက်ပါ စုတ်ပေးနေပြီး ကျန်တဲ့ လက်တဖက်နဲ့ သူ့လက်ကို ဆွဲကိုင်ပြီး သူမ ပေါင်ကြားဆီကို ပို့ပေးသည် ။ သဘောကတော့စောက်ပတ်ကို ကိုင်..ဆိုတဲ့သဘော ..။
မို့ဖေါင်းတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ထမိန် အပေါ်ကနေ ကိုင်လိုက်သည် ။ စိတ်ရိုင်းတွေက ဝုန်းကနဲ ထသွားရပြီး “ ရွှေနန်း..အဝတ်တွေ ချွတ်လိုက်ပါလား…” လို့ ပြောလိုက်မိသည် ။ ရွှေနန်းရော သူရော စုတ်တဲ့ကိစ္စကို ရပ်လိုက်ပြီး ကိုယ်ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ အဝတ်တွေကို အကုန် ချွတ်ပစ်လိုက်ကြသည် ။ အဝတ်မပါကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားတဲ့ သူနဲ့ ရွှေနန်း တယောက်နဲ့တယောက် သေသေချာချာ ကြည့်မိကြသည် ။ရွှေနန်းက အကိုက အဝတ်မပါဘဲ အရမ်း ကြည့်ကောင်းတာဘဲ ဆက်စီ ဘဲ..လို့ ပြောလိုက်တော့ သူကလည်း ရွှေနန်းကို “ ရွှေနန်းကလည်း အရမ်းကို လှတာဘဲ….ရွှေနန်းကိုလည်း ဒို့ နမ်းလို့ရမလာဟင်…”လို့ ပြန်ပြောလိုက်တော့ ရွှေနန်းလည်း သူ့ကို အဖုတ်ယက်ချင်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပြီး ကုတင်ပေါ် ပေါင်ကား ကာ ထိုင်ပေးသည် ။ ရွှေနန်းရဲ့ စောက်ဖုတ်က ခုံးမို့ပြီး အကြီးကြီးဘဲ ..။ တဏှာအရှိန်ကြောင့်များ ပို ဖေါင်းခုံးနေလေသလား မသိဘူး ..။
အမွှေးပါးပါးလေးတွေ ရှိနေပေမယ့် နှုတ်ခမ်းသားတွေရဲ့အနီးအနား နေရာတွေမှာတော့ ရှင်းထားတာကို သတိထားမိသည် ။
ရွှေနန်း ပေါင်ဖြူဖြူတွေ ကြားထဲ ခေါင်းအပ်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကို နမ်းရှုံ့မိသည် ။ အရေတွေ စိုရွှဲနေတဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို လျာနဲ့ စယက်တဲ့အချိန် ရွှေနန်းက “ မရွံဘူးလား အကိုရယ်..အရည်တွေ ရွှဲနေတယ်…” လို့ ညည်းသလို ပြောလိုက်ပေမယ့် သူယက်တာတွေကို မျက်လုံးလေး မှေးစင်းပြီး အရသာခံနေသည် ။ “ အင်း…အင်…အင်း..အင်……” နဲ့လည်း ညည်းငြူနေသည် ။
တချိန်လုံး ဒီကောင်မလေးနဲ့ အတူတူ သွားလာနေခဲ့ရပြီး သူ့ရဲ့ အလှအပတွေကို နီးနီးကပ်ကပ် တွေ့တိတ်တခိုး ခိုးကြည့်နေခဲ့ရတာ အခုတော့ သူသည် ကိုယ်တုံးလုံး ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ကို စောက်ဖုတ်ယက်ပေးနေရတာကလည်း အိပ်မက်တခုလို မယုံနိုင်စရာတွေ ဖြစ်သွားတာပါဘဲ ။
စောက်စိလေးက ထောင်ပြူးထွက်နေသည် ။ လျာဖျားလေးနဲ့ မထိတထိ တို့ထိလိုက် ယက်လိုက် လုပ်ပေးတော့ ရွှေနန်း သဘောကျသည် ။ သူ့ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်လာသည် ။ လက်နဲ့ နို့ကြီးတလုံးကို လှမ်း ကိုင်ကြည့်လိုက်သည် ။ တင်းမာလုံးဝန်းနေတဲ့ အရသာက ကောင်းလွန်းလို့ နို့ကြီးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ဘဲ ဆုပ်နယ်နေမိသလို နို့သီးခေါင်းမာမာလေးကိုလည်း လက်ချောင်းတွေက ပွတ်သပ်မိရသည် ။
စောက်ဖုတ်ကို စိတ်တိုင်းကျ စုတ်ယက်ပေးလိုက်သည် ။ ရွှေနန်းလည်း တော်တော်ကြာလာတော့ သူ့ခေါင်းကို တွန်းလိုက်ပြီး….“ ရွှေနန်း..လိုချင်ပြီကွာ…..လုပ်ပါတော့…” လို့ ဖီလင်တက်နေတဲ့ အသံလေးနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။
ရွှေနန်းရဲ့ ဖေါင်းကြွမို့မောက်တဲ့ စောက်ဖုတ်ကနေ မျက်နှာကို ခွာလိုက်သည် ။သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံသည် ဘာဂျာ အပြင်းအထန် ကိုင်ထားလို့ ထူအမ်းနေသည် ။ ရွှေနန်းကိုယ်ပေါ်ကို သူတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ဒူးတွေက အလိုလို ရွှေနန်းရဲ့ ခြေထောက်တွေကို ဘေးကို တွန်းပို့လိုက်မိပြီး သူ့ကိုယ်လုံးသည် ရွှေနန်းရဲ့ ပေါင်ကြားထဲမှာ ရောက်ရှိနေရာယူပြီး ဖြစ်သွားသည် ။ တနည်းဆိုရသော် ရွှေနန်းသည် ပေါင်ဖြဲကားရက် အနေအထား နဲ့ ဖြစ်နေပြီ ။
ရွှေနန်းသည် သူက သူ့ဖွားဖက်တော်ရဲ့ အရင်းပိုင်းကနေ ဆုပ်ကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်း ကို ပွတ်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဆတ်ကနဲ တုန်သွားပြီး..“ အို..ဟာဟာ…..အင်ဟင်…” လို့ညည်းလိုက်သည် ။ ကွေးညွှတ်လှပတဲ့ ရွှေနန်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေ ပွင့်ဟသွားသည် ။ ရွှေနန်းရဲ့စောက်ဖုတ်က စိုပေနေတဲ့ အရည်တွေနဲ့ သူ့ဖွားဖက်တော်ရဲ့ ခေါင်းပိုင်း ဒစ်လုံးကြီး စိုလူးသွားပြီးတဲ့နောက်သူသည် ဖွားဖက်တော်ကို စောက်ဖုတ်အပေါက်ထဲ ဖိသွင်းလိုက်သည် ။
“ အို့…အင့်အင့်…အမလေး …”
အိုအိနူးညံ့တဲ့အထဲ မြုပ်ဝင်သွားတဲ့ အထိအတွေ့က ထူးကဲလှသည် ။
ဒစ်လုံးကြီး စောက်ခေါင်းထဲ မြုပ်ဝင်သွားတော့ ရွှေနန်းရဲ့ ညည်းသံလေး ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်လာပြီး သူ့လက်မောင်းတွေကို သူမလက်တွေနဲ့ ဖမ်းဆုပ်ညှစ်လိုက်သည် ။
အရည်တွေက တအား ရွှဲစိုနေတာကြောင့် စိုအိနွေးထွေးတဲ့ စောက်ခေါင်းထဲကို ဒစ်လုံးကြီး မြုပ်ဝင်သွားသည် ။ ရွှေနန်းသည် မျက်လုံးလေး မှိတ်ပြီး ခေါင်းကိုမော့ထားနေသည် ။ သူ အဆင်ပြေ
နေတာ တွေ့ရတော့ သူ့ဖွားဖက်တော်ကို ဆက်ထိုးသွင်းသည် ။ အိစက်ချောနေပေမယ့် တင်းကြပ်နေတဲ့ အတွင်းသားနုနုတွေကို ပွတ်တိုက်ရင်း တထစ်ထစ်နဲ့ အတွင်းကို
တိုးဝင်သွားတဲ့သူ့ဖွားဖက်တော် ရလိုက်တဲ့ထူးခြားလှတဲ့ အရသာကြောင့်သူ့စိတ်တွေ ပြင်းထန် သထက် ပြင်းဖန်လာရသည် ။ နောက်ကို နဲနဲပြန်ဆုတ်ပြီး ထပ်ဖိသွင်းထည့်လိုက်မိပြန်သည် ။
ဒီတခါတော့ ဖွားဖက်တော် ဒုတ် အဆုံးထိ ရောက်သွားအောင် သွင်းလိုက်သည် ။
“ အကို….ရွှေနန်းကို ကြိုက်လားဟင် ….”
“ ကြိုက်တယ်..ရွှေနန်း …”
“ ရွှေနန်းလည်း အကို့ကို ကြိုက်တယ် …အကို အားမနာနဲ့နော်..ရွှေနန်းကို စိတ်ကြိုက်သာ လုပ် ..”
ရွှေနန်းထဲကို တချက်ချင်း သူဆောင့်ထည့်ပေးသည် ။ ရွှေနန်းလည်း တအင်းအင်းနဲ့ သူမတင်ပါးကြီးတွေကို အောက်မှ ကော့ပေးသည် ။ တင်ပါးကြီးတွေကို နှဲ့လိုက် ၀ိုက်လိုက် လုပ်ပေးသည် ။
ကိုထက်နဲ့ အတွေ့အကြုံရပြီးမို့ ကျွမ်းနေတာဘဲ လို့ သူသိလိုက်သည် ။
“ အင်း..အင်း….ကောင်းတယ်အကို….လုပ်..လုပ် …”
အရည်တွေ အရမ်းလိုက်လွန်းတာကြောင့် ဆောင့်ထည့်တဲ့အချိန် ဖွတ်ဖွတ် ဖပ်ဖပ် အသံဘလံတွေ ထွက်ပေါ်လာသည် ။ ရွှေနန်းက မြန်စေချင်လာတာကြောင့် မြန်မြန် သွက်သွက်
ထိုးဆောင့်ပေးလိုက်သည် ။ တချက်တချက် စောက်ဖုတ်နဲ့ လိင်တန် သွတ်သွင်း ပွတ်တိုက်တဲ့နေရာက လေအန်သံ ဘွပ် ဘွတ် ဆိုတဲ့ အသံတွေ ထွက်လာတော့ အရှိန်ကောင်းကောင်း
လုပ်နေဆဲ ရွှေနန်းရဲ့ ရယ်သံလေး တခိခိကို ကြားရသည် ။
အောက်က ရွှေနန်းက တအားပင့်တအားကော့ပေးနေတာတွေ ပိုမြန်လာသလို ရွှေနန်း အော်ညည်းသံတွေ ကို ကျယ်လာတော့ ရွှေနန်းတအားအရှိန်တက်နေပြီဆိုတာသူသိလာတော့ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ထည့်ပေးလိုက်သည် .
ရွှေနန်း ခေါင်းကို ဘယ်ညာ ရမ်းခါပြီး တွန့်လိန်ကာ လမ်းဆုံး ပြီးခြင်းကို ရောက်ရှိသွားသည် ။
“ အကိုရယ်…ကောင်းလိုက်တာ..အကိုရော ကောင်းလားဟင်…..”“ အင်း…အရမ်းကောင်းတယ် …. ”
တော်တော်လေးကြာအောင် ကုတင်ပေါ်မှာ ယှဉ်တွဲကာ နားနေလိုက်ကြပြီး ရွှေနန်းကို အိမ်ပြန်ကြမလားလို့ သူ မေးလိုက်တော့ ရွှေနန်းက အကိုနဲ့ နေရတာ မဝသေးဘူးကွာ.. …ရွှေနန်း မပြန်ချင်သေးဘူး….” လို့ ပြောလို့ နောက်တကြိမ် နောက်တကြောင်း ထပ်ဆွဲပေးရအုံးမယ် ဆိုတာ သဘောပေါက်လိုက်သည် ။“ မမာမတောင်ဘဲ ဒီအတိုင်းနေတာတောင် အရမ်းတုတ်တာဘဲ…ရှည်လည်း ရှည်တယ်…”ရွှေနန်းက သူ့ဖွားဖက်တော်ကို ကျကျနန ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်ကာ ဆပ်ပြာရည်နဲ့ ဆေးကြောပေးရင်း ပြောလိုက်ပါသည် ။
ရွှေနန်း လက်ကလေးနဲ့ ကိုင်တွယ်တဲ့အခါ သူ့ဖွားဖက်တော်သည် ငေါက်ကနဲ ထထောင်လာသည် ။ရွှေနန်းက သဘောကျစွာနဲ့ ရယ်မောရင်း ဖွားဖက်တော်ကို လက်နဲ့ ကွင်းတိုက်သလို ရှေ့နဲ့နောက်ပွတ်တိုက်ပေးသည် ။ ဖွားဖက်တော်လည်း ရုတ်ချည်း ပြန်လည်ရှည်ထွက် ကြီးထွားလာရပြန်သည် ။
ဒုတိယအချီမှာ တော်တော်ကြာသည် ။ ရွှေနန်းကို ပုံစံအမျိုးမျိုး ပြောင်းကာ အကောင်းဆုံး ဆွဲပေးလိုက်သည် ။ ဒီ ဒုတိယအချီမှာ သူသုံးချီ တောင် ပြီးတယ် လို့ ရွှေနန်းက ပြောတယ် ။ရွှေနန်းရဲ့ ဖင်ကားကားကြီးတွေကို ဖင်ထောင်ကုန်းတဲ့ ပုံစံနဲ့ လုပ်ရရင် ကောင်းမှာဘဲ လို့ သူ စိတ်ကူးရလို့ “ လေးဘက်ကုန်းပေးမလား ရွှေနန်း..” လို့ သူ မေးလိုက်သည် ။ရွှေနန်းက ကြည်ဖြူစွာဘဲ သူ လိုလားသလို ဖင်ထောင်ကုန်းပေးသည် ။ရွှေနန်းရဲ့ ဖင်ကြီးတွေ အောက်ဖက်က စောက်ဖုတ်ကြီးက ပြူးပြူးကြီး ထွက်နေသည် ။ ဒီလို လိုးရတာကို သူ သဘောကျတာက စောက်ဖုတ်ထဲ သူ့ဒုတ် ဝင်ထွက်တာကို ကြည့်လို့ရလို့.. ။ ဖင်ပေါက်လေးကိုလည်း ကြည့်ပြီး သူ ကလိချင်လာသည် ။ ရွှေနန်းဖင်ကို တောင်းလိုးဖို့လည်း သူ စိတ်ထဲမှာ ကြံစည်ထားလိုက်သည် ။
စအိုပေါက်လေးကို သူ့လက်မနဲ့ ဖိဖိချေပွတ်ရင်း အကျင့်လုပ်ပေးလိုက်သည် ။ တချိန်မှာ သူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးကို ထိုးနှစ်မည် ။
ဒုတိယအချီက စိမ်ပြေနပြေ လိုးတဲ့ ပွဲဘဲ ..။ သူရော ရွှေနန်းရော ချွေးတွေ တုတ်တုတ်ရွှဲကြရသည် ။
ရွှေနန်းကို အိမ်ပြန်ခေါ်သွားလိုက်သည် ။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်လည်း သမီးပြန်ရောက်လာလို့ အရမ်းဝမ်းသာသွားတယ် ။ သူ့ကီု ကျေးဇူးတင်ကြောင်း လာပြောတယ် ။ သူပြန်ခါနီးမှာ ရွှေနန်းကလဲ“ အကို့ကို ရွှေနန်း ကျေးဇူးတင်တယ် ..” လို့ လာပြောတယ် ။
ဘာအတွက် ကျေးဇူးတင်တာလဲ…။ရွှေနန်းရဲ့ ပြီတီတီ ရီဝေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်က သူ့ကို နှစ်ချီကောင်း ဖြုတ်ပေးတာနဲ့ ဘာဂျာ အကြာကြီး ကိုင်ပေးတာကြောင့်..ဆိုတဲ့ သဘော ..။
ရွှေနန်းတို့အိမ်က ပြန်လာပြီး ရေအမြန်ချိုး အဝတ်အစားလဲရတယ် ။ အဝတ်အစား လဲနေတုံးဘဲ ဖုန်းလာတယ် ။ ရွှေရေးလွင်လွင် ခေါ်တာ ။ ရွှေရေးက “ မလာသေးဘူးလား….” လို့ ခပ်မာမာလေသံနဲ့ ပြောလိုက်တာ ခံရတယ် ။
ရွှေနှစ်ရွှေ ကြားမှာ ပြေးလွှားနေရသည် ။ ရွှေနန်းကို ခုလေးတင် နှစ်ချီကောင်း ဖြုတ်ပေးခဲ့ပြီး မကြာခင်မှာ ရွှေရေးကို ဖြုတ်ပေးရဦးမည် ။
ရွှေရေး သည် သူ့ကို သူ ဝယ်ထားတဲ့ ကြို့ကုန်းက တိုက်ခန်းကို ခေါ်သွားပါတယ် ။ တိုက်ခန်း အသစ်ကို ပြချင်လို့ ဆိုပြီး ။ တိုက်ခန်းအသစ်ကိုလည်းရောက်ရော အခန်းထဲကို ခြေတလှမ်း စဝင်လိုက်တာနဲ့ရွှေရေးနဲ့ သူ အငမ်းမရ ဘဲ တယောက်နဲ့ တယောက် ဖက်တွယ်ပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း ဖိကပ်စုတ်မိကြတယ်။
တိုက်ခန်း အသစ်ချပ်ခွတ်ဆိုတော့ ဘာခုံဘာကုလားထိုင် ဘာဆိုဘာမှ မရှိဘူး ။အုတ်နံရံကို မှီပြီး ရေအရေးနှုတ်ခမ်းထူထူတွေကို တအား စုတ်ရင်း ရွှေရေး နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုလည်း ဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီပေါ်ကနေဘဲ ဆုပ်ညှစ်လိုက်မိတယ် .။ ရွှေရေးက မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး “ ဟိတ်အကျ င်္ီတွေ ကျေကုန်မယ်ကွာ…ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ တဏှာထန်နေသလား…” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။
တဏှာ မထန်ဘဲ ခပ်အေးအေး နေပြန်ရင်လဲ ရွှေရေးက “ လူကြီးသမီးနဲ့များ ခိုးစားနေကြသလား..ရွှေရေးကိုတောင် စိတ်မလာတော့ဘူး မဟုတ်လား…” လို့ ပြောမှာ..။ “ ကဲ ထင်အောင်ကျော်..လိုးချင်ရင်လဲအဝတ်အစားတွေ ချွတ်..ဘာလဲ ..ချွတ်ပေးရအုံးမှာလား….” လို့ ပြောလိုက်လို့ ခပ်သွက်သွက်ဘဲ ကိုယ်ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ အဝတ်တွေကို ချွတ်ပစ်လိုက်ရတယ် ။ ဖွားဖက်တော် လိင်တန်ချောင်းကတော့ ရွှေရေးနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ အခန်းထဲ ရောက်ပြီဟေ့ ဆိုတာနဲ့ မတ်မတ်ထောင်နေပြီလေ ။လိင်တန်ကြီး တောင်မတ်လျက် ရှိနေတဲ့ သူ့ကို ရွှေရေးက သဘောကျစွာနဲ့ ကြည့်ပြီး “ ထင်အောင်ကျော်..ယူကတော့ ဒို့ကို လိုးဖို့ အမြဲ အဆင်သင့် အဲဗားရယ်ဒီ ဖြစ်နေတဲ့ အလိုးသမားချစ်သူဘဲပေါ့နော်..” လို့ ပြောလိုက်ရင်း ဒူးထောက် ထိုင်ချလိုက်ပါတယ် ။ လိင်တန်ချောင်းက ဘာလာတော့မည် ဆိုတာကို ကြိုသိနေသလား မသိပါဘူး ။ ရွှေရေးရဲ့ မျက်နှာနဲ့ ကပ်ကပ်လေး ဖြစ်နေတဲ့အချိန် ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ လှုပ်သွားတယ် ။
ရွှေရေးက ဒစ်လုံးကြီးကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ဖပ်ကနဲ ပုတ်လိုက်ပြီး..“ နင့်ကို ငါလွမ်းနေတယ် သိလား..” လို့ ခပ်တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ လိင်တန် အရင်းပိုင်းကနေ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ် ။ ပုလွေကိုင်ပေးတော့မှာမို့ လိင်တန်ချောင်းက ပိုထွားပိုကြီး ပိုရှည်လာသလိုဘဲ ။ ကာမ အရသာထူးတွေ ရတော့မယ် ဆိုတာ သိလိုက်တဲ့ စိတ်တွေက အဆုံးစွန် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထကြွလာရတာကြောင့်ပါ ..။
အရင်ဆုံး လိင်တန်ထိပ်ဖျားကို ပြွတ်ကနဲ နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ နမ်းလိုက်တဲ့ ရွှေရေးဟာ တကယ်ဘဲ သည်လိင်ချောင်းကြီးကို သတိရ တမ်းတ လွမ်းနေတဲ့ ပုံပါ ။ လိင်တန်ကြီးကလည်း အကြောတွေ ထင်းထောင်ထနေတယ် ။ ထိပ်ပေါက်ကလည်း အရည်လေးတွေ ယိုစီး ကျနေတယ် ။ ဒီ အရည်လေးတွေကို ရွှေရေးက လျာဖျားလေးနဲ့ ယက်လိုက်တယ် ။ “ ယူ့လီးကြီးက အရင်ထက် ပိုကြီးလာသလိုဘဲကွာ….”းတွေ
တကယ်တော့ ရွှေရေး စုတ်ပေးတာကို ခံချင်လှပြီ ။ ရွှေရေးက တို့ထိ တို့ထိလေးတွေ လုပ်နေသည် ။ဂွေးစိနှစ်လုံးကိုလည်း ခပ်ဖွဖွလေး ပွတ်နေပြန်သည် ။ သည်လို အချိန်ဆွဲပြီး မထိတထိ ကစားနေလေလေစိတ်တွေက တအားကို ထကြွလာလေလေ ပါ ။
ရွှေရေးက အကျ င်္ီကို ချွတ်လိုက်တယ် ။ ဘရာစီယာ ဖြူဖြူလေးက နို့ကြီးနှစ်လုံးကို မနိုင်မနင်း ချုပ်ထားနေသည် ။ နို့ကြီးတွေက ဘရာစီယာရဲ့ ချုပ်နှောင်မှုအောက်က အတင်းကြီး ရုန်းကန်ထွက်ချင်နေကြသလိုဘဲ ။ ဘရာစီယာ ချိတ်လေးကို ရွှေရေး လက်နောက်ပစ်ပြီး ဖြုတ်ခွာပစ်လိုက်တယ် ။ကော့ချွန်ဖြိုးမောက်တဲ့ နို့ကြီးတွေက အချုပ်နှောင်အောက်က လွတ်မြောက်လို့ ဝင့်ဝင့်ကြွားကြွားနဲ့ခေါင်းမော့နေကြတယ် ။ ဒူးထောက် ထိုင်ချပြီး အငမ်းမရဘဲ နို့သီးနီညိုညိုလေးတဖက်ကို စို့မိရတယ်။
“ ဟေ့..နေအုံးကွာ..လီးကို အရင် စုတ်ပေးအုံးမယ် …”
ရွှေရေးက သူ့ကို မတ်တပ် ပြန်ရပ်ခိုင်းတယ် ။ ရွှေရေးသည် ပုလွေပညာစွမ်းတွေ ပြပါတော့တယ် ။ရွှေရေးရဲ့ လျာလေးက ဒစ်လုံးကြားကို ယက်ပေးနေတယ် . ထိပ်ပိုင်းကို အရင် ကလိနေတယ် ။ သူအရမ်း ထိလို့ရွှေရေး ခေါင်းလေးကို ယောင်ယမ်းပြီး ကိုင်မိရတယ် ။နုတ်ကလည်း အသံတွေ ညည်းမိရတယ် ။ လိင်တန် အရင်းပိုင်းအထိ ရောက်အောင် ငုံငုံဆွဲပြီး စုတ်ပေးနေတယ် ။ လိင်တန် တချောင်းလုံး ရွှေရေး ပါးစပ်ထဲ ရောက်နေတယ် ။ ရွှေရေးရဲ့ အစုတ်မှာဘယ်လောက်ထိ အရသာ ထူးကဲ နစ်မျောနေမိသလဲ မသိဘူး ။ ရွှေရေး အစုတ်ရပ် လိင်တန်ကို ပါးစပ်ကနေ ချွတ်ဖယ်လိုက်တော့မှ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်မိတယ် ။ ရွှေရေးက “ တော်ပြီနော်…လိုးကြစို့..” လို့တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်လို့ ဒီ သံမံတလင်းကြမ်းမှာဘဲ ဆွဲကြရမယ် လို့ ထင်မိလိုက်တယ် ။
ရွှေရေးက..“ အို..ဒီမှာ မဖြစ်ပါဘူး..အိပ်ခန်းထဲ သွားရအောင်..” လို့ ပြောပြီးသူ့လက်ကို ဆွဲကာ အိပ်ခန်းထဲကို ခေါ်သွားပါတယ် ။
အိပ်ခန်းထဲ ရောက်တော့ ဖျာတချပ် နဲ့ မွေ့ရာလိပ်တလိပ် ရှိနေတာကို တွေ့ရတယ် ။ ရွှေရေးက ထမိန်ကို ချွတ်လိုက်တယ် ။ အတါင်းခံ ပင်တီ မပါလို့ ထမိန် ချွတ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်တုံးလုံး ဖြစ်သွားတာ ဝင်းဝင်းဖြူဖြူ ဖင်တုံးကြီးတွေကို တွေ့လိုက်ရတော့ အခုဘဲ အစုတ်ကောင်းကောင်း ခံထားရလို့တအားလိုးချင်နေတဲ့ လီးကလည်း တဆတ်ဆတ်ခါနေပြီ ။
ရွှေရေးနဲ့ လှေကြီးထိုးဘဲ အမြန် ဆွဲလိုက်ကြတယ် ။ ရွှေရေးကလည်း ထန် သူကလည်း ထန် ဆွဲလိုက်ကြတာ တဖေါင်းဖေါင်းဘဲ ။ အရေတွေကလည်း လိုက်တော့ တဖွပ်ဖွပ် တဘွပ်ဘွပ် အသံတွေကို ဆူညံသွားရတာ..။ ရွှေရေးကလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် မို့ တအား အော်တယ် ။ ညည်းတယ် ။ပြီးခါနီး အရှိန်နအား တက်လာတဲ့အခါ ရွှေရေးလည်း….“ လိုး..လိုး..တအားလိုး…ဘာလဲ..အားမရှိဘူးလား..လိုးစမ်းပါ..ဆောင့်ဆောင့်..တအားဆောင့်ထည့်….” လို့ အော်ပါတယ် ။ ငယ်ငယ်က ခိုးဖတ်ခဲ့ရတဲ့အပြာစာအုပ်တွေထဲကလိုဘဲ လို့ အမှတ်ရလိုက်တယ် ။ ရွှေရေး ကောင်းစေဖို့ စိတ်ကျေနပ်စေဖို့ သူတောင်းဆိုသလို ပြင်းပြင်းနဲ့ မြန်မြန် ဆောင့်လိုးပေးလိုက်ပါတယ် ။
ရွှေရေးလည်း ဖင်ကြီးတွေ ကော့ပေးလိုက် စကောဝိုင်း မွှေ့ရမ်းပေးလိုက် လုပ်နေတယ် ။ နှစ်ယောက်စလုံး ချွေးတွေ စိုစိုရွှဲနေကြပြီ ..။ ဆက်တိုက် ကြုံးလိုးနေတာ ..။ ရွှေရေး စောက်ပတ်ကလည်း သူ့လီးကို ညှစ်ယူဆွဲနေသလို အရသာ က ထိမိ ကောင်းလှတယ် ။
“ အမလေး..ကောင်းကောင်း..ကောင်းနေပြီ..အို..ဆောင့်ဆောင့်…အာ..အား…အား….အား…အိုး….ပြီးပြီ….အား….ကောင်း..ကောင်းလိုက်တာ….ဆောင့်…ဆောင့် မရပ်လိုက်နဲ့..အသေဆောင့်……….”
ရွှေရေး တတွတ်တွတ် ညည်းအော်ရင်း သူ့ကို တအား ဖက်ညှစ်ပြီး “ ပြီး ” သွားပါတယ် ။ သူလည်းသုတ်ရည်တွေ တစစ်စစ် နဲ့ အများကြီး ပန်းထုတ်လိုက်ပြီး ရွှေရေးနဲ့ မရှေးမနှောင်း ဆိုသလိုဘဲ ပြီးဆုံးခြင်းကို ရောက်ရှိသွားရပါတော့တယ် ။ ရွှေရေးက သူ့လီးကို အဖုတ်ထဲက ထုတ်ခွင့်မပြုဘူး ။ စောက်ခေါင်းထဲမှာ ဆက် ထား စိမ်ထားခိုင်းတယ် ။
“ နင် တကယ်လိုးနိုင်တဲ့ကောင်ဘဲ…ထင်အောင်ကျော် …ငါ..ငါ ကြိုက်တယ်….” လို့ ရွှေရေး မျက်လုံးမဖွင့်ဘဲ ပြောလိုက်တယ် ။“ နင့်စောက်ပတ်ကလည်း တအား လိုးလို့ကောင်းတာဘဲ ရွှေရေးရယ် ..ငါ့လီးကို ရစ်ပတ်ဆွဲ.ူနေသလိုဘဲ….မျှော့်ပါတဲ့ စောက်ပတ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်မယ် …” လို့ သူကလည်းရွှေရေးကို ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် ။
.“ အဲဒါ အလိုလို ကောင်းတာ မဟုတ်ဘူး…ငါ ညှစ်ညှစ်ပေးလို့ ဟဲ့..နင်ကြိုက်ရင် ငါ အမြဲ အဲလို
ညှစ်ပေးမယ် …နင် ကောင်းတယ် ဆိုလို့ ငါ ဝမ်းသာပါတယ် …” လို့ ရွှေရေးက ပြောပါတယ် ။
အနည်းဆုံးတော့ နှစ်ချီလောက် ရွှေရေးနဲ့ ဆွဲဖြစ်မှာပါဘဲ ..။
ရွှေရေးရဲ့ စောက်ဖုတ် ကြွက်သားတွေ ညှစ်ပေးခြင်းက သူ့ကို အရသာ အရမ်းထူးကဲစေသည် ။ထိုးဆောင့်လိုက်တိုင်း ကြပ်တည်းစီးပိုင်တဲ့ အရသာကို ရရှိသည် ။ ကြာကြာ ဆက်မလိုးနိုင်ဘဲ သုတ်တွေ ပန်းထွက်ခါ ပြီးခြင်းကို ရောက်သွားချင်သည် ။
ရွှေရေးက ကုတင်ပေါ်က ဆင်းသည် ။
“ ငါ ရေချိုးလိုက်အုံးမယ်…”“ ငါလည်း နင်နဲ့ အတူတူ ရေချိုးချင်တယ်…”“ အို..ထင်အောင်ကျော်..အေးဆေး နေစမ်းပါဟာ…ငါ အေးဆေး ချိုးပါရစေ…”
ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ရေချိုးခန်းဆီကို ရွှေရေး လျှောက်သွားတာကို ကုတင်ပေါ်က ကြည့်နေမိသည် ။ရွှေရေးရဲ့ ဖင်တုံးကြီးတွေက တုန်ခါ လှုပ်နေတာကို တွေ့ရတာ သူ့ဒုတ်တောင် ပြန်မာသွားသလိုဘဲ..။
ရွှေရေး နောက်ကို သူ လိုက်သွားလိုက်သည် ။
ရေချိုးခန်းက ပိတ်မထားဘူး ။ သူဝင်သွားတော့ ရွှေရေးသည် ရေပန်းအောက်မှာ သူ့ကိုယ်လုံးတွေကိုသူ့ဖါသာ ပွတ်တိုက်ရင်း ရေချိုးနေသည် ။
“ ဟိတ်..ဘာလို့ လာတာလဲ..”“ ရွှေရေးနဲ့ အတူတူ ချိုးချင်လို့..”
“ နင် သိပ်ကဲတာဘဲကွာ….”
ရွှေရေးအနား ပူးကပ်ပြီး ရွှေရေး ဖင်တုံးတွေကို အားရပါးရ ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည် ။
“ အိုး ..ဟေး….”
နောက်တနေ့ မနက် ၁ဝနာရီ ကျော်ကျော် ..။
“ မမတို့က ထင်အောင်ကျော့်ကို ဘယ်လောက် သဘောကျတယ်..သံယောဇဉ်ဖြစ်ကြတယ် ဆိုတာထင်အောင်ကျော်လည်း သိမှာပါ..ဒါပေမယ့်လေ..မမတို့မိသားစု အတွက်ထက် ထင်အောင်ကျော်ရဲ့ ရှေ့ တိုးတက်ရေးက အရေးကြီးသေးတယ်လေ..မမတို့ မိသားစု နဲ့ နေတာထက် အရေးကြီးတဲ့တခြား တာဝန်တခုခုကို လုပ်ရင် မင်းအတွက် ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ မင်းတို့ “ အဘ ”က မမကို ပြောပြတယ်..”
ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က ကားမောင်းနေတဲ့ သူ့ကို ပြောပါတယ် ။
ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က သူ့ကို ကားမောင်းခိုင်းလို့ ဒီနေ့ မနက် သူတို့အိမ်ကို ရောက်ရောက်ချင်း လိုက်မောင်းပေးရပါတယ် ။ ရွှေနန်းဘုံကတော့ မနိုးသေးပါဘူး ။ အိပ်နေတုံး ..။ သူ့နေရာမှာ အစားထိုးမယ့် အရာရှိလေးတယောက် ရောက်နေပြီ ။ သူက စစ်ရုံးချုပ်ကို ပြောင်းရမယ် ။
ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က မြို့သစ်မှာ ဆောက်နေတဲ့ သူတို့ တိုက်ကို လိုက်ပို့ခိုင်းတာ ။တိုက်က တော်တော်ပြီးနေပြီ ။ တိုက်ကို ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်နဲ့ အတူတူ လိုက်ကြည့်တဲ့အချိန် ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က “ အေမီကလည်း မင်းကိုအကူအညီတခု တောင်းစရာ ရှိလို့တဲ့…အေမီ့ဆီကို သွားလိုက်ပါအုံး..ထင်အောင်ကျော်…” လို့ ရုတ်တရက် ပြောလိုက်တယ် ။“ ဟုတ်ကဲ့..မမ ” လို့ သူဖြေလိုက်တယ် ။
ဒေါ်ရွှဖြူသန့်က ဒီတိုက်က အဘ အနားယူပြီးတဲ့အချိန် နေဖို့လို့ ပြောပြပြီး ရွှေနန်းဘုံအတွက်လည်းသူတို့မိဘတွေ ပေးခဲ့တဲ့ မြေကွက်တကွက် ရှိသေးတယ် ..ရွှေနန်း အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါ နေဖို့ အိမ်ဆောက်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတယ် လို့ ပြောပြတယ် . .။ ဒီအချိန်မှာဘဲ တိုက်ရှေ့ကို ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင်ရဲ့ကား ထိုးဆိုက်လာတယ် ။ ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင်ကဘဲ ဒီတိုက်ကို အစစ တာဝန်ယူပြီး ဆောက်နေတာပါ ။
ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင်က တိုက်ပြီးစီးတဲ့ အခြေအနေတွေကို ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ကို ရှင်းပြပြီး “ အထူးဆိုင် ” ကနေ ပစ္စည်းတွေ သူထုတ်ပေးမယ့်အကြောင်းတွေ ပြောပြတယ် ။ အထူးဆိုင် ဆိုတာက လူကြီးမိသားစုတွေဘဲ ဝယ်နိုင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဆိုင်ပါ ။
ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်လည်း အခုလထဲ မင်္ဂလာဆောင်တွေ တက်ရောက်ဖို့တွေ တော်တော်များများ ရှိနေတာကိုသတိရသွားပြီး မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့တွေ ဝယ်ရမယ် …ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင်ကို အထူးဆိုင်ကို သွားရအောင်လား..လို့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။“ ဟုတ်ကဲ့..မမ…..ကျနော် လိုက်ပို့ပါမယ် …” လို့ ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင်က ပြောလိုက်တယ် ။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က “ ဒါဆို..မမ..ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင်ရဲ့ ကားနဲ့ လိုက်သွားလိုက်မယ်…ထင်အောင်ကျော်ရေ..အေမီ့ဆီကို အခုဘဲ သွားလိုက်ပါလား..ကွယ်…” လို့ သူ့ကို ပြောလိုက်ပါတယ် ။သူဖြေရတာက “ ဟုတ်ကဲ့…မမ…” ပါဘဲ ။
ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ အိမ်ကို သူရောက်သွားတယ် ။ သူ့အကူအညီကို လိုနေတယ် ဆိုကထဲက ဘာအကူအညီလည်း ဆိုတာ သူသိလိုက်ပြီးသား ။
အိမ်ဖေါ်မလေး တယောက်က ခြံတံခါး လာဖွင့်ပေးတယ် ။
“ ဒေါ်အေမီသွင် …ရှိလား …”“ ရှိပါတယ်…ရှင့်…”
တိုက်ကြီးတခုလုံး တိတ်ဆိတ်နေတယ် ။
သူ ဧည့်ခန်းကြီးထဲ လျှောက်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်အေမီသွင် အပေါ်ထပ် လှေခါးကနေ ဆင်းလာတယ် ။“ အမလေး..ပေါ်တော်မူကြီး….မမ အပေါ် စိမ်းကားနေတာပေါ့လေ….”
ဒေါ်အေမီသွင်သည် ခပ်ပါးပါး ပျော့ပျော့ပိတ်သားနဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ အကျ င်္ီပွပွလေးကို ဝတ်ထားတာ အတွင်းမှာ ဘရာစီယာ မပါတာကြောင့် ရင်စိုင်ကြီး နှစ်လုံးကို ၀ိုးတိုး ၀ါးတား တွေ့နေရတယ် ။ လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း ဒီရင်သားတွေက တုန်တုန်သွားနေတယ် ။
“ မမလည်း တယောက်ထဲ အရမ်းပျင်းတာဘဲ…မမ ယောက်ျားက နိုင်ငံခြား ထွက်သွားပြန်ပြီ …. မမလည်းမင်းကို အကူအညီတောင်းမလို့ …”“ ဟုတ်ကဲ့..မမ…ကျနော် ဘာလုပ်ပေးရမလဲဟင်…”
မခို့တရို့ နဲ့ စူးစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ ဒေါ်အေမီသွင်က သူ့နားနားကို နှုတ်ခမ်းကို ကပ်ပြီး တိုးတိုးလေး“ မင်း ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ဆိုတာ မင်း သိပါတယ်ကွယ်…မမ တအား လိုချင်နေတယ် ..ဟိုတခါကလိုဘဲ..ပေါ့….” လို့ လေသံလေးနဲ့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။
ဖြူဖွေးတောင့်တင်းတဲ့ မိန်းမချောကြီးကို အလိုဖြည့်ပေးဖို့ တာဝန်ကျရောက်လာပြီ ။အလှည့်ကျရင် မနွဲ့စတမ်း ..။
“ ဟုတ်ကဲ့မမ…မမ လိုအပ်နေတာတွေ ကျနော် အကုန် လုပ်ပေးမယ်…မမ…” လို့ သူပြောလိုက်တယ် ။ဒေါ်အေမီသွင်က သူ့လက်ကို ဆွဲပြီး အပေါ်ထပ်ကို တက်သည် ။ မကြာခင် အလုပ်တွေ များတော့မှာ သိနေတဲ့ လက်နက်ကြီးက မတ်မတ်ထောင်လာသည် ။ ပစ်ရန် အသင့် အနေအထားပေါ့ ..။
အိပ်ခန်းထဲကို ဝင်လိုက်တဲ့အခါ ဒေါ်အေမီသွင်က သူ့ခါးကို လာဖက်တယ် ။ “ မင်းကို ဒို့က လွမ်းနေတာ သိလား….ဟင်း…ဘာလို့ ဒို့ဆီ မလာတာလဲ..ဖုန်းလေးတောင် မဆက်ဘူး”ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ ထိုင်လိုက်ကြသည် ။ ရွှေရေး..ရွှေနန်းတို့ကို အိပ်ရတာနဲ့မတူတာက ရွှေရေး..ရွှေနန်းတို့က အပျို..အိမ်ထောင် မရှိသူတွေ..ဒီစော်ကြီးကတော့ လင်ရှိ မိန်းမတယောက် ။ သူ့လင်ကြီးက အချိန်မရွေး ပြန်ရောက်ချလာနိုင်သည် ။
လိုလားတောင့်တနေတဲ့သူကို လုပ်ရတာတော့ ကောင်းသည် ။ ဒေါ်အေမီသွင်က ကုတင်ဘေးနားကဘီဒိုလေးပေါ်က အကောင်းစား ဝစ်စကီပုလင်းနဲ့ ဖန်ခွက်တွေဆီကို လျှောက်သွားလိုက်ပြီး ဖန်ခွက်နှစ်ခွက်ထဲကို ဝစ်စကီ လောင်းထည့်သည် ။ သူ့ဆီကို ပြန်လျှောက်လာပြီး ဖန်ခွက်တခွက်ကို ကမ်းပေးသည် ။ ဝစ်စကီ သောက်ရင်း ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ လက်တဖက်က သူ့ပေါင်ပေါ်ကို ရောက်လာသည် ။
“ မင်း ရွှေဖြူ့ကိုကော နဲနဲ စမ်းမကြည့်ဘူးလား…”“ မမ က ကျနော် အေးအေးဆေးဆေး နေနေတာကို မကြည့်ချင်ဘူးထင်တယ်…ဟင်းဟင်း..”“ ရွှေဖြူလဲ မမလိုဘဲ အဖိုးကြီး ယူထားတာ ..မမသိတာပေါ့ကွယ်..သူလည်း ဆာနေတယ် ဆိုတာ..”
ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ လက်က သူ့ပေါင်အလည်က ဖွားဖက်တော် လက်နက်ဆီကို ရောက်နေပြီ ။ ဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ ညင်ညင်သာသာလေး ပွတ်နေသည် ။ လက်နက်ကလည်း တအားကို ကြွနေပြီ ။
ဒေါ်အေမီသွင် ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်တွေကို တခုပြီး တခု ချွတ်ပစ်နေသည် ။
သူလဲ ကုတင်ဘေးမှာ ထရပ်လိုက်ပြီး ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်တွေကို အကုန် ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။
စိုပြေတောင့်တင်းတဲ့ ဖြူဝင်းပြီး ပစ္စည်းကောင်းတဲ့ မိန်းမချောကြီးရဲ့ ကိုယ်လုံးတီးအလှအပတွေကို မြင်ရတဲ့အခါ သူ့စိတ်တွေ ထကြွသထက် ထကြွလာရသည် ။
မတ်မတ်ထောင်နေတဲ့ သူ့ဖွားဖက်တော် ကို ဒေါ်အေမီသွင် သေသေချာချာ ကြည့်ပြီး လက်နဲ့ ဖမ်းဆုပ်ကိုင်လိုက်သည် ။
“ တကယ့်ကို အားရစရာကြီးကွယ် ….မမလေ….လီးသေးပြီး မတောင်နိုင်တဲ့ မမရဲ့ လင်ကြီးနဲ့ ပေါင်းနေရတာ တကယ့် လောက ငရဲဘဲ….အိပ်မပျော်တဲ့ ညတွေ များခဲ့ပြီလေ …ဒါကြောင့် မမလေ..မင်းကို အကူအညီ တောင်းရတာပေါ့…”
ပြောနေရင်း ဒေါ်အေမီသွင်သည် လိင်တန်ကို ပွတ်သပ် ဖျစ်ညှစ်နေပါသည် ။
“ မင်းက လီးကြီးရုံမကဘူး..လိုးလဲ လိုးတတ်..လိုးနိုင်တယ်လေ ..မင်းနဲ့ တခါ ကြုံပြီးတဲ့နောက် မမလေ..မင်းကို စွဲသွားတယ်..မင်းကို တောင့်တမိတယ်..တမ်းတမိတယ်….ကွာ….”
ဒေါ်အေမီသွင်သည် လိင်တန်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်း ဒစ်လုံးကြီးကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စနမ်းလိုက်ပြီး..အရင်းပိုင်းကနေအဖျားပိုင်းထိ လျာနဲ့ ယက်လိုက်သည် ။
ထိပ်ဖျားကို နှုတ်ခမ်းထူထူအိအိတွေနဲ့ ပြွတ်ကနဲ ငုံကာ စုတ်လိုက်ရင်း ပြောလိုက်တာပါ ။ သူကလည်းဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ နို့ထွားထွားကြီး နှစ်လုံးကို လက်နဲ့ ကိုင်မိရသည် ။ နို့ကြီးတွေက နဲနဲ တွဲကျနေပေမယ့် တင်းမာလုံးဝန်းပြီး ကိုင်ဆုပ်လို့ ကောင်းတုံးပါဘဲ…။ နို့သီးခေါင်းအညိုရောင်ဖျော့ဖျော့လေးတလုံးကို လက်နဲ့ ပွတ်သပ်ကြည့်လိုက်တော့ မာတင်းနေတာ တွေ့လိုက်ရသည် ။ သည်အချိန်မှာ ဒေါ်အေမီသွင်သည် သူ့လိင်တန်ကို အားရပါးရဘဲ စုတ်နေပါပြီ ။
ရွှေရေး အစုတ်ကောင်းလှပြီ သူထင်တာ ဒေါ်အေမီသွင်က ပိုလို့ တော်နေသည် ။ စုတ်တာတွေ ကောင်းလွန်းလို့ တကိုယ်လုံး တုန်ခါသွားရပြီး နုတ်ဖျားက တအီးအီး ညည်းမိရသည် ။လျာလေးနဲ့ ပတ်ခြာလှည့်ပြီး ကစားပေးတာ ဘယ်သူခံနိုင်မလဲ ..။ သုတ်ရည်တွေ ပြွတ်ကနဲ ပန်းထွက်သွားခါနီးကိုဖြစ်သွားသည် ။ မနည်း စိတ်ထိန်းလိုက်ရသည် ။
မဖြစ်သေးပါဘူး..သူ့ကိုလည်း ကောင်းအောင် ပြန်လုပ်ပေးအုံးမှပါ…ဆိုပြီး ဒေါ်အေမီသွင်ကို စုတ်တာ ရပ်လိုက်ဖို့ သူပြောလိုက်သည် ။
“ ဘာလို့ ရပ်ခိုင်းတာလည်းဟင်…” “ မမ စုတ်ပေးတာ အရမ်းကောင်းပါတယ် ..ကျနော် ရပ်ခိုင်းရတာက မမကို ကျနော် ယက်ပေးချင်လို့ပါ..မမကို ကျနော် မှုတ်ပေးပါရစေ …”“ ဟင့်အင်း…မယက်ပါနဲ့….ရတယ်..ရတယ်…..”“ လာပါမမရယ်….လှဲအိပ်လိုက် ..မမ ကို ကောင်းစေချင်တယ်…မမ တအား ကောင်းအောင် ကျနော်မှုတ်ပေးမယ် …”
ဒေါ်အေမီသွင်က ပက်လက်လှဲချလိုက်တဲ့အခါ သူက ပေါင်တန်တွေကို ဖြဲကား လိုက်တဲ့အခါ ပေါင်ကြားက မိန်းမကိုယ် စောက်ဖုတ်ကြီးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေ့လိုက်ရတာနဲ့ သူ့လိင်တန်က အစွမ်းကုန် တင်းမာ ကြီးထွားလာတယ် ။ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ ပေါင်ကြားကို သူ့မျက်နှာ အပ်လိုက်ပြီး ထူထူအမ်းအမ်း နှုတ်ခမ်းသားကြီးတွေကို လျာအပြားလိုက်နဲ့ အောက်ကနေ အပေါ်ကို ပင့်တင်ကာ ယက်လိုက်တော့ ဒေါ်အေမီသွင်…“ အို..ဟိုဟို..အား…အ….” ဆိုပြီး တုန်ခါသွားပြီး သူမပေါင်တန်တွေကို စေ့ဖို့ ကြိုးစားတယ် ။ သို့ပေမယ့် သူက ပေါင်တန်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ကာ ဖြဲကားထားတာမို့ စေ့လို့မရဘူး ။ သူ့လျာက ဆက်တိုက်ဘဲ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဖိဖိ ယက်ပေးနေပြီ ..။“ အို….အား…ဟင်…အား…အ….အ……အင်ဟင်……အာ…အာ……”ဒေါ်အေမီသွင် သူ့ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ဖို့ ကြိုးစားတယ် ။“ တော်..တော်ပြီ…အား…အမလေး..မမ..မမ….မခံနိုင်တော့ဘူး…..အီး….”
ဒေါ်အေမီသွင် ဘယ်လောက် ရပ်ခိုင်းရပ်ခိုင်း သူက ဆက် ယက်တုံးဘဲ ..။ ဒေါ်အေမီသွင် တကိုယ်လုံး တုန်ခါ ခါးကော့ ခေါင်းရမ်းပြီး “ ပြီး ”သွားရတယ် ။ ဒီတော့မှ သူ ယက်တာကို ရပ်လိုက်ပြီး သူ့မျက်နှာကို ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကနေ ခွာလိုက်တယ် ။
“ မင်း..မင်း..အရမ်း လုပ်တတ်တာဘဲ ..”ဒေါ်အေမီသွင် ဆက်မပြောနိုင်တော့ဘူး ။ နှုတ်ခမ်းထူထူပြဲပြဲတွေ အနားကို သူ့လိင်တန်ကြီး တေ့ပေးလိုက်လို့ ..။ ဒေါ်အေမီသွင် ဖမ်းငုံကာ စုတ်လိုက်လို့ ..။
သူ့လိင်တန်က ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ အပြည့်အသိပ်ကြီး ဖြစ်နေတယ် ။ ဒေါ်အေမီသွင်လည်း သူ့စောက်ဖုတ်ကို ကောင်းကောင်း ယက်ပေးခဲ့လို့ တုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ သူ့လိင်တန်ကို စေတနာပါပါနဲ့ စုတ်ပေးနေတယ် ။
လျာနဲ့ ကလိပေးလွန်းလို့ တချက်တချက် ဆတ်ဆတ်ခါသွားရတယ် ။ ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ လကတဖက်က သူ့ေ၈ွးစိနှစ်လုံးကို ဆုပ်ကိုင်ချေနယ်ပေးနေတယ် ။ ဒေါ်အေမီသွင် စုတ်နေတဲ့အချိန် သူကလည်း လိင်တန်ကို နှုတ်ခမ်းထူထူတွေ အထဲကို ဖိဖိ ထိုးညှောင့်မိတယ် ။ဒေါ်အေမီသွင်က ဂွေးစိတွေကို ဆုပ်နယ်နေတဲ့ လက်ကို ဂွေးစိတွေ အောက်ဖက်ကို ပွတ်သပ် ကုတ်ခြစ်ပေးနေရင်း လိင်ချောင်းကို တအား စုတ်..သူကလည်း ထိုးညှောင့်တော့ မကြာခင်မှာဘဲ သူ့တကိုယ်လုံးက အကြောအချင်တွေ အီဆိမ့်သွားအောင် ကောင်းလွန်းသွားပြီး သုတ်ရည်တွေ တဖျောဖျော ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို ပန်းထုတ်လိုက်မိရတယ် ။
ဒေါ်အေမီသွင်လည်း ပါးစပ်ထဲ ပြည့်လျှံသွားတဲ့ သုတ်ရည်တွေကို တကွပ်ကွပ်နဲ့ မြိုချပစ်လိုက်တယ် ။
“ ကောင်းလားဟင်..မမ စုတ်ပေးတာ ….”
“ အင်း..အရမ်း ကောင်းတာဘဲ …”
ရေချိုးခန်းဆီကို လျှောက်သွားတဲ့ သူ့ကို ဒေါ်အေမီသွင်က “ မမကို တဝကြီး ချစ်ပေးရအုံးမှာနော် ….” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။
“ အင်း…ဒါပေါ့ မမ ..မမကို ကျေနပ်လောက်တဲ့အထိ ချစ်ပေးပြီးမှ ကျနော် ပြန်မှာ …။
တကယ်တော့ သူ ဒေါ်အေမီသွင်ကို ဒီလို လုပ်ပေးနေတာတွေက ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်အတွက် ပါ ..။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် ခိုင်းတာ ဆိုရင် သူ ဘာမဆို လုပ်ပေးမှာ လေ ..။
အလုပ်ပြောင်းရတဲ့အတွက် ရွှေန်းဘုံနဲ့ရော ရွှေရေးလွင်လွင်နဲ့ရော မတွေ့ဖြစ်တော့ဘူး ။နေရာသစ် ဘော့စ်အသစ်နဲ့ အသားကျအောင် လုပ်ကိုင်နေရတယ် ။နေရာသစ်က အတူတူ အလုပ်လုပ်တဲ့ အရာရှိတွေနဲ့ေ၈ါက် အတူတူ ရိုက်ဖြစ်တယ် ။ အရင်တုံးက လူကြီးအိမ်မှာ တာဝန်ချထား ခံရတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မပိုင်ဘူး ။ အခုတော့ စနေ တနင်္ဂနွေ ဆိုရင်ဂေါက်ရိုက် တင်းနစ်ရိုက် နဲ့ ဟန်ကျနေတာ ..။
ဂေါက်ရိုက်ပြီး အပြန် ကိုးမိုင်ဖက်က ဆိုင်တဆိုင်မှာ တဝိုင်းစားဖို့ ချိန်းလိုက်ကြတယ် ။ စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာ ရွှေရေးကို လူတယောက်နဲ့ ထိုင်စားနေတာ တွေ့လိုက်ရတယ် ။ ရွှေရေးက လှမ်းခေါ်လို့သူ သူတို့ စားပွဲကို လျှောက်သွားလိုက်တယ် ။ရွှေရေးက သူနဲ့ အတူတူ ထိုင်နေတဲ့ လူနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ် ။ သူ့လိုဘဲ စီးပွားရေး လုပ်တဲ့ ကိုဇော်ဝိတ်..သူ့ကို အမြဲ ဂရုစိုက်တယ်..သူ့မိဘတွေကလည်း ကိုဇော်ဝိတ်နဲ့ သဘောတူနေတယ်လို့ ပြောပြ မိတ်ဆက်ပေးတယ် ။ ကိုဇော်ဝိတ် ဆိုတဲ့ လူကလည်း သဘောကောင်းပုံရပါတယ် ။ ရွှေရေးကတော့ သူနဲ့ အသွင်တူတဲ့ လူကို ရှာသွားပြီ ။ ကိုယ့်စော် တခြား လူ လက်ထဲ ရောက်သွားတာကို စိတ်ထဲမှာတော့ သိပ် မကြိုက်ပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူကကို အချိန်မှ မပေးနိုင်ဘဲလေ ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ရွှေရေးအတွက် သူ ဝမ်းသာပါတယ် ။
ဒီနေ့ အလုပ်ကနေ အိမ်ပြန်ခါနီး ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် ဖုန်းဆက်တယ် ။ သတိရတဲ့အကြောင်း..အားရင် အိမ်လာခဲ့ပါအုံး …ပြောတယ် ။ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး ရေချိုးပြီးခါစမှာဘဲ ဖုန်းလာလို့ ကောက်ကိုင်လိုက်တော့ ရွှေနန်းဘုံ ဖြစ်နေတယ် ။ ရွှေနန်းက “ ရာထူးတိုးလို့ ဘဝင်မြင့်နေပြီလား..ဆရာကြီး..” လို့ စတယ် ။ နောက်တယ် ။ “ ရွှေနန်းကို မတွေ့ချင်တော့ဘူးလား..သတိမရဘူးလား..” လို့ မေးတယ် ။ “ တွေ့ချင်ပါတယ်..ရွှေနန်းရယ် …ရွှေနန်း အတွက် ဆိုရင် ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးမယ့်လူပါ..တခုခု ခိုင်းစရာ ရှိရင် ခေါ်သာ ခေါ်လိုက်”လို့ ပြောလိုက်တော့ “ အခု ခိုင်းမယ်..လာမလား..” လို့ တခစ်ခစ်နဲ့ ရယ်မောပြီး ပြောတယ် ။ လာမယ်လေ..ဘယ်ကို လာရမလဲ ” လို့ ပြန်မေးလိုက်တော့ မြို့သစ်က တိုက် ပြီးသွားပြီ..အခုတော့ ဆရာအေးကျော် ( သူတို့ အိမ်မှာ ဘာဘာညာညာ လုပ်ကိုင်ပေးတဲ့ လူ )ကို အစောင့်အဖြစ် ထားထားတယ် …အဲဒီကို လာခဲ့မလား…” လို့ မေးတယ် ။“ လာခဲ့မယ်..” လို့ ပြောပြီး ရွှေနန်း နဲ့ ချိန်းထားတဲ့ မြို့သစ်က တိုက်သစ် ဆီကို သူ သွားလိုက်တယ် ။
ရွှေနန်း တယောက်ထဲ စောင့်နေတယ် ။ အက်စကော့ လိုက်တဲ့လူ တကောင်တမြည်းမှ မတွေ့ဘူး ။ တိုက်ကို စောင့်ပေးတဲ့ ဆရာအေးကျော်လည်း မတွေ့ဘူး ။ ရွှေနန်း အားလုံးကို ဖယ်ရှားထားပုံရတယ် ။ တိုက်အပေါ်ထပ်ကို လိုက်ပြတယ် ။ အရမ်းကို ကောင်းပါတယ် ။ “ ရှင်ဘုရင့်ပုဆိုး ပိုးချည်း ” ဆိုသလိုပေါ့ ။ လူကြီး ဆောက်တဲ့ တိုက်ဆိုတော့လည်း သစ် အကောင်းစားတွေ ပေါပေါများများ သုံးထားတာကိုး ။ ကျွန်းသား အကွက်လှလှနဲ့ နံရံတွေက လှမှလှ ..။
“ ကောင်းလား …”“ အင်း..အရမ်းကောင်းတာဘဲ…”သူက ရွှေနန်းရဲ့ ခါးသေးသေး အောက်က တင်ပါးစွင့်စွင့်ကားကားတွေကို ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်တာ ..။“ အိုး..ဘာကြည့်နေတာလဲ..သူနော်…”
“ တကယ်ဘဲ ရွှေနန်းကို သတိရပါတယ် …”“ ဘာလို့ ဖုန်း မဆက်တာလဲလို့..”“ ကြောက်လို့..စိတ်ဆိုးမှာ စိုးလို့..”“ အံမာ..အပိုတွေ…ခိခိ …တကယ်ကြောက်လား ….”“ အင်း..”“ ခိုင်းတာ လုပ်မလား..”“ အင်း လုပ်မယ်..ခိုင်းလေ ….”သူ့နားနားကို နှုတ်ခမ်းလေး တိုးကပ်ပြီး..တိုးတိုးလေး..“ ချစ်ပေး..” လို့ ပြောပါတယ် ။
ကြက်သီးတွေ ထပြီး ပေါင်ကြားက ဖွားဖက်တော် က ဝုန်းကနဲ နိုးကြား လာရတယ် ။“ အင်း..ဘယ်အခန်းသွားကြမလဲ…”“ လာ…လာ…”
ရွှေနန်းက အိပ်ခန်းတခန်းကို ခေါ်သွားပါတယ် …။ ဒီ အိပ်ခန်းထဲမှာ ကုတင်အသစ်တလုံးနဲ့ အိပ်ရာခင်းအဖြူရောင် ခင်းထားတဲ့ ရေမြုပ်မွေ့ရာကြီးကို ခင်းကျင်းထားတာ တွေ့ရတယ် ။
အိပ်ခန်းထဲကို လှမ်း ဝင်လိုက်ချိန်မှာဘဲ သူ့ ဒုတ်က အရမ်းကို မာကျောတောင်မတ်လာတယ် ..။
ရွှေနန်းက သူ့ကို သိုင်းဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း စ စုတ်လိုက်တယ် ။ သူ့လက်တွေက ခါးကို ဖက်ထားတာကို ရွှေနန်းက သူ့လက်တွေနဲ့ ဆွဲဖြုတ်ပြီး တင်ပါးတွေဆီကို ပို့ပေးလိုက်တယ် ။ စွင့်အားတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို ဆုပ်ညှစ်တော့ အောက်မှာ ဘာမှ ခံ ဝတ်မထားဘူး ဆိုတာ သိလိုက်တယ် ။ စိတ်ရိုင်းတွေက မွှန်ထွန် ပြင်းထန်လွန်းလို့ ဘာကိုမှ မသိတော့ဘူး ။ ရွှေနန်းကို ဖြုတ်ဖို့ တခုဘဲ သိတော့တယ် ..။ ရွှေနန်းကလည်း သူ့ပေါင်ကြားနေရာကို လက်ကလေးနဲ့ စမ်းလိုက်တယ် ။
နှုတ်ခမ်းချင်းအကွာ..“ ဟင်း..တောင်နေပြီ..” လို့ တိုးတိုးလေး ပြောတယ် ..။ ရွှေနန်း ဒုတ်ကို ကောင်းကောင်း ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်တယ် ..။ပြိုင်တူလို ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ပစ်ကြတယ် ။ ရွှေနန်း ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားတာနဲ့ လုံးဝန်းတင်းမာတဲ့ ရင်စိုင်တွေကို သူ အငမ်းမရဘဲ စို့ပစ်မိတယ် ။ ဆုပ်နယ်မိတယ် ။
ရွှေနန်း အချိုးအဆက်က တအား မိုက်နေတယ် ။ ရင်သားစိုင်တွေက တင်းမာ ကော့ထောင်နေကြတယ် ။ မတွေ့ကြတာ ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်လုံး ကိုယ်ပေါက်က ပို ကြည့်ကောင်းလာသလိုဘဲ ။
စွင့်ကားတဲ့ ရွှေနန်းရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကိုလည်း အားရပါးရကို နယ်ပစ်တယ် ။ နှစ်ယောက်စလုံး မတွေ့တာ မလုပ်တာ ကြာလို့ အရမ်းကို အငမ်းမရ ဖြစ်နေကြတယ် ။ ရွှေနန်းကလည်း သူ့လိင်တန်ကြီးကိုရှေ့တိုးနောက်ငင် ပွတ်တိုက်ရင်း သူတို့နှစ်ယောက် ကုတင်ပေါ်ကို လဲကျသွားကြတယ် ။ သူက ရွှေနန်းကိုယ်ပေါ်ကို ရောက်သွားတယ် ။
ရင်စိုင်တဖက်က ရင်သီးမာမာလေးကို ငုံဟတ်ပြီး တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စို့လိုက်ရင်း ပေါင်တန်တွေကို လက်နဲ့ ဘေးကို တွန်းပို့လိုက်ပြီး သူ့လိင်တန်နဲ့ ရွှေနန်းရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးကို တေ့လိုက်တယ် ။ စိုစွတ်နူးညံ့တဲ့အင်္ဂါစပ်ကြီးနဲ့ လိင်တန်ထိပ်ဖူး ထိတွေ့လိုက်တော့ စိတ်တွေက ထိန်းမရအောင် ထကြွ သွားရတယ် ။ရွှေနန်းက သူ့လက်မောင်းတွေကို တအား ဆုပ်ကိုင်ထားတယ် ။
လိင်တန်ကို ဖိသွင်းလိုက်တော့ တထစ်ထစ်နဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ အင်္ဂါစပ်ပေါက်ထဲကို တိုးဝင်သွားတယ် ။ ရွှေနန်းလည်း “ အိုး…..အီး….” လို့ ညည်းငြူလိုက်ပြီး ခါးလေးကော့သွားတယ် ။ သူ့လက်မောင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ရွှေနန်းရဲ့ လက်က လက်သဲတွေက သူ့လက်မောင်းသားထဲကို စူးနစ်ဝင်သွားတာကိုလည်း ခံစားလိုက်ရတယ် ။
သူ့လိင်တန်ကို အဆုံးထိရောက်အောင် ထိုးသွင်းလိုက်တယ် ။ သူ့လိင်တန်တခုလုံး ရွှေနန်းရဲ့ ကိုယ်ထဲမှာ ရောက်နေပြီ ။ ဖြေးဖြေးချင်း အသွင်းအထုတ် ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်တော့ ရွှေနန်း တဟင်းဟင်းနဲ့ တင်ပါးကြီးတွေ လှုပ်ခါလာတယ် ။ ရွှေနန်းရဲ့ ရင်စိုင်တွေကို ဆုပ်နယ်ပေးရင်း ဖင်ကို ကော့ပြီး သူလုပ်တော့ ရွှေနန်း တအားကြိုက်ပြီး အောက်ကနေ ပြန် တုန့်ပြန်တော့တာဘဲ ..။
ရွှေနန်းဟာ တော်တော် အောက်ပေးကောင်းတဲ့ မိန်းမတယောက်ဘဲလို့ မှတ်ချက်ချမိတယ် ။ ရွှေနန်းကိုယ် အောက်ပိုင်းကို မွှေ့ရမ်းပေးလိုက် ကော့ပင့်ပေးလိုက် လုပ်တော့ အရမ်းကောင်းလွန်းလာလို့ပြီးခါနီး ဖြစ်ဖြစ်သွားရတယ် ။ ဒီလို မွှေ့ရမ်း ကော့ပင့်ပေးနေတော့ ရင်စိုင်ကြီးတွေက တုန်ခါ လှုပ်နေကြတယ် ။ ရွှေနန်းက “ နို့တွေကို ကိုင်ပေး…” လို့ ပြောလို့ သူ့ရင်သားစိုင် တဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ထည့်ပေးတယ် ။ တော်တော်လေး ကြာအောင် ဆောင့်ပေးအပြီး ရွှေနန်းက “ ပုံစံပြောင်းရအောင်..” လို့ ပြောလို့ ဆောင့်ပေးနေတာတွေကို ရပ်ပစ်လိုက်တယ် ။ရွှေနန်းက ပါးစပ်က ဘာမှ မပြောပေမယ့် လေးဘက်ထောက် ကုန်းပေးလိုက်တယ် ။တင်ပါးဖြူဖြူကြီးတွေရဲ့ အနောက်ကို သူ နေရာ ဝင်ယူလိုက်တယ် ။ စအိုပေါက် နီညိုညိုလေးရဲ့ အောက်က အင်္ဂါစပ်ကြီးက နှုတ်ခမ်းသားထူထူတွေနဲ့ အရေတွေ စိုပြောင်လို့ ပြေး ယက်ချင်စရာ တွေ့လိုက်ရတော့ သူ့လိင်တန်နဲ့ ထိုးသွင်း စပ်ယှက်ရမယ့်အစား ကုန်းပြီး လျာနဲ့ ယက်ပစ်လိုက်မိတယ် ။
“ အို့…မယက်နဲ့တော့လေ ..အကို…လိုး…လိုးပါ…..ရွှေနန်း လိုချင်လှပြီ…..”
“ စိတ်ချ..စိတ်ချ…..အကို လိုးမှာ…..ကောင်းကောင်းကို လိုးပေးမယ် .”
အင်္ဂါစပ်ကြီး အဝမှာ လိင်တန်ကို တေ့ပြီး ဖိသွင်းလိုက်တယ် ..။
တချက်ချင်း မှန်မှန်လေး အသွင်းအထုတ် လုပ်လိုက်တယ် ။ ရွှေနန်း ဖင်ကြီး ထောင်ပေးပြီး မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားတယ် ။ ရွှေနန်း အင်္ဂါစပ်ထဲကို သူ့လိင်တန် တစွပ်စွပ် တဖတ်ဖတ်နဲ့ ဝင်သွားလိုက် ပြန်ထွက်လာလိုက် ဖြစ်နေတာကို သူ တွေ့နေရတယ် ။ လိင်တန်ကတင် အရသာ ရှိနေတာ မဟုတ်ဘဲ ဒါကို မြင်နေရတဲ့ မြင်ကွင်းကလည်း အရသာ ရှိနေတယ် ။
ရွှေနန်း ရဲ့ ခါးသိမ်လေးကို လက်နဲ့ ဆုပ်ပြီး အားနဲ့ ဆောင့်ပေးနေတယ် ။ စိုစိုစီးစီး ကြပ်တည်းတဲ့ အင်္ဂါစပ်ပေါက်ထဲ ထိုးဆောင့်နေတာတွေက တစွပ်စွပ် တဖတ်ဖတ် အသံတွေ ညံလာတယ် ။
သူဆောင့်လိုက်တိုင်း ရွှေနန်းရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေက တုန်ခါသွားတယ် ။ အသားချင်း ထိရိုက်သံတွေကလည်း တဖတ်ဖတ် နဲ့ ထွက်ပေါ်နေတယ် ။
ဒီအချိန်မှာ သူ့အနောက် အခန်းဝက ခြေသံလိုလို ကြားလိုက်မိလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူတို့ လုပ်နေတာကို ဒေါသထွက်နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်နေတဲ့ ဒေါ်ရွှေစင်သန့်ကို မမျှော်လင့်ဘဲတွေ့လိုက်ရပါတယ် ။
“ ဟာ…မာမီ……….”ရွှေနန်းကို ဖင်ပူးတောင်းထောင် ပုံစံနဲ့ဆောင့်ထည့်နေတဲ့အချိန် ဂျက်ချမထားတဲ့ တံခါးကို ဖွင့်ပြီးဒေါ်ရွှေစင်သန့် ဝင်လာတာ ..။
သူလှည့်ကြည့်လိုက်သလိုဘဲ ရွှေနန်းကလည်း ခေါင်းလေးငဲ့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူ့မာမီကို မြင်တယ် ။ ရွှေနန်း အင်္ဂါစပ်ထဲ တန်းလန်း တပ်ရက် သူ့လိင်တန်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ အရည်ပျစ်ချွဲချွဲတွေ နဲ့ စိုလူးနေတဲ့ သူ့လိင်တန် မတ်တောင်ရက်သား ထွက်လာတယ် ။
ဒေါ်ရွှေစင်သန့်က လက်သီး ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်..မျက်နှာနီရဲတွတ်ပြီး မျက်လုံးပြူးပြီး ကြည့်နေတယ်။ ဘာမှ မပြောဘူး ။ ရွှေနန်းနဲ့ သူ အဝတ်အစားတွေ အမြန် ကောက်ယူ ဝတ်လိုက်ကြတယ် ။
ဒေါ်ရွှေစင်သန့် ရွှေနန်းဘုံရဲ့ လက်ကို ဆွဲပြီး အခန်းထဲက ထွက်..အောက်ထပ်ကို ဆင်းသွားတယ် ။
ဒေါ်ရွှေစင်သန့် ရောက်လာတာကို လုံးဝ မသိလိုက်ဘူး ။ ကားသံလည်း မကြားလိုက်ဘူး ။ ကာမကိစ္စလုပ်နေလို့ရှိရင် ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်မိတော့ဘူး..မသိတော့ဘူး..လို့ သိဘူး ကြားဘူးတာ တကယ့်ကိုမှန်နေတာဘဲ ..။
မိုးမီးတော့ လောင်တော့မယ် ။အဖိုးကြီး သိရင် ပါးရိုက်မလား..ခြေထောက်နဲ့ ပိတ်ကန်မလား မသိဘူး ။
အိမ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖုန်းဆက်လာတာကို စောင့်နေမိတယ် ။ ညသန်းကောင်အထိ ဘယ်သူမျ ဖုန်းဆက် မလာဘူး ။ ဟူး….ဖြစ်သမျှ ရင်ဆိုင်ရုံပေါ့ ။ မနက်ဖန်မနက် အလုပ်ရောက်ရင် ဖမ်းဘဲ ချုပ် ခံရမလားဒါမှမဟုတ် နုတ်ထွက်စာ တင်ခိုင်းလေမလား..ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ တညလုံး အိပ်လို့မရဘူး ။
မထူးဘူး ဆိုပြီး ရွှေနန်းဘုံနဲ့ သူ့ကို လက်ဆက်ပေးလေမလား လို့ အရင်တုံးက တွေ့ဖူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းဟောင်းတွေ ကို သတိရပြီး တွေးမိတယ် ။ မနက်ကျတော့လည်း ပုံမှန်..ဘာမှ မထူးခြားတာကို တွေ့ရတယ် ။ အလုပ်မှာလည်း တနေ့လုံး စိတ်သောက ရောက်နေရတယ် ။
ညနေ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး အဝတ်အစား ချွတ်နေတုံး ဖုန်းလာတယ် ။စိတ်ထဲမှာ ဒုန်းကနဲ အသံမြည်သွားတယ် ..။
လာပြီ …။ဘာစီရင်ချက် ချမလဲ သိရတော့မယ် …။
“ အမိန့်ရှိပါ..ထင်အောင်ကျော် ပါ…..”“ ဟိတ်….ဒို့ပါ..အေမီသွင် …. ”ဒေါ်အေမီသွင် ခေါ်တာ ..။
“ ဘယ်လိုလဲ ထင်အောင်ကျော် …မင်း လီး သရမ်းလှချည်လား….”“ ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိလို့ ဘာမှ မပြောမိဘူး ။
“ မင်းကွာ…ရွှေစင့်ကို လုပ်ခိုင်းတာ ရွှေဖြူ့သမီး သွားလုပ်တယ် ..ခုတော့ ခက်ကုန်တာပေါ့…ရွှေစင် မင်းကို စိတ်ဆိုးနေတယ် … …မင်းတို့ ကို လုပ်နေရင်း …တန်းလန်းကြီး…မိတာဆို …. ”
“ ဟုတ်တယ်……မမ ”
“ ရွှေဖြူက အဖိုးကြီးကိုတော့ မပြောဘူးကွ…..အဲ……ခုထိ မပြောသေးဘူး…..ရွှေနန်းဘုံကိုတော့ဆူဆဲပြီးအပြင်ထွက်ခွင့် ပိတ်တာပေါ့လေ….”
“ မင်းက မမ နဲ့ ဒီလောက် “ နေ ” ရတာကို အားမရဘူးလား …ကလေးမလေးကို သွား စားတယ်…ခိခိ …. ”
“ ဘာဆက်ဖြစ်မယ် ထင်လဲဟင်…မမ….”
“ ကြည့်ရတာ ရွှေဖြူက မင်းကို စိတ်ဆိုးပေမယ့် ဒုက္ခလည်း မရောက်စေချင်ဘူး …သိတယ် မှုတ်လား..
အဖိုးကြီး က ဘာမှ မလုပ်ခိုင်းတောင်..“ မျက်နှာအားရ ” အောက်က လူတွေက ၀ိုင်း “ သမ ” မှာကွ ”
“ ထူးခြားရင်..မမ မင်းဆီ ဖုန်းဆက်မယ် …အင်း..မင်းနဲ့လည်း တွေ့ချင်တယ် …လတ်တလော မမ လင်ကြီး ပြန်ရောက်နေတယ်…. မမနဲ့ မင်း တနေရာရာမှာ တွေ့မှရမယ် …. အင်းလေ..မင်းလည်း စိတ်တွေ
ပူနေမယ် ဆိုတာ မမ သိပါတယ် …ကဲ..ကဲ..ဘာမှ မပူနဲ့…မမလည်း ရွှေဖြူ့ကို ၀ိုင်း ပြောပေးပါမယ် ..”
ဒေါ်အေမီသွင် ၀ိုင်းပြောလို့လား …“ အဘ ” ကို မတိုင်လို့လား …ဘာကြောင့်လည်းတော့ မသိဘူး …ရွှေနန်းဘုံတို့ အိမ်က ဘာမှ မဆက်သွယ်လာဘူး ။
နောက် နှစ်ပတ်လောက် အကြာ ပဲခူးရိုးမတောင်ခြေက ရွာတရွာ အနားမှာ သူ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေ
နဲ့ အမဲလိုက် သွားဖြစ်တယ် ။ သားကောင်တွေကလည်း လူတွေ ပစ်ခတ် ထောင်ဖမ်းတာတွေ များလို့အနီးအနားမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ ပစ်လို့ မရတော့ဘူး ။
စခန်းချတဲ့ တောထဲက တဲကလေးမှာ သူတို့ အိမ်က ပါလာတဲ့ စားစရာတွေ နဲ့ အရက်နဲ့ မြည်းကြ
တယ် ။ ဗိုလ်ကြီး မင်းကိုလတ် က “ အကိုကြီး…အဘ ရဲ့ သမီးစေ့စပ်တာ သိတယ်နော် ..” လို့ ပြောလို့ အံ့သြသွားရတယ် ။
“ အကိုကြီးက မသိဘူးလား..သတင်းစာထဲမှာ ပါတယ်လေ …”
“ မတွေ့လိုက်မိဘူး….ကိုယ်က သတင်းစာ သိပ် မဖတ်ဖြစ်ဘူး….”
“ အကိုကြီး သိမယ် မှတ်လို့…”
“ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တယောက်ရဲ့ သား …အကိုကြီး …. ”
“ အဟီး….ကျနော်တို့က အဘသမီးနဲ့ အကိုကြီးနဲ့က တပူးပူးတတွဲတွဲ တွေ့တွေ့နေတော့ အကိုကြိးနဲ့များလားလို့ ထင်တာ….”
ရွှေနန်းဘုံ စေ့စပ်လိုက်တာ သူ မသိလိုက်ပါ ။
လက်ထပ်တဲ့အခါကျတော့ သူ သိရတယ် ။ ဒေါ်အေမီသွင်က ကြိုတင်ပြီး ပြောပြတယ် ။ နောက်တော့သတင်းစားထဲမှာလည်း သူ တွေ့ရတယ် ..။
၂၀၁၅ခုနှစ် မေလဆန်း …။ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ …။JOY နိုက်ကလပ် …။
“ ရွှေနန်းဘုံတို့ ရွှေရေးလွင်လွင်တို့နဲ့ အန်ကယ်လ် ထပ် တွေ့ဖြစ်သေးလား ..အဲ..ဟိုလေ..ထပ်ကော ဝုန်း ဖြစ်သေးလား ….. ”
ဆွေလှိုင်ဝင်း က အရက်ကို အရသာခံ သောက်နေတဲ့ ဦးထင်အောင်ကျော်ကို မေးလိုက်တယ် ။
ဦးထင်အောင်ကျော်က “ အင်း…ရွှေရေး နဲ့ကတော့ အန်ကယ်လ်နဲ့ ထပ် မတွေ့ဖြစ်တော့ဘူးကွ….
ခုန ပြောလက်စကို ဆက်ပြောရရင်…ရွှေနန်းဘုံ လက်ထပ်ပြီး မကြာခင်မှာဘဲ…တိုင်းပြည်တခုလုံးက ပြည်သူလူထုတွေ အုံကြွ ဆန္ဒပြ တဲ့ အရေးအခင်းတွေ ဖြစ်လာတယ် ..၈၈ခုနှစ်လေ …အဲဒီနောက်ပိုင်း ခေတ်တွေ ပြောင်းလာပြီး ကုမ္ပဏီတွေ ဖွင့်ခွင့်
လုပ်ခွင့် ပေးလာတော့ ရွှေနန်းဘုံလည်း ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဖြစ်တော့တာဘဲ .. ရွှေနန်းဘုံနဲ့ကတော့ တွေ့ဖြစ်တယ် …အခု အန်ကယ် လုပ်နေတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေက ရွှေနန်းဘုံကြောင့် ရခဲ့တာ လို့လည်း ပြောနိုင်တာပေါ့ ….
ဝုန်း…အဲ…ဟိုဒင်းဒီဒင်းတော့ မလုပ်ဖြစ်ကြတော့ပါဘူး ..သူလဲ ယောက်ျားနဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ဖြစ်နေပြီလေ …” လို့ ပြောပြပါတယ် ။
ဆွေလှိုင်ဝင်းနဲ့ ဦးထင်အောင်ကျော်သည် အလုပ်တခုကို အတူတူတွဲလုပ်ရင်း အရမ်း ရင်းနှီးသွားခဲ့တယ်
။ အတူတူနေ အတူတူစား တကယ့်ကို ခင်မင်သွားကြတယ် ။ ဦးထင်အောင်ကျော်ဟာ စစ်မှုထမ်းတယောက် ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို ဆွေလှိုင်ဝင်း သိထားတယ် ။
အရက် အတူတူ အမြဲ သောက်ဖြစ်ကြတော့ တနေ့မှာ ဆွေလှိုင်ဝင်းက ဦးထင်အောင်ကျော်ကို သူ ငယ်ငယ်က အတွေ့အကြုံတွေ ပြောပြဖို့ တောင်းဆိုတော့ ဦးထင်အောင်ကျော်ကသူ့ဘဝ အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။
ယခုတိုင် လူလွတ်တယောက် ဘဲ ဖြစ်နေတဲ့ ဦးထင်အောင်ကျော်ဟာ ခေါင်းက ဆံပင်တွေ ဖွေးဖွေးလှုပ်ဖြူနေသည့်တိုင် လူငယ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဆွေလှိုင်ဝင်းတို့နဲ့ ဘန်ကောက်မြို့က ဆွိုင်းကောင်းဘွိုင် ..နာနာ…ပတ်ပုန်း စတဲ့နိုက်ကလပ်တွေ
ရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ပျော်တုန်း ကဲတုန်း ဆွဲတုန်း ဖြုတ်တုန်း ဖြစ်ပါတယ် ။
“ အန်ကယ်လ် ..ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်နဲ့ကော နောက်ပိုင်း ထပ် ဆုံဖြစ်သေးလားဟင်..”
“ ရွှေနန်းဘုံ လက်ထပ်ပြီး နောက်ပိုင်း အန်ကယ်နဲ့ ထပ် မဆုံတော့ဘူးကွ…”
“ ဒေါ်အေမီသွင် နဲ့ကော ထပ် ဆွဲဖြစ်သေးလား …”
“ ဟီး…အင်း…အဲဒီအချိန်တုံးက ………သူနဲ့တော့ တခါ နှစ်ခါ ထပ် တွေ့ဖြစ်ခဲ့သေးတယ် …”
“ ဒေါ်အေမီသွင်နဲ့ ဆွဲတဲ့ ဟာလေးတွေ “ ဒီတေးလ်..အသေးစိတ်လေးတွေ” လုပ်ပါအုံး ..အန်ကယ်လ်..”
“ အေးဆေးပေါ့ကွာ..နောက်တော့ ပြောပြတာပေါ့..ဒီညတော့ ဒီမျှဘဲကွာ….ဟီး…ဟိုမှာ..ကောင်မလေးစောင့်နေတယ် …. ”